Articles – Civil Rights Movement
Posted by: rightsforburma | on May 18, 2018
၁၃၈၉ ခုနှစ် ဥရောပတောင်ပိုင်း kosovo ဒေသ ဘလက်ဘာဒ် ကွင်းပြင်မှာ တိုက်ပွဲတခုဖြစ်ခဲ့တယ်။
အော်တိုမန်တာခ်တွေနဲ့ ဆာဘ်တွေ တိုက်ခဲ့ကြတာ ။ တာခ်တွေရဲ့အောင်ပွဲနဲ့အတူ kosovo ဒေသဟာ အပြောင်းအလဲတခု စခဲ့တယ်။ အလ်ဘေးနီးယား နဲ့ ဆားဘီးယား ကြားက မကြာခဏလက်လွှဲပြောင်းပီး နယ်မြေလုခဲ့ရတဲ့ kosovo ဒေသလေးဟာ တာခ်တွေရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ နှစ် ၅၀၀ လောက် ဝပ်ဆင်းသွားပါတော့တယ်။ ဘော်လ်ကန်ဒေသမှာ ပတ်ချာလည်လူမျိုးစုတွေကို နှိပ်ကွပ်ပီး ဗဟိုလူမျိုးစုအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်တဲ့ ဆာဘ်တွေဟာ kosovo မှာဦးကျိုးခဲ့ရတယ်။ ဒီသိက္ခာကျ ရမှုနဲ့နာကျဉ်းမှုကို ဆာဘ်တွေဟာ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့တာ နှစ် ၆၀၀ ကျော်အထိ လက်ဆင့်ကမ်းလို့ကောင်းတုန်း။ ပဒေသရာဇ်ခေတ်ကစစ်ပွဲတရပ်ရဲ့ နာကျဉ်းမှုဟာ ၂၀ရာစု ကွန်မြူ နစ်ခေတ် နဲ့ ကွန်မြူ နစ်ခေတ်လွန်ကာလ အထိ ရှင်သန်တုန်းပဲ။ kosovo ဒေသအတွင်းမှာ အနှိမ်ခံအနေနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေဟာ ဘလက်ဘဒ်တိုက်ပွဲအပီးမှာတော့ ဆာဘ်တွေနဲ့ ပခုံးချင်းယှဉ်လာခဲ့တယ်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စတွေမှာ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေနေရာရလာတယ်။
ဆာဘ်တွေအတွက်ကတော့ စစ်ပွဲရှုံးနိမ့်ရခြင်းရဲ့နာကျည်းမှုဟာ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေအပေါ် ရွှံရှာမှုနဲ့ တထပ်တည်းဖြစ်ခဲ့ရပီ။ ဒီလို ၁၂ ရာစုကအခြေတည်လာတဲ့ ဆာဘ်နဲ့ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေရဲ့ အမုန်းတရားဟာ ၂၀ ရာစုမှာ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှု အဖြစ်ပေါက်ကွဲထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ဆာဘ်တွေရဲ့ အမြင်က ”အလ်ဘေးနီးယန်းတွေဟာ အောက်တန်းစားကျွန်သာသာလူမျိးတွေဖြစ်ပီး တာခ်တွေရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကို အခွင့်ကောင်းယူပီး kosovo ကို ခိုးဝင်လာတဲ့ ကောင်တွေ ” ။ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေရဲ့အမြင်က ” ဆာဘ်တွေဟာ နယ်ချင်းကပ်လျက်လူမျိုးစုငယ်တွေကို အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့သူတွေ / တာခ်တွေရောက်လာလို့သာ တို့တွေသက်သာရာရတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်ခွင့်သာခိုက်မှာ ပြန်ဆော်ကြစို့ ” ။ ဒီလို လိပ်ခဲတည်းတည်းအခြေအနေဟာ အော်တိုမန်အင်ပါယာပြိုကျခြင်းနဲ့အတူ လောက ငရဲတွေစခဲ့တယ် ။
View of makeshift camp in the region of Blace, on the border between Kosovo and The former Yugoslav Republic of Macedonia. Up to 65,000 Kosovar refugees were caught in this no-man’s-land before being allowed to enter The former Yugoslav Republic of Macedonia several days later.
ပထမကမ္ဘာစစ်မှာ အော်တိုမန်တူရကီ စစ်ရှုံးတယ် ။ ဆာဘ်တွေဟာ kosovo ဒေသကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ် / ဆာဘ်တွေရဲ့ သိမ်းပိုက်မှုကို စစ်နိုင် အင်္ဂလိပ်နဲ့ ပြင်သစ်က အသိအမှတ်ပြု ခဲ့တယ်။
ဒီနောက်မှာတော့ kosovo က အလ်ဘေးနီးယန်းတွေရဲ့ဘဝက ကျားသနားမှ နွားချမ်းသာ အဆင့်ရောက်ခဲ့တယ်။ ဆာဘ်တွေအတွက်ကတော့ မဟာလက်စားချေပွဲကြီးနွှဲရပီပေါ့လေ။ ပထမကမ္ဘာစစ်နဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြားကာလဟာ ကိုဆိုဗားအလ်ဘေနီးယန်းတွေအတွက်တော့ ငရဲပဲ။ အုပ်ချုပ်ရေး စီးပွားရေး ပညာရေး ရှိသမျှ နယ်ပယ်မှာ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်တယ် ။ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေ တယောက်မကျန် kosovo ကထွက်သွား ။ ဆာဘ်တွေကဒါကို အပြောသပ်သပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ၁၉၃၈ မှာ ဆာဘ်တွေဟာ စစ်ရှုံးတူရကီနဲ့ စာချုပ်တခု ချုပ်ဆိုခဲ့တယ် ။ ” မင်းတို့ တာခ်တွေ ခေါ်သွင်းလာခဲ့တဲ့ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေကို မင်းတို့ပြန်ခေါ် / ၆ နှစ်အတွင်း အလ်ဘေးနီးယန်း ၄သိန်းလောက်ကို တူရကီပြန်ခေါ်ရမယ် / ဒါဟာ ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်း တွေရဲ့ ၇၅% ပဲ / ဒီပြန်ခေါ်ရေးအစီအစဉ်ကို ၁၉၃၉ မှာ စတင်အကောင်အထည်ဖော်မယ် ”
1938 – 1389 = 549
နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်က အခြေစိုက်လာတဲ့ လူသားမျိုးနွယ်တရပ်ကို မောင်းထုတ်ဖို့ စာချုပ် ။ ဒီစာချုပ်က တရားဝင်သဘောတူလက်မှတ်ထိုးတဲ့အဆင့်ရောက်ခဲ့တယ် ။ ပဒေသရာဇ်ခေတ်က စစ်ပွဲတရပ် / လူ့သဘာဝ ရေကြည်ရာမြက်နုရာပြောင်းရွှေ့တဲ့ခေတ်က အဖြစ် ။ ဆာဘ်တွေကိုယ်တိုင်လည်း တခြားလူမျိုးစုတွေကို စစ်အနိုင်တိုက်ပီး သိမ်းပိုက်အခြေချတာတွေရှိပေမဲ့လည်း ဘလက်ဘဒ်စစ်ပွဲအပီး အလ်ဘေးနီးယန်းအခြေချမှုကိုတော့ နှစ် ၅၀၀ ကြာသည်အထိ ခိုးဝင်မှုလို့ သတ်မှတ်တုန်းပဲ ။
နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ကျော် ကြာသည်အထိ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေဟာ ခိုးဝင်တွေဖြစ်ဆဲပဲ။ဆာဘ်တွေကိုယ်တိုင်က ခရိုအတ်တွေ မက်ဆီဒိုးနီယန်းတွေကို စစ်ဆင်နွှဲပီး နယ်မြေတွေသိမ်းပိုက်အခြေချမှုတွေက ကြီးမြတ်လေသော ဆားဘီးယားအင်ပါယာအဖြစ် တရားဝင်ဂုဏ်ယူစရာပေမဲ့ ဆာဘ်တွေစစ်ရှုံးလို့ တခြားလူမျိုးတွေရဲ့ အခြေချမှုကတော့ ခိုးဝင်မှုပဲ ဖြစ်နေဆဲပါ။ ၁၉၃၈ စာချုပ်ဟာ ၁၉၃၉ မှာစတင်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ရှိပေမဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ထဖြစ်လိုက်တော့ လက်တွေ့အကောင်အထည် မပေါ်တော့ဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့လည်း ကမ္ဘာစစ် ၂ခုကြားကာလအတွင်း ဆာဘ်တွေနှိပ်ကွပ်လို့ အလ်ဘေးနီးယန်း ၁သိန်းခွဲလောက်ဟာ kosovo ကနေ ထွက်ပြေး ခဲ့ရပါသတဲ့။
ကမ္ဘာစစ် ၂ခုကြားကာလအတွင်းမှာ ဆာဘ်တွေဟာ မူရင်းဆားဗီးယားနိုင်ငံအပြင် ဘော့စ်နီးယား / ခရိုအေးရှား / ဆလိုဗေးနီးယား / မက်ဆီဒိုးနီယား / မွန်တီနီဂရိုး စတဲ့ နိုင်ငံတွေကိုပါ ဆားဘီးယားအင်ပါယာအဖြစ် သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆာဘ်လူမျိုးတွေဟာ မူရင်းဆားဘီးယားမှာ အဓိကနေထိုင်သလို ဘာ့စ်နီးယား နဲ့ ခရိုအေးရှားမှာပါ ပျံ့နှံ့နေထိုင်ပါတယ် ။ မွန်တီနီဂရိုးဟာလည်း ဒေသနာမည်သာဖြစ်ပီး ဆာဘ်လူမျိုးတွေပါပဲ ။
ခရိုအေးရှားနဲ့ ဘော့စ်နီးယားမှာတော့ ဆာဘ်တွေဟာ ကျန်တဲ့လူမျိုးစုတွေနဲ့လည်း ရန်တစောင်စောင်ဖြစ်နေဆဲပါ
အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာတိုးတောင်းတဲ့ ခရိုအတ် နဲ့ ဘော့စ်နီးယန်းတွေကို ဆာဘ်တွေက နှိပ်ကွပ်အုပ်ချုပ်လျက် မဟာဆားဗီးယားအင်ပါယာကို လည်ပတ်ပါတယ်
မျက်လုံးထဲမြင်အောင်ပြောရရင် ဗမာတွေက မူရင်းတိုင်းဒေသတွေမှာ အင်နဲ့အားနဲ့နေထိုင်ပီး ကချင် ရှမ်း ချင်းတွေကို နှိပ်ကွပ်သိမ်းပိုက်လျက် အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေမှာပါ ပျံ့နှံ့နေထိုင်သလိုပါပဲ ။
ဗမာတွေက ကချင် ရှမ်း ချင်းတွေကို ပြည်နယ်အဆင့်နဲ့ လျှော့ချအုပ်ချုပ်တာကတော့ ဆာဘ်တွေက ကျန်တဲ့လူမျိုးစုတွေကို republic အဆင့်ပေးတာနဲ့ယှဉ်ရင် ဗမာက ဆာဘ်ထက် လူပါးပိုဝတာကို မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ kosovo ဒေသကတော့ မူရင်းဆားဗီးယားနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိပါတယ် / kosovo ဒေသနဲ့ နယ်ချင်းကပ်နေတာကတော့ သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ အလ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံပါ ။ ဆာဘ်တွေကတော့ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေဟာ တာခ်တွေအားကိုးနဲ့ kosovoဒေသကို ခိုးဝင်လာသူတွေလို့ စွပ်စွဲတာပါ။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ စစ်နိုင်အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ အတူ ဘင်္ဂလားကခိုးဝင်လာသူတွေဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ထပ်တူကျလျက်ရှိခြင်းကတော့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေရဲ့ နောက်ခံ စိတ်သဘောထားတူညီမှုပါပဲ
ဒုတိယကမ္ဘာကာလအတွင်းမှာ ဂျာမန်တွေဟာ ဆားဗီးယားအင်ပါယာကို သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။
မူလအရှင်သခင်ဆာဘ်တွေနေရာမှာ အရှင်သခင်သစ်ဂျာမန်တွေရောက်လို့လာပါတယ်။ ဆာဘ်တွေရဲ့ရန်ဘက် ခရိုအတ်တွေကတော့ နာဇီဂျာမန်တွေနဲ့ ပေါင်းလျက် ဆာဘ်တွေကိုပြန်နှိပ်ကွပ်ပါတယ်
ဒီနေရာမှာ ဂျာမန်တွေရဲ့လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တခုကို ပြောရပါမယ်။ ဂျာမန်တွေဟာ ဘော်လ်ကန်ဒေသကို သိမ်းပိုက်တာဟာ ခရိုအတ်တွေ ဘော့စ်နီးယန်းတွေကို ဆာဘ်တွေလက်အောက်က လွတ်မြောက်စေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ စစ်ရေးရည်ရွယ်ချက်သပ်သပ်နဲ့ သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပီး ဒေသခံအနှိပ်ကွပ်ခံ ခရိုအတ်တွေက သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းတော့ အသုံးချတဲ့သဘောပါ ။
ဆာဘ်တွေဘက်မှာလည်း ဂျာမန်တွေရဲ့ သိမ်းပိုက်မှုကို မုန်းတီးတဲ့သူတွေရှိသလို ရောက်လာတဲ့ဂျာမန်ကို ဖားပီး အာဏာဆက်မြဲလိုသူတွေရှိနေပါတယ် ။ အဲ့သလို ဆာဘ်တွေကိုလည်း ဂျာမန်တွေက နေရာပေးပါတယ်။ ဒီတော့ ဂျာမန်ထောက်ပံ့တဲ့ ခရိုအတ်တွေက နေရာတခုမှာ ဆာဘ်တွေကိုသတ်နေချိန်မှာ နောက်ထပ်ဂျာမန်ထောက်ပံ့တဲ့ ဆာဘ်တွေက ခရိုအတ်တွေကို နောက်တနေရာမှာ သတ်နေပြန်ပါတယ် / ဂျာမန်တွေကတော့ ” ငါတို့ကို မထိနဲ့ မင်းတို့ဖာသာ အချင်းချင်းသတ်ချင်သလောက်သတ် ” ဆိုပီး ၂ ဖက်စလုံးကိုအားပေးပါသတဲ့ ယာလည်းညက်စေ ကြက်လည်းပန်းစေ သဘောမျိုးပါပဲ ။
ဒါပေမဲ့ ဂျာမန်တွေကိုလည်းဖက်ဆစ်မို့လို့တော်လှန်ရမယ် ။ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေကိုလည်း ရပ်တန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ လူတယောက် ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဒီလူဟာ ဆာဘ်လူမျိုးတဦး နောက်ပီး ကွန်မြူ နစ်တယောက် သူ့နာမည်က တီးတိုး ။
အလုပ်သမားသပိတ်တိုက်ပွဲတွေမှာ လက်တွေ့ခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့တဲ့တီးတိုးဟာ ဂျာမန်တွေ ကျူးကျော်လာချိန်မှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ငယ်တခုကို ဦးဆောင်သူ အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်။
စစ်ကြီးအစပိုင်းမှာ ဂျာမန်တွေဟာ ဆိုဗီယက်နဲ့ မကျူးကျော်ရေးစာချုပ်ချုပ်ထားတာမို့ ဆာဘ်ကွန်မြူ နစ်တွေဟာ အရင်းရှင်အင်္ဂလိပ်နဲ့ ပြင်သစ်ကို တိုက်တဲ့ဂျာမန်တွေကို မိတ်ဆွေလို့ သဘောထားရမယ် / ဒါ့ကြောင့် ကျူးကျော်လာတဲ့ဂျာမန်တွေကို တော်လှန်စရာမလိုဘူးလို့ ခံယူကြပါသတဲ့ ။
တီးတိုးကတော့ နိုင်ငံခြားကို သိပ်မမျှော်နဲ့ ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုယ်သုံးသပ် ။ဂျာမန်တွေကိုတော်လှန် ဒီလိုတော်လှန်တာဟာလည်း မူလ ဆားဗီးယားအင်ပါယာပြန်လည်တည်ထောင်ဖို့မဟုတ်ဘူး ။လူမျိးရေးမုန်းတီးမှု နဲ့ သတ်ဖြတ်ပွဲတွေကို ရပ်တန့် ၊ လူမျိုးစုံပါတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို တည်ထောင်ပီး ဖက်ဆစ်တွေကိုတော်လှန် ၊ စစ်ပွဲပီးရင် လူမျိုးအားလုံးတန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးရတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်မယ်လို့ မူဝါဒချမှတ်ပါသတဲ့ ။
တီးတိုးကို ဆာဘ်လူမျိုးကြီးဝါဒီတွေက သစ္စာဖောက်လို့ စွပ်စွဲကြသလို ဆာဘ်ကွန်မြူ နစ်တွေကလည်း လက်တွေ့မကျတဲ့ သောက်ရူးလို့သတ်မှတ်ကြပါသတဲ့။ တီးတိုးမှာ နောက်လိုက်လက်တဆုပ်စာသာ ရှိပါသတဲ့။ ဂျာမန်တွေဟာ ဆိုဗီယက်ကို ဝင်တိုက်ချိန်မှာတော့ တီးတိုးဟာ ဆိုဗီယက်ဆီက အထောက်အပံ့အချို့ရပီး အင်အားရှိလာပါတယ်။
နောက်ပီး တီးတိုးတပ်တွေဟာ လူမျိုးရေးသတ်ဖြတ်ပွဲတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့အတွက် နေရာဒေသမရွေး လှုပ်ရှားစစ်ကစားနိုင်ပါတယ် / တီးတိုးရဲ့ ပျောက်ကြားဦးရေမှာ လူမျိုးအစုံ ဘာသာအစုံပါဝင်လာပီး အင်အားအတော်တောင့်တင်းလာပါတယ် / တီးတိုးတပ်ဖွဲ့ဟာ ဥရောပမြေမှာ လက်သံအပြောင်ဆုံး
ပျောက်ကြားတပ်ဖြစ်လာပီး အမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလိပ်ကပါ အသိအမှတ်ပြု အထောက်အပံ့ပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ တီးတိုးဟာ လူအင်အားသောင်းချီကို စီမံကွပ်ကဲပီး တိုက်ပွဲကြီးတွေ တိုက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ စစ်ကြီးပီးခါနီးမှာတော့ ဂျာမန်လက်ထဲကနေ တမြို့ပီး တမြို့ ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပီး ဂျာမန်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့သူတွေကို ဆာဘ် ခရိုအတ်မရွေး သုတ်သင်ပွဲတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်ကြီးအပီးမှာ တီးတိုးဟာ မူလဆားဘီးယား အင်ပါယာကို ဖျက်သိမ်းပီး ယူဂိုဆလားဗီးယားဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကို တည်ထောင်ခဲ့ကာ ကွန်မြူ နစ် အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ပါတော့တယ်။
ဒီပြည်ထောင်စုမှာRepublic ၆ ခုပါဝင်ပါတယ်။
ဆားဘီးယားနိုင်ငံထဲမှာမှ kosovo နဲ့ Vojvodina ကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် ။
စစ်ကြီးပီးခါနီး ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေထဲမှာလည်း အုပ်စု ၂စု ကွဲထွက်လာပါတယ်။
တဖွဲ့က တီးတိုးကို ထောက်ခံတဲ့ ကွန်မြူ နစ်အုပ်စုဖြစ်ပီး ဒီအုပ်စုက တီးတိုးယူဂိုဆလားဗီးယားလက်အောက် ဆားဗီးယားနိုင်ငံအတွင်းက ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို လက်ခံကြပါသတဲ့ ။
ဒါပေမဲ့ ဒီအုပ်စုထဲမှာကို နောက်ထပ်ကွဲနေတာရှိပါသေးတယ် ။ သူတို့ကတော့ တီးတိုးယူဂိုဆလားဘီးယားမှာပါမယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဆားဘီးယားလက်အောက်ခံကတဆင့် မပါပဲ တိုက်ရိုက် republic တခုအဖြစ်ပါချင်တယ် ။ နံပါတ် ၇ မြောက် Republic of Kosovo ပေါ့ဗျာ ဒါပေမဲ့ ဒီအုပ်စုက အဲ့ဒီအချိန်မှာ အသံသိပ်မထွက်ရဲဘူးဗျ။ အဲ့ဒီ ကွန်မြူ နစ်တွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် အုပ်စုကတော့ kosovo ဒေသကို လုံးဝလွတ်လပ်သောနိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်လိုတဲ့ အုပ်စုပါ ။ သူတို့ကတော့ ဆာဘ်ဆိုရင် ဘယ်ဆာဘ်မှ မယုံဘူး / တီးတိုးလည်း မယုံဘူး ပြန်ချ ဆိုတဲ့ အုပ်စုမျိုးပါ ။ ဒီအုပ်စုက စစ်ကြီးအပီးမှာပဲ လက်နက်ကိုင်ပီး တိုက်တော့တာပဲ ။ တီးတိုးကတော့ ဒီပုန်ကန်မှုကို ပြည်ထောင်စုကြီးကို ဖြို ခွဲတာလို့ သတ်မှတ်ပီး ရေရေလည်လည် နှိမ်နင်းပါတယ် ။ ၁၉၅၀ ပြည်နှစ်မှာတော့ ဒီပုန်ကန်မှုဟာ ကျဆုံးသွားပါတယ်
kosovo ဒေသဟာလည်း ယူဂိုးဆလားဗီးယားပြည်ထောင်စုမှာ ဆားဗီးယားrepublicရဲ့လက်အောက်ခံကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ အဖြစ်နဲ့ ရပ်တည်နေပါတော့တယ်။
တီးတိုးရဲ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနဲ့ ယှဉ်ရင် ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးဆိုတာ သီတင်းကျွတ်ပွဲ ဗျောက်အိုးဖောက်သလောက်ပဲရှိပါတယ် ။ တီးတိုးဟာ မြို့တိုင်းရွာတိုင်းကို မည်သည့်နိုင်ငံခြားတပ်ဖွဲ့၏အကူအညီမှ မပါပဲ လွတ်မြောက်စေခဲ့ပီး ဗမာစစ်တပ်ကတော့ အင်္ဂလိပ်သာမှ အင်္ဂလိပ်နဲ့ ကပ်ပေါင်းခဲ့တာပဲရှိပါတယ်။ တီးတိုးဟာ လူမျိုးရေးသတ်ဖြတ်ပွဲတွေကို ရပ်တန့်စေခဲ့သူဖြစ်ပီး
BIA စစ်တပ်ကတော့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ ကရင်တွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု ၊ ၁၉၄၂ မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုတွေကို ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ် ။
တီးတိုးဟာ ယူဂိုဆလားဗီးယားပြည်ထောင်စုကိုတည်ထောင်ရာမှာ ဒေသတိုင်းမှာ လူမျိုးစုံ ဘာသာစုံ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲတွေကို ပြု လုပ်ခဲ့ပီး ဗမာတွေဟာ ပြည်ထောင်စုကို တည်ထောင်ရာမှာ လက်တဆုပ်စာစော်ဘွားတွေနဲ့ စာချုပ်တခုသာ ချုပ်ဆိုခဲ့ကာ ဒီစာချုပ်ကိုလည်း ကတိဖောက်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။
တီးတိုးဟာ အလ်ဘေးနီးယန်းပုန်ကန်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြိုခွဲခဲ့သော်လည်း Kosovo ကိုတော့ သူ့ကတိအတိုင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ အဖြစ်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေကိုလည်း အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ပါဝင်စေခဲ့ပါတယ်။
ဗမာကတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ မူဂျာဟစ်ဒ်ပုန်ကန်မှုကို စစ်ရေးအရဖြိုခွဲနိုင်စွမ်းမရှိတော့ မေယုနယ်ခြားခရိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်မှုနဲ့ သဘောတူညီချက်ရယူပီး လက်နက်စွန့်ဖို့အကွက်ဖန်ခဲ့ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေဘက်က ကတိအတိုင်း လက်နက်စွန့်အပီးမှာတော့ ဗမာတွေဟာ ကတိကို ဖောက်ဖျက်ပီး ရိုဟင်ဂျာတွေကို ခိုးဝင်လို့ တံဆိပ်ပြန်ကပ်ခဲ့ပါတယ် ။
တီးတိုးယူဂိုဆလားဘီးယားလက်အောက်မှာ Republic ၆ခုဟာ ပညာရေး ကျန်းမာရေး မှာအတော်ကြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရပီး စီပွားရေးနဲ့ ပြည်ထဲရေး ( ရဲလုပ်ငန်း ) တွေမှာ အတန်သင့်လွတ်လပ်ခွင့်ရကာ ကာကွယ်ရေး နဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမှာတော့ ဗဟိုဆာဘ်တွေလက်ထဲမှာပဲရှိနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပါတီ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် နဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေမှာလည်း ဆာဘ်တွေကသာ အဓိက လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားပါတယ်။ အားလုံးကို ငြိမ်ဝပ်ပိပြားနေအောင် ခေါင်ချုပ်ကနေ ကိုင်ထားသူကတော့ တီးတိုးပါပဲ ။ တီးတိုးလက်အောက်မှာ ယူဂိုဆလားဘီးယားဟာ နိုင်ငံရေးအရ တည်ငြိ်မ်ပီး စီးပွားရေးအရ တိုးတက်လာခဲ့ကာ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ဥရောပတိုက်မှာတောင် လူနေမှုအဆင့်အတန်း အလတ်တန်းစားနိုင်ငံတခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ kosovo ဒေသဟာလည်း အတော်လေးကိုတည်ငြိမ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကွန်မြူ နစ်စီးပွားရေးစနစ်ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ပျားရည်ဆမ်း ကာလ ဆယ်စုနှစ် ကျော်လွန်အပီးမှာတော့ ကျပ်တည်းမှု နဲ့ တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေဟာ kosovo ဒေသမှာ မကျေလည်မှုတွေကို ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ယူဂိုဆလားဘီးယားပြည်ထောင်စုမှာ ဆားဘီးယားရဲ့လက်အောက်ခံအနေနဲ့ ပါဝင်ရလို့ ကိုဆိုဗိုကထွက်တဲ့ ကျောက်မီးသွေးနဲ့ သတ္တု သံယံဇာတတွေဟာ ဆာဘ်တွေဖို့ချည်းပဲဖြစ်နေတယ်လို့ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေက ယူဆကြပါတယ်။
၁၉၆၈ မှာ kosovo ကို republic အဆင့်တိုးပေးဖို့ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေက ဆန္ဒပြကြပါတယ်
ကိုဆိုဗိုဆာဘ်တွေကလည်း တန်ပြန်ဆန္ဒပြကြပါတယ် ။ တီးတိုးကတော့ ဆန္ဒပြမှုတွေအားလုံးကို ဖြိုခွဲပီး အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့လုပ်ပါတယ်။ တီးတိုးရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို တုန့်ပြန်မှုက ဆာဘ်ဖြစ်စေ အလ်ဘေးနီးယန်းဖြစ်စေ အားလုံးကို ဖြိုခွဲပီး မည်သည့်ဆန္ဒပြသူနဲ့မှ မညှိနှိုင်းပါဘူး ။ ပွဲပီးမှသာ သူလိုအပ်မယ်ထင်တာကို လုပ်ပေးတဲ့သဘောပါ။ တီးတိုးရဲ့ အနီးကပ်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေက ” ခေါင်းဆောင်ကြီးရှိတုန်းတောင် ဒီလောက်သောင်းကျန်းနေတာ / မရှိတော့ရင် ပိုဆိုးမယ် / ဒါ့ကြောင့် ဆန္ဒပြတဲ့ ၂ ဖွဲ့လုံးနဲ့ သီးခြားစီတွေ့သင့်တယ် ” လို့ ပြောမိတော့ တီးတိုးက အတော်စိတ်ဆိုးပါသတဲ့။
” နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်တည်လာတဲ့ အငြိုးအတေးတွေကို ငါကုန်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူး ။ ဒါ့ကြောင့် ၂ ဖက်လုံးကို ဖိနှိပ်ထားရမယ် ။ ငါမရှိတော့လို့ အဲ့ဒီကောင်တွေနဲ့ မင်းတို့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးရင်
မဟုတ်တာတွေ အကုန်ဖြစ်တော့မှာ ။ ဒီတော့ ငါမသေခင် မင်းတို့အရင် နိုင်ငံရေးက ထွက် ” လို့ ဆုံးဖြတ်ပါသတဲ့။ တီးတိုးအနေနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တဲ့သူ့ရဲ့ အနီးကပ်ရဲဘော်တွေ ။ ပါတီရဲ့ ပထမလိုင်းက သူတွေရဲ့ သဘောထားကို စိုးရိမ်လို့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပါတီကနေ ထွက်ခိုင်းပါသတဲ့ ။ ဒါဟာ မီလိုဆီဗစ်လို ဂျောင်ကလောင်ကလူတွေအဖို့ တက်လမ်းပွင့်သွားစေခဲ့ပါတယ် ။ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်မှု အဆင့်ဆင့်ရှိပေမဲ့ ၁၉၇၄ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အခြေခံဥပဒေဟာ သက်ရောက်မှုအရှိဆုံးပါ။ ၇၄ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အခြေခံဥပဒေအရ Kosovo ဒေသကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်သမ္မတ ရွေးချယ်ရာမှာ မဲပေးခွင့်ပြုပါတယ် / ဒါပေမဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတင်သွင်းခွင့်တော့ မပြုပါဘူး ။
တခြား Republic တွေကတော့ မဲပေးခွင့်ကော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတင်သွင်းခွင့်ပါရပါတယ်
လိုရင်းအချက်ကတော့ ဆာဘ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ကိုဆိုဗိုက ဆန့်ကျင်ခွင့် ထောက်ခံခွင့် နဲ့ပြန်ကိုင်ပေါ့ ။ တဖက်ကလည်း ဆာဘ်တွေအဖို့ ကိုဆိုဗိုက ဆာဘီးယားrepublic အတွင်းမှာပဲရှိတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တချို့နဲ့ ပြန်ညှိပီး ထောက်ခံမဲရအောင်လုပ်။ ပြည်ထောင်စု level မှာ ဆာဘ်အတွက် အခိုင်အမာခြေကုပ်ထပ်ရတာပေါ့ ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၂ ခုလုံးကို မဲပေးခွင့်ပေးလိုက်တော့ ဆားဗီးယားrepublicဟာ ၂ မဲတိတိ သူ့ဂွင်ထဲမှာ ညှိလို့ရတဲ့အနေအထားပေါ့။ တခြား republic တွေမှာဒီလိုအခွင့်အရေးမရှိပါဘူး။ စုစုပေါင်း မဲ ၈ခုမှာ ဆာဘ်က ၁ မဲ +အပေါ်က ၂ မဲ နဲ့ မွန်တီနီဂရိုးက ၁ မဲ / စုစုပေါင်း ၄ မဲ က ဆာဘ်အတွက် ညှိနှိုင်းခွင့်ရပီး တဖက်ကိုလည်း စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတချို့ ပြန်ပေး စသဖြင့် တီးတိုးက လုပ်ချသွားတာပါ ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုလုပ်တာဟာ ရေ ရှည်မှာ ပြသနာတွေထပ်တက်လာမှာကို တီးတိုးအနေနဲ့ကြို မြင်ခဲ့ပုံရပါတယ် ။ သူ့ ရဲဘော်တယောက်ဆီစာရေးတော့ ” ယူဂိုဆလားဗီးယားဆိုတာ မရှိတော့ဘူး ။ ငါမရှိတာနဲ့ အကုန်လုံး လခွမ်းတွေချည့်ဖြစ်ကုန်မှာဟေ့ ” လို့ ရေးခဲ့ပါသတဲ့။
၁၉၄၈ မှာ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပီး ဆယ်နှစ်အကြာခွဲထွက်ခွင့်ကတိနဲ့ ပြည်ထောင်စုဖြစ်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဒီလို ပြည်နယ်တွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်အုပ်ချုပ်မှုသာရှိခဲ့ပီး ” ဒီလိုအုပ်ချုပ်လို့လဲ ယူဂိုဆလားဗီးယားလို ပြိုကွဲမသွားတာ ” လို့ ဗမာစစ်ဗိုလ်တွေက ဝါဒဖြန့်လေ့ရှိပါတယ်။
တကယ်ပဲ စစ်ဗိုလ်တွေ တော်လို့လား ။ ဒါမှမဟုတ် ဗမာပြည်ဟာ ကမ္ဘာ့မျက်စိမှာ အရေးမပါလှလို့လား ။ ခုနောက်ပိုင်းအသံကျယ်လာတဲ့ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ၊ ကျာက်ဖြူ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စတာတွေကို လက်ညိုးထိုးပြပီး မြန်မာပြည်ဟာ တရုတ်အတွက် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသို့ထွက်ပေါက် / အိန္ဒိယအတွက် အရှေ့တောင်အာရှကုန်းမြေသို့ ဝင်လမ်း စသဖြင့် ပြောဆိုကြပီး မြန်မာပြည်ဟာ မဟာဗျူ ဟာကျကြောင်းပာဆိုကြတာပါ။
မြန်မာပြည်က ဒီ project တွေက ခုမှ စခါစပဲ ရှိသေးပေမဲ့ တခြားတိုင်းပြည်က ဒီလို project တွေဟာဖြင့် လုပ်ကိုင်လည်ပတ်လာတာ ဆယ်စုနှစ် ၄စုစာလောက် ရှိနေပါပီ ။မမြင်ဘူး မူးမြစ်ထင်သူတွေအဖို့သာ ဗမာပြည်ဟာ မဟာဗျူ ဟာကျတယ်လို့ ပြောကြမှာပါ ။ တကယ်တော့ ဗမာပြည်ဟာ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ အဝေးကြီးမှာရှိတဲ့ ဂျောင်ကလောင်က တိုင်းပြည်လေးပါ
ဗမာစစ်ဗိုလ်တွေကလည်း အဲ့သလို ဂျောင်ကလောင်ကျတာကို အင်မတန်မှကြိုက်ကြပါတယ်။
ဒါမှလည်း အိမ်ကျယ်လုပ်ခွင့်ရေ ရှည်ရသကိုး ။ ဒီလိုနဲ့ ဗမာစစ်ဗိုလ်တွေ လုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်ဟာ သက်ဆိုးရှည်နေတာပါ / စစ်ဗိုလ်တွေတော်လို့ ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲတာ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်တချက်က ” ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲတာကကော ဘာဖြစ်သလဲ ”
ဗမာတွေလည်း ဆင်းရဲမွဲတေ ၊ လူနည်းစုတွေလည်း ဒုက္ခထဲမှာမျော ၊ LDC အဖြစ် ဆယ်စုနှစ် ၃စုရပ်တည် ကင်ဆာအဖြစ်များဆုံး ၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအနိမ့်ဆုံး ၊မွေးကင်းစကလေးသေဆုံးမှု အများဆုံး ၊အာဟာရချို့တဲ့ ကလေးအများဆုံး ၊ ပညာရေးအနိမ့်ကျဆုံး ၊ ဒီ ဒုက္ခတွေက ပြည်ထောင်စု တည်မြဲဖို့ပေးဆပ်ရတာတွေလား။ ရှင်းရှင်းလေးသိထားဖို့က လူရှိမှ နိုင်ငံဆိုတာဖြစ်လာတာပါ ။
လူဟာ နိုင်ငံအတွက်အနစ်နာခံတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့ မျိုးဆက်တဆက်က အနစ်နာခံလိုက်ရင် နောက်မျိုးဆက်တွေက အေးချမ်းသာယာလေမှ ဒီအနစ်နာခံမှုက အဓိပ္ပါယ်ရှိပါလိမ့်မယ် ။
တောင်ကိုရီးယား ဂျပန်တွေလည်း ဒီလိုအနစ်နာခံပီးတိုးတက်လာတာပါ ။ရှိသမျှ လူမျိုးအားလုံး မျိုးဆက်တဆက်ပီးတဆက် နာပီးရင်နစ်နာ တွေတာကတော့ ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက်မကလို့ ဘာကြီးအတွက်ဖြစ်နေနေ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး။
လူတွေက စုတ်ပြတ်မွဲတေ လူသန်းချီ နိုင်ငံခြားထွက် ကျွန်ခံ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ပီးမှ ပြည်ထောင်စုနေရတာဟာ ဆိုရင်ဖြင့် အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ကိစ္စကြီးပါ။ ဒါ့ကြောင့် စစ်ဗိုလ်တွေရဲ့ ” ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲမှာကြောက်လို့ ” ဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ကျွန်ဇာတ်သွင်းရေး ဝါဒဖြန့်လုံးကြီးပါပဲ။
စီးပွားကျပ်တည်းမှုကြောင့် ကိုဆိုဗိုဒေသက ဆာဘ်တွေဟာ ဆားဗီးယားနိုင်ငံအတွင်းကို အများအပြားရွှေ့ပြောင်းကြပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ဗဟိုဆားဗီးယားဟာ ကိုဆိုဗိုထက်စာရင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုများတယ်လေ။ ကိုဆိုဗားအလ်ဗေးနီးယန်းတွေအဖို့ကတော့ ဆားဘီးယားနိုင်ငံအတွင်းကို ဝင်လို့လဲမရ / အိမ်နီးချင်းအလ်ဘေးနီယားနိုင်ငံကလည်း တကဲ့ကို မော်စီတုန်းစတိုင် ကွန်မြူ နစ်ဂေါက်ကြောင်ငမွဲနိုင်ငံ ဆိုတော့ ကိုဆိုဗိုဒေသမှာပဲ ပိတ်မိနေပါတော့တယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေတာဟာ ဆယ်စုနှစ် ၃စုစာလောက်ရှိလာတော့ ကိုဆိုဗိုဒေသမှာ ဆာဘ် နဲ့ အလ်ဘေးနီးယန်း လူဦးရေအချိုးအစားကွာဟမှုက ကြီးမားသထက်ကြီးမားလာပါတယ်။ ဆာဘ်တွေရဲ့မဟုတ်မဟပ်ဝါဒဖြန့်မှုတွေမှာတော့ အသုံးအနှုန်းတခုထပ်တိုးလာပါတယ် ” သားပေါက်နှုန်းမြန်တဲ့ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေ ”တဲ့။ တီးတိုးကွယ်လွန်ချိန် ၁၉၈၀ ကနေ လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ မဟုတ်မဟပ်အရေးအသားတွေဟာ ကိုဆိုဗိုဒေသမှာတော့ လူမျိုးရေးတင်းမာမှုနဲ့ အထိကရုန်းတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာစေတော့တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကွန်မြူ နစ်အာဏာပိုင်တွေထဲမှာ တီးတိုးလူအမာခံတွေရှိနေဆဲမို့ လူမျိုးရေးအထိကရုန်းဖြစ်တိုင်း ၂ဖက်လုံးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်ကွပ်ပစ်တာကတော့ရှိနေဆဲပါ။ ဆာဘ်အာဏာပိုင်တွေထဲမှာလည်း အုပ်စုကွဲစပြုလာပါတယ်
တီးတိုးစတိုင်မာမာထန်ထန် ဆက်အုပ်ချုပ်ဖို့ ၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း ပါတီစုံစနစ်ကို ခွင့်ပြုဖို့ ခက်တာက ပါတီစုံစနစ်ကို ခွင့်ပြုလိုက်ရင် သေချာတာကကွန်မြူ နစ်ပါတီရွေးကောက်ပွဲရှုံးမှာ လူမျိုးရေးပါတီတွေအနိုင်ရကုန်မှာ ။ ဒီတော့ မာမာထန်ထန်ပဲ ဆက်အုပ်ချုပ်မယ်။
ဒီထဲမှာမှ ကွန်မြူ နစ်ပါတီကိုယ်တိုင်က လူမျိုးရေးအမုန်းတရားကိုအသုံးချပီးဆက်အုပ်ချုပ်ချင်တဲ့သူ လက်တဆုပ်စာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာ တီးတိုးလမ်းကြောင်းနဲ့ တကယ့်ကိုဆန့်ကျင်ဖက်။ တီးတိုးလုပ်သွားတာက ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာ ဆာဘ်တွေကအသာစီးယူထားတာမှန်တယ် ။ သို့သော်သိသာသိစေ မမြင်စေနဲ့ ။အကိုကြီးနဲ့ညီလေးများပုံစံနဲ့သွား။ ခုလုပ်မဲ့ပုံစံက Greater Serbia / ဆာဘ်တွေနယ်မြေကျယ်ကျယ်ယူမယ် ။ သခင် နဲ့ ကျွန်တွေပုံစံနဲ့သွားမယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလမ်းကြောင်းကို ဘယ်သူကမှ မစရဲဘူး ။ ခရိုအတ်တွေ ဆလိုဗတ်တွေက ငြိမ်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိတော့ သိပ်မလုပ်ရဲသေးဘူး ။ တရားမဝင် စာတမ်းဖြန့်နေတာတွေရှိတယ်။ ဒီအချိ်န်မှာ ဒီသွေးခင်းတဲ့လမ်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ မိစ္ဆာတကောင်ပေါ်လာတယ် ။ သူဟာ အစကဂျောင်ကလောင်ကရယ်။ တီးတိုးရဲ့ ပါတီပထမလိုင်းက လူတွေကိုဖယ်လိုက်တော့ လမ်းပွင့်လာတဲ့သူ ။ တီးတိုးရှိနေစဉ်နဲ့ တီးတိုးကွယ်လွန်ခါစမှာ လူမျိုးရေးအမုန်းတရားတွေကိုနှိပ်ကွပ်ထားရမယ်လို့ အသံပြဲနဲ့အော်ပီး ပါတီထိပ်ပိုင်းကလူတွေ သဘောကျအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လူ ။ ဒီလိုနဲ့ ဆာဘ်သမ္မတရဲ့ ညာလက်ရုန်းဖြစ်လာခဲ့သူ။
သူကတော့ မီလိုဆီဗစ် ပါ/
” သခင် နဲ့ ကျွန် ” ပုံစံ ပြည်ထောင်စု အလိုမရှိ
ကျနော် ရှေ့မှာရေးခဲ့သလို ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာ ဆာဘ်တွေဟာ kosovo နဲ့Vojvodina တို့ရဲ့မဲကို ရဖို့ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတချို့နဲ့ ညှိလေ့ရှိပါတယ်။ မီလိုဆီဗစ်ကတော့ အဲ့လို မညှိတော့ပဲ လုယူပါတယ်။ သူက Vojvodina မှာလူသိန်းချီပါတဲ့ ဆာဘ်လူအုပ်ကြီးနဲ့ အစိုးရရုံးကို ဝိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အစိုးရနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ ရက်ရှည်တောင်းဆိုတော့တာပါ။ မီလိုဆီဗစ်ကြွေးကြော်တာက ” ဟောင်းနွမ်းခြစားနေတဲ့ ဗျူ ရိုကရေစီ စနစ်ကို တိုက်ဖျက်ပစ် ” တဲ့။ အရင်က လူစုစုလုပ်တာနဲ့ မြန်မြန်နှိမ်နင်းတတ်တဲ့ လုံထိန်းတွေကလည်း မီလိုဆီဗစ်ရဲ့ဆန္ဒပြလူအုပ်ကို ထိထိရောက်ရောက်မကိုင်တွယ်ပါဘူး ။ မီလိုဆီဗစ်ကတော့ ဒါကိုထောက်ပြပီး ”ကျုပ်တို့နိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လေပီလို့” တောင် ကမ္ဘာကိုသက်သေပြပါသတဲ့။ ရက်ရှည် အဝိုင်းခံရတဲ့ Vojvodina အစိုးရအဖွဲ့ဟာ အရှုံးပေးလိုက်ရပီး မီလိုဆီဗစ်လူတွေနဲ့ အစိုးရဖွဲ့လိုက်ရပါတယ်။ မွန်တီနီဂရိုးမှာလည်း ဒီပုံစံနဲ့ပဲ မီလိုဆီဗစ်က အာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ် ။ ကိုဆိုဗိုမှာတော့ ဒီလိုလုပ်မရပါဘူး ။ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေက လူဦးရေရဲ့ ၈၀% ကျော်ရှိတော့ လူအုပ်နဲ့ သွားဖြဲရင် ဆာဘ်တွေပဲ နာသွားမှာပါ။ ဒီတော့ မီလိုဆီဗစ်က ဆားဗီးယားrepublic ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုပြင်ပါတယ် ( ယူဂိုဆလားဗီးယားပြည်ထောင်စုရဲ့ ၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနဲ့မရောပါနဲ့ ) ။
ဆာဘီးယားrepublicဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်အရ ကိုဆိုဗိုဒေသရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် နဲ့ ပါလီမန်တွေကို ဖျက်သိမ်းပီး ဆားဘီးယားနိုင်ငံက တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မယ်လို့ ဖြစ်သွားတာပါ။ ဒါဟာ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တဲ့ ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ဆန့်ကျင်ပါတယ် / ဆာဘ်တွေဟာ ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲမှာကြောက်လို့ ဆိုပီး တချိ်န်လုံးအော်နေသလောက် ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကို ပထမဆုံး ဆွဲဖြဲလိုက်ပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မီလိုဆီဗစ်ဆိုတဲ့ လူကပ်က ကိုဆိုဗိုရဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်မဲပေးခွင့်ကိုတော့ ဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုပါသတဲ့။ တကယ့် သောက်ချဉ်ပါ / ကိုဆိုဗိုဟာ ဆားဗီးယားအောက်တိုက်ရိုက်ရောက်သွားပီဆိုမှတော့ ကိုဆိုဗိုရဲ့ မဲ ဟာလည်း ဆာဘ်တွေအလိုကျပဲ ဖြစ်သွားရောပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုနဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ၈ မဲရှိရာမှာ ဆာဘ်တွေဟာ ဆားဘီးယားrepublic တမဲ ၊ vojvodina တမဲ ၊ မွန်တီနီဂရိုး တမဲ ၊ kosovo တမဲ စုစုပေါင်း ၄ မဲ အခိုင်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်
ယူဂိုဆလားဗီးယားပြည်ထောင်စုအတွင်း ဥပဒေနဲ့အညီ ဆာဘ်သခင်များကို အလုပ်အကျွေးပြုရတော့မှာကို မြင်သွားတဲ့ ဆလိုဗေးနီးယား နဲ့ ခရိုအေးရှားက ခွဲထွက်ဖို့ ဒဲ့ လုပ်ပါတော့တယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဘော့စ်နီးယားကလည်း ခွဲထွက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းပါတော့တယ်။ ဒီမှာတင် ယူဂိုဆလားဗီးယားပြည်တွင်းစစ်စပါတော့တယ်
ပြည်တွင်းစစ်မဟုတ်ဘူး / အဲ့ဒါဂျင်နိုဆိုဒ်
ဒီအထိ မီလိုဆီဗစ်ကို ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး ။ နိုင်ငံရေးသမားတယောက် နိုင်ငံရေးကို ကလိမ်ကကျစ်နဲ့ လုပ်တယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။ ဘာမှထူးပီးအပြစ်တင်စရာလည်းမရှိလှပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ . . . . . . .
ပြည်တွင်းစစ်အစပိုင်းမှာ မီလိုဆီဗစ် , ယူဂိုဆလာဘ်ထောက်လှမ်းရေး နဲ့ တပ်မတော်တို့ဟာ အရေးကြီးလျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးတရပ်လုပ်ကြပါတယ်။ အစည်းအဝေးမှာ plan A ကို လုပ်မလား plan B ကို လုပ်မလား တိုင်ပင်ကြပါတယ်။ plan A က မူလ ယူဂိုဆလားဘီးယားပြည်ထောင်စုကို မပြိုကွဲရအောင် ထိန်းထား ဖို့ပါ။ plan B ကတော့ မူလယူဂိုဆလားဘီးယား ပြိုကွဲရင်နေပစေ ။ ဆာဘ်တွေအတွက် နယ်မြေကျယ်ကျယ်နဲ့ Greater Serbia နိုင်ငံပေါ်ထွက်လာဖို့ပဲ စစ်တိုက်ဖို့ပါ။ plan A က မလွယ်ပါဘူး။ ဆလိုဗေးနီးယားရဲ့လွတ်လပ်ရေးကို နိုင်ငံတကာက တန်းပီးအသိအမှတ်ပြု လိုက်ကြပါတယ်
မဟာကွန်မြူ နစ်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတောင် ကွဲသွားမှတော့ ယူဂိုဆလားဗီးယားလည်း ကွဲပီပေါ့။ဒီတော့ plan B ဖြစ်တဲ့ Greater Serbia ကိုပဲ ရွေးချယ်ကြပါတယ် ။ Plan B အတွက် ဆာဘ်လူမျိုးတွေနေထိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ ဆလိုဗေးနီးယားနဲ့ မက်ဆီဒိုးနီးယားကို အသာတကြည်လက်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဆာဘ်လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ ခရိုအေးရှားနဲ့ ဘော့စ်နီးယားကို စစ်မျက်နှာဖွင့်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ၂ နိုင်ငံမှာ ဆာဘ်တွေဟာ မိမိနေထိုင်ရာနယ်မြေတွေကိုသိမ်းပိုက်ပီး ဆားဘီးယားrepublic နဲ့ ပေါင်းစည်းကြောင်း referendum လုပ်ဖို့ပါ။ ခက်တာက ဆာဘ်တွေ ခရိုအက်တွေ ဘော့စ်နီးယန်းတွေနေထိုင်တဲ့ နယ်မြေက အပြတ်အသားစည်းခြားထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရောထွေးယှက်တင်ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါများလွယ်လွယ်လေး။ အဲ့ဒီ ခရိုအတ်တွေ နဲ့ ဘော့စ်နီးယန်းတွေကို အဲ့ဒီနယ်မြေတွေကနေမောင်းထုတ်ပီး ဆာဘ်နယ်မြေတွေအဖြစ် တဆက်စပ်တည်းလုပ်ပစ်လိုက်ရုံပေါ့ ။
ဒါဟာ လူမျိုးရေးသန့်စင်မှု ( ဝါ ) ethnic cleansing ပါပဲ။
မီလိုဆီဗစ်ဟာ ethnic cleansing ကို ရွှံရှာဖွယ်ရာအဖြစ်မသတ်မှတ်ပဲ ဆာဘ်လူမျိုးတွေရဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတဲ့ မြင့်မြတ်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖြစ် လက်သိပ်ထိုးဝါဒဖြန့်ပါသတဲ့ ။ ဒီလိုမြင့်မြတ်သောတာဝန်ကို စွန့်လွှတ်စွန့်စားစွာထမ်းဆောင်တဲ့ ဆာဘ်တပ်မတော်သားတွေဟာလည်း ” ရဲသော်မသေ , သေသော်ငရဲမလား ” မို့ မုဒိန်းကျင့် လူသတ် မီးရှို့ တာတွေကို စိတ်လုံလုံနဲ့လုပ်ဖို့ သွေးထိုးပါတယ် ။ ကဲ ဘာပြောစရာရှိသေးလဲ။ ဂျင်နိုဆိုဒ်လေဗျာ ။ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်တွေကို မြင်ရတော့တာပေါ့။ မီလိုဆီဗစ်ဟာလည်း နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်တော့ဘူး။ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်ကောင်ဗျ ။
Kosovo ကိစ္စကို အဓိကထားရေးဖို့ရှိပေမဲ့ ခရိုအေးရှားနဲ့ ဘော့စ်နီးယားကိစ္စကိုလည်း အကြမ်းဖျင်းလောက်ထိတွေ့ရပါမယ်။ ၁၉၉၀ ပြည့်ကနေသန္ဓေစတည်လာတဲ့ ဒီသုံးပွင့်ဆိုင်ကိစ္စကို ပြည်တွင်းစစ်အဖြစ် ပုံဖော်ရေးသားကြသူတွေများပါတယ်။ သာမန်လူတွေမပြောနဲ့ အမေရ်ကန်အစိုးရကိုယ်တိုင် ပြည်တွင်းစစ်တခုအဖြစ်ယူဆခဲ့လို့ အကိုင်အတွယ်လွဲချော်ခဲ့ရတာတွေအများကြီးပါ။ တကယ်တော့ ပြည်တွင်းစစ်မကပါဘူး။ ပည်တွင်းစစ်ကို အကာအကွယ်ယူလျက် ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှု အစုအထွေးကြီးပါ။ ဆာဘ်တွေဘက်က အများစုပုံဖော်ကြတာက ” စစ်တိုက်ရင်း ၃ဖက်လုံးက လွန်ခဲ့ကျွံခဲ့ကြတာတွေမှာ ဆာဘ်တွေကိုချည့် အပြစ်ဖို့တယ် ” ဆိုတာမျိုးပါ။ ၃ ဖက်စလုံးက လွန်ခဲ့ကျွံခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့ အမှန်တကယ် intention ရှိရှိနဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့သူတွေကတော့ မီလိုဆီဗစ်ဦးဆောင်တဲ့ ဆာဘ်အစိုးရ နဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေပါပဲ။ စစ်ပွဲစကတည်းက ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်နဲ့ ထောက်လှမ်းရေးကိုချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ဆာဘ်တွေက နယ်မြေတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘောစ်နီးယားရဲ့ ၃ပုံ၂ ပုံ နဲ့ ခရိုအေးရှားရဲ့ တဝက်လောက်ဟာ ဆာဘ်တွေလက်ထဲရောက်သွားပါတယ်။ ဒီအထိကတော့ ဆာဘ်တွေဘက်က စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်တာတွေရှိပေမဲ့ ပြည်တွင်းစစ်လို့ပဲ အကြမ်းဖျင်းဆိုကြပါစို့။ ဒီ့နောက်ပိုင်း အသိမ်းပိုက်ခံနယ်မြေတွေမှာ ဆာဘ်တွေ ထုတ်ဆင့်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေတွေ အမိန့်တွေ နဲ့ လက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့ အရပ်သားတွေအပေါ် ပြု ကျင့်မှုတွေက ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုတွေပါ။
ဒီစစ်ပွဲကြီးအတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကို အကြမ်းဖျင်း အမျိုးအစား ၂ မျိုးခွဲလို့ရပါတယ်
” စစ်ရာဇဝတ်မှု နဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှု ”
ဆာဘ်တွေပြောလေ့ရှိတဲ့ ၃ ဘက်လုံးက လွန်ခဲ့ကျွံခဲ့တာတွေဆိုတာက စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်ရင် မှန်နိုင်ပေမဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုကတော့ ဆာဘ်တွေဘက်ကပဲ ကျူးလွန်ခဲ့တာပါ။ စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ခါနီး ခရိုအတ်တွေရဲ့တန်ပြန်ထိုးစစ်မှာ ဆာဘ်အရပ်သားတွေကိုမောင်းထုတ်တာတွေရှိပေမဲ့လည်း အချိန်မှီထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပီး ကျူးလွန်ခဲ့သူ ခရိုအတ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုလည်း ICC မှာစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပီး စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာချင်းတူဦးတောင်မှ ဆာဘ်တွေကျူးလွန်တဲ့ ပမာဏက ပိုများပါတယ်။ ဥပမာ – ဆာရာယေဗိုကို ဆာဘ်လက်နက်ကိုင်တွေက အမြောက်နဲ့ ပစ်တဲ့ကိစ္စ ။ စစ်ပွဲနဲ့ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ အရပ်သားရပ်ကွက်တွေကို ပစ်ပါများတော့ မြို့ထဲမှာ ခိုကပ်နေထိုင်တဲ့ ဆာဘ်လူမျိုးတွေကပါ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာပီး ဘောစ်နီးယားတပ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းသွားတဲ့အထိပါ ။ အဲ့ဒီဆာဘ်တွေဆိုရင် ဘော့စ်နီးယားတပ်မတော်အတွင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ထိရာထူးရတဲ့သူတောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ မီလိုဆီဗစ်ဦးဆောင်တဲ့ဆာဘ်တွေရဲ့ ဒီရာဇဝတ်မှုတွေဟာ သွေးဆူတုန်းမတော်တဆ လုပ်မိတာမဟုတ်ပဲ စနစ်တကျ ငွေကုန်ကြေးကျ အချိန်ယူ အစီအစဉ်ဆွဲပီး လုပ်ခဲ့တာတွေပါ။ နာဇီတွေထက်ဆိုးတဲ့ အဖြစ်တွေပါလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နာဇီတွေက ဂျာမန်စစ်သားတွေ နဲ့ ဂျူးအမျိုးသမီးတွေလိင်ဆက်ဆံတာကိုတားမြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် နာဇီတွေရဲ့ သေမင်းတမန်စခန်းတွေမှာ ဂျူးအမျိုးသမီးတွေကို မုဒိန်းကျင့်တာတွေက ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန့်မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဆာဘ်တွေကတော့ အဲ့ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး ။ မုဒိန်းကျင့်ဖို့ကို သီးသန့်စခန်းတွေဖွင့်ပီး ဘောစ်နီးယန်း နဲ့ ခရိုအတ်အမျိုးသမီးတွေကို မုဒိန်းကျင့်ပါတယ် ။ မွေးလာတဲ့ခလေးတွေကို ဆားဗီးယန်းလူမျိုးဇာတ်သွင်းပစ်ဖို့ အတင်းအဓမ္မသိမ်းယူသွားပါတယ် ။ ဆာဘ်တွေရဲ့ ခံယူချက်က အဆန်းပါ။ ဘာစ်နီးယန်းတွေဆိုတာက အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်လို့သာ သီးခြားဖြစ်နေတာ တကယ်တော့ ဆာဘ်သွေးပါသူတွေပဲ ။ ခရိုအတ်တွေကလည်း ကတ်သလစ်ဖြစ်လို့သာ / တကယ်တော့ဆာဘ်သွေးပါသူတွေပဲ။ ဒီတော့ ဘော့စ်နီးယန်း နဲ့ ခရိုအတ် အမ တွေကို မူရင်းဆာဘ်သွေးနဲ့ သားပြန်ဖောက်ပေးပီး ဆာဘ်သွေးလွှမ်းမိုးရေးကို အကောင်အထည်ဖော်တယ် ။ ဘော့စ်နီးယန်း နဲ့ ခရိုအတ် အထီးတွေကိုတော့ သတ်ပစ်ပါသတဲ့။ နောက်ပီး မုဒိန်းမှုကို ဒီလို လက်နက်သဖွယ် အသုံးချလိုက်တဲ့အတွက် သားကောင်ဖြစ်ရသူတွေဟာ တသက်တာရှက်ရွံ့နိမ့်ကျသွားပီး မုဒိန်းနယ်မြေတွေကို ပြန်လှည့်မကြည့်ချင်လောက်အောင်ကို ရွှံရှာသွားလေ့ရှိတဲ့အတွက် ဆာဘ်တွေလိုချင်တဲ့ ethnic cleansed လုပ်ပီးသားနယ်မြေဟာ ပိုမိုခိုင်မာသွားလေ့ရှိသတဲ့။ ဒါဟာ ဆာဘ်လူမျိုးကြီးဝါဒီတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေထဲက တစိတ်တဒေသပါပဲ။
ကျန်တဲ့ အရပ်သားတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်တာ အကျဉ်းစခန်းတွေမှာ နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းတာတွေကလည်း ပက်ပက်စက်စက်ပါ။ မီလိုဆီဗစ်အဖို့ စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ရာ အဖြစ်တခုကတော့
ရဝမ်ဒါဂျင်နိုဆိုဒ်ပါ။ ရက်ပိုင်းအတွင်းလူသိန်းချီအသက်ပျောက်ခဲ့ရတဲ့ ရဝမ်ဒါဂျင်နိုဆိုဒ်ကို နိုင်ငံတကာရဲ့ တုန့်ပြန်ပုံက အင်မတန်မှ ရှက်စရာကောင်းလောက်အောင် တာဝန်မဲ့လွန်းပါတယ်။ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ကယ်တင်မဲ့အစား UN ကဆိုရင် သူ့တပ်ဖွဲ့တွေ သေကုန်မှာမို့ တပ်တွေကိုပြန်ရုပ်လိုက်ပါသတဲ့။ ဒါတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ မီလိုဆီဗစ်က ဘောစ်နီးယားက သူ့လုပ်ရပ်တွေကို ဘယ်သူမှ မတားမြစ်နိုင်ဘူးလို့ ယူဆသွားပီးလောကငရဲကို အရှိန်မြှင့်ပါတော့တယ်။ ဘောစ်နီးယားကိစ္စ နဲ့ပတ်သတ်လို့ နိုင်ငံတကာရဲ့တုန့်ပြန်မှုကို ” အသုဘရှုပွဲတခု တက်ရောက်ခြင်း ” လို့တောင် တင်စားရသည်အထိ US နဲ့ UN ဟာ အစဦးပိုင်းမှာပေါ့လျော့ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဂျင်နိုဆိုဒ်တားဆီးရေးလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ မဆုတ်မနစ်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ဒီ ၃ပွင့်ဆိုင် စစ်ပွဲကြီးကို Dayton သဘောတူညီချက်နဲ့ ရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် Dayton စာချုပ်အရ ဆာဘ်တွေဟာ ဘော့စ်နီးယားနဲ့ ခရိုအေးရှားကနေ ခွဲထွက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေတော့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီဒေသတွေကိုလည်း ဆားဗီးယားနဲ့ ပေါင်းစည်းခွင့်မရှိပါဘူး။ ethnic cleansed လုပ်ထားတဲ့ နယ်မြေတွေကိုလည်း မူလလူမျိုးတွေလက်ထဲ ပြန်အပ်ရပါတယ်။ ဒီသဘောတူညီချက်တွေ မြေပြင်မှာခိုင်မာစေဖို့ ဘော့စ်နီးယားနိုင်ငံထဲကို US ဦးဆောင်တဲ့ NATO တပ်တွေ ဝင်ရောက်တပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ USတိုက်လေယာဉ် ၂၀၀ ကျော်ဟာဆိုရင် မီလိုဆီဗစ်နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲစချိန်မှာ ပြေးလမ်းကြောင်းပေါ်အသင့်နေရာယူထားပီး လေယာဉ်မှူးတွေက stand by စောင့်နေပါတယ်။ မီလိုဆီဗစ် ခေါင်းခါတာနဲ့ တပြိုင်နက် လေပေါ်ပျံတက်ပီးဗုံးကြဲဖို့ပါ။ ဒီတော့ မီလိုဆီဗစ်လည်း Dayton ကို သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ရပီး သူ့ရဲ့ Greater Serbia အိပ်မက်ကို နောက်ပို့လိုက်ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဘော့စ်နီးယား နဲ့ ခရိုအေးရှားက ဈာပနပွဲတွေဟာ ၁၉၉၅ မှာ အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ Kosovo ရဲ့ ငရဲခန်းတွေကတော့ ခုမှ ဂီယာကြီးစထိုးတဲ့အချိန်ရောက်လာပါတော့တယ်
ဂျင်နိုဆိုဒ် သံသရာ ထပ်ခါထပ်ခါ
၁၉၈၇ မှာ Kosovo ကိစ္စကို အမြတ်ထုတ်ပီး မီလိုဆီဗစ်ဟာအာဏာရလာခဲ့တယ်။ ၁၉၈၉ ဟာ Kosovo ရဲ့ ငရဲခန်း ပထမထပ်ပါပဲ။ မီလိုဆီဗစ်ဟာ ဆားဘီးယားဘာသာစကားကို Kosovoရဲ့တရားဝင်ရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ်ပြဌာန်းလိုက်ပါတယ် ။ Kosovoလူဦးရေရဲ့ ၈၀%ကျော်ရှိတဲ့ ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေကို ဒဲ့စိန်ခေါ်လိုက်တာပါပဲ။ ဆာဘ်တွေအတွက်ကတော့ မီလိုဆီဗစ်ဟာ အမျိုးသားသူရဲကောင်းကြီးဖြစ်သထက်ဖြစ်တော့တာပေါ့။ ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေကတော့ ငြိမ်ခံမနေပါဘူး။ ၁၉၈၉ ဖေဖော်ဝါရီလမှာပဲ အလ်ဘေးနီးယန်းသတ္တုမိုင်းလုပ်သား ၁ထောင်ဟာ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြကြတော့တာပါပဲ။ သူတို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သတ္တုမိုင်းတွင်းတွေမှာပဲ လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်စဲလိုက်ပီး သပိတ်စခန်းဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ မီလိုဆီဗစ် လိုချင်တဲ့အကွက်ပါပဲ။ Kosovo ဒေသကို အရေးပေါ်အခြေအနေကြေငြာလျက် ဆာဘ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ချလာတော့တာပါပဲ။ ဆာဘ်လက်နက်ကိုင်တွေဟာ အလ်ဘေးနီးယန်း ဆန္ဒပြပွဲ သပိတ်ပွဲတွေကို ရက်ရက်စက်စက် ဖြိုခွဲရုံမက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတရားဝင်တည်ရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအစိုးရအဖွဲ့ကိုပါဖြိုခွဲပါတယ်။ စုစုပေါင်း အင်အား ၄သောင်းလောက်ရှိတဲ့ ဆာဘ်လက်နက်ကိုင်တွေဟာ kosovo ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကို သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ လက်နက်အားကိုးနဲ့ kosovoဒေသကိုအုပ်စီးပီးတဲ့အခါမှာတော့ မီလိုဆီဗစ်ဟာ ဥပဒေကြောင်းအရအသာစီးယူဖို့ဆက်လုပ်ပါတယ် / ဒါကတော့ အရှေ့မှာရေးခဲ့တဲ့ ဆားဘီးယားrepublicရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပီး Kosovo ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းပါပဲ ။ ဒီ အထိ မီလိုဆီဗစ်လုပ်ရပ်တွေကို ဘာပြောစရာရှိလဲဆိုရင် ညစ်ပတ်ပီး လက်နက်အားကိုးနဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကလွဲလို့ ထူးပီးပြောစရာမရှိလှပါဘူး။
ဒါပေမဲ့. . . . . .
နယ်မြေတခုကို လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ နဲ့ ဝင်သိမ်းလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီနယ်မြေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်။ ဟုတ်ပီ ဒါ နိုင်ငံရေးပဲ / မျှ တတာ မမျှ တတာက တဏ္ဍ။ တဖက်ကလည်း မခံနိုင်လို့ပြန်ချ တယ် ။ ဟုတ်ပီ ဒါစစ်ပွဲ ။ မကောင်းတဲ့အရာပေမဲ့ နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုမမြောက်ဘူးရယ်။ ဒါပေမဲ့ မီလိုဆီဗစ်လုပ်တာတွေကတော့ ဒီထက်ပိုပါတယ်။ Kosovo ဒေသရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်းရုံမကပါဘူး ။ ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေကို အလုပ်ထုတ်ပစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန် တရားသူကြီး စာရေး သန့်ရှင်းရေးအလုပ်သမားထိ အလ်ဘေးနီးယန်းဆိုရင် အလုပ်ထုတ်ပဲ ( လူ ၁ သိန်းနီးပါး အလုပ်ထုတ်ခံရပါတယ် )။ ပိုဆိုးတာက ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းကျောင်းသားတွေကို ကျောင်းထုတ်ပစ်တာပါ ။ ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိ အလ်ဘေးနီးယန်းဆိုရင် ကျောင်းထွက်ပဲ ။ တချို့ဒေသတွေမှာ ကျောင်းတွေပိတ်ပစ်လိုက်တာ ရာချီသတဲ့။ မောင်နီကို အလုပ်ထုတ်တယ် / မောင်ဖြူ ကိုကျောင်းထုတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မောင်နီမို့လို မောင်ဖြူ မို့လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး ဘာလူမျိုးဖြစ်လို့ ဘာ ဘာသာဝင်ဖြစ်လို့လုပ်တာဆိုတာက လူတဦးချင်းစီရဲ့အရည်အချင်းတွေကို ဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး ။ လူမျိုးရေးကိစ္စလည်း မကပါဘူး ။ ဒါဟာ လူသားမျိုးနွယ်စု တခုလုံးရဲ့ ကိစ္စပါ ။
ဒီကိစ္စဟာ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုရဲ့ polarization stage ကိုအကောင်အထည်ဖော်တာပါ
မေယုနယ်ခြားခရိုင်ကို ဖျက်သိမ်းပီးနောက်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ကျောင်းတက်ခွင့်မပေးတာ / တရွာကနေတရွာသွားခွင့်မပေးတာ / အစိုးရအလုပ်အကိုင်တွေကနေ ဖယ်ရှားပစ်တာ စတာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် ကျောင်းတက်ခွင့် ဘွဲ့ယူခွင့် ၊ အလုပ်အတွက်လျှောက်လွှာ၊ ရှေ့နေလိုင်စင်၊ ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင် စသဖြင့် နေရာအစုံမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကိစ္စမှာ ပြည်တွင်းကမွစ်ဆလင်မ်တွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံနေတာဟာ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုရဲ့ polarization stage ကို စနစ်တကျ ရေရှည် plan နဲ့ အကောင်အထည်ဖော်နေတာဖြစ်ကြောင်းပါဗျားး
ကျနော်တို့ နဲ့ ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေနဲ့ ကွာတာက သူတို့က လွှတ်တော် အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲ စတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ အကျွမ်းတဝင်ရှိတယ်။ ဒီတော့ တန်ပြန်လုပ်တတ်ကိုင်တတ်တယ်
ဒါ့ကြောင့် ၁၉၈၇ မှာ စတင်နှိပ်ကွပ်ခံရပေမဲ့ ၁၉၉၉ မှာ လွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်မရ ရုံမက နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးကစလို့ကန့်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကျုပ်တို့တွေကတော့ ၁၉၇၀ လောက်ကနေ ကျောကော့ပီးခံလာလိုက်တာ ဂျင်နိုဆိုဒ်စက်ဝိုင်း ၃ ပတ်လောက်လည်ပတ်ပီးသွားရောပေါ့။
ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေကို နှိပ်ကွပ်ပွဲ အရှိန်ရတဲ့ အချိန်မှာ မီလိုဆီဗစ်ဟာ သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအောင်ပွဲတွေကို သိဒ္ဓိတင်ပါတယ်။ Julyလ ၂၈ ရက် ၁၉၈၉ ခုနှစ် ကိုဆိုဗိုဒေသရဲ့ ဘလက်ဘဒ်ကွင်းပြင်မှာ ဆာဘီးယားနိုင်ငံရဲ့ဒေသ အသီးသီးက စုရုံးရောက်ရှိလာတဲ့ ဆာဘ်လူမျိုး ၁ သန်းကျော်ရှေ့မှာ သမ္မတကြီး မီလိုဆီဗစ်ဟာ အင်မတန်မှ သမိုင်းဆိုးဝင်မဲ့ မိန့်ခွန်းတရပ်ကို မြွက်ကြားပါတော့တယ်။ မိန့်ခွန်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၆၀၀ကျော်က ကိစ္စ ကိုသင်ခန်းစာယူဖို့နဲ့ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဖြစ်နဲ့ နှစ် ၆၀၀ ကျာ်က စစ်ပွဲနဲ့ တူညီနေကြောင်း ၊ ဆာဘ်တွေအနေနဲ့ သတ္တိရှိဖို့ ၊ ပြတ်သားဖို့ ဆိုပီး သွေးထိုးသွားတာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၀၀ ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတရပ်ကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ အာဃာတတွေကို အမြင့်ဆုံးဆွဲတင်ခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းအပီးမှာ မီလိုဆီဗစ်ဟာ ဆာဘ်လူမျိုးတွေအဖို့တော့ ပြိုင်ဘက်မရှိတဲ့ အမျိုးသား သူရဲကောင်းကြီးအဖြစ် အခိုင်အမာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်
( မအလ က DSA သင်တန်းဆင်းပွဲမှာ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၆၀ ကျော်က ၁၉၄၂ Crisis နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပီးပြောသွားတာမျိုးကတော့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေရဲ့ နောက်ခံ စိတ်နေစိတ်ထား တူညီမှုပါပဲ ) ။ မီလိုဆီဗစ်ဟာ ဒီလောက်နဲ့တင် ဘယ်ရပ်မလဲ ။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ က မီဒီယာတွေနဲ့ အင်တာဗျူးတွေ ဖြေဆိုပါသေးတယ် ။ ” Kosovo ဆိုတာ ကျုပ်တို့ ဆာဘ်တွေပဲ ပိုင်တာ ။ ဒီဒေသဟာ
ကျုပ်တို့ဘာသာရေးရဲ့ ဘူမိနက်သန် ။ ကျုပ်တို့ရဲ့ ဘုရားကျောင်းတွေ ၊ ကျုပ်တို့ ဘိုးဘွားတွေခေါင်းချခဲ့တဲ့ သင်္ချိုင်းမြေတွေက Kosovo မှာ လက်ညိုးထိုးမလွဲပဲ ။ Kosovo မှာ ကျုပ်တို့ အရှုံးမပေးဘူး ။အလျော့မပေးဘူး ” ဒါဟာ မီလိုဆီဗစ်ရဲ့ လက်သုံးစကားတွေပါ။ စကားနောက်တရားပါ ဆက်လုပ်တာတွေကတော့ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေရဲ့ သမိုင်းဝင် အဆောက်အဦတွေ ၊ အထိမ်းအမှတ်တွေ နဲ့ သင်္ချိုင်းတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်တာပါ။
နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်တည်လာတဲ့ လူမျိုးတမျိုးရဲ့ သမိုင်းအမွေအနှစ်တွေကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်တာဟာ ဂျင်နိုဆိုဒ်ကျူးလွန်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းပြဆိုတာကို ကမ္ဘာကြီးကတောင် သတိမထားမိသေးတဲ့အချိန်ကာလပေါ့ဗျာ။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာလည်း စော်ဘွားတွေရဲ့ ဟော်နန်းတွေကို မြန်မာစစ်ဘက်က ဖျက်ဆီးပစ်တာ ။ မွစ်ဆလင်တွေရဲ့ သင်္ချိုင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းပစ်တာတွေဟာ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲ ဆန်းစစ်စရာပါပဲ။ မီလိုဆီဗစ် အဖို့ Kosovo ကို စစ်အင်အားသုံးပီးသိမ်းပိုက်လို့လဲ ပီးပီ ။ လူတဦးချင်းစီရဲ့ ပညာရေး ကျန်းမာရေး စားဝတ်နေရေးကိစ္စတွေကိုလဲ ဖျက်ဆီးလိုက်ပီ ။ လူသေတွေနေတဲ့ သင်္ချိုင်းပါမချန် ဖျက်ဆီးပီးပီ ။ ဘာထပ်လုပ်ဖို့ကျန်သေးသလဲ ။ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရဲ့ အပြင်းထန်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ extermination = အစုလိုက်အပြုံလိုက်သုတ်သင်ခြင်း အဆင့်ကို ဆက်လုပ်ဖို့ပဲကျန်ပါတော့တယ်။
ဒါပေမဲ့ မီလိုဆီဗစ်ခေါင်းဆောင်တဲ့ ဆာဘ်အုပ်စုဟာ ဘော့စ်နီးယားနဲ့ ခရိုအေးရှားဘက်ကို မျှားဦးလှည့်သွားတဲ့အတွက် ၁၉၉၁ ကနေ ၁၉၉၅ အထိ Kosovo ဒေသမှာ extermination အဆင့်ကိုရောက်မလာဘဲ smouldering genocide ပုံစံနဲ့ ၅ နှစ်တာမျှ တငွေ့ငွေ့ လောင်ကျွမ်းနေပါတော့တယ်။
ဆာဘ်တွေအနေနဲ့ Kosovo ဒေသကို သိမ်းပိုက်ထားတယ်ဆိုသော်လည်း စတုရန်းမိုင် ၄၀၀၀ ကျော်တဲ့ နယ်မြေနဲ့ လူဦးရေတသန်းခွဲရှိတဲ့ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေကို အပြည့်အဝ မထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဆာဘ်တွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကတော့ မြို့ကြီးတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပါ။ ကျန်တဲ့ ကျေးလက်နဲ့ တောင်ကုန်းထူထပ်တဲ့ ဒေသတွေဟာ ဆာဘ်စစ်ကြောင်းတွေ တခါတရံရောက်လာတာကလွဲလို့ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိပါတယ်။ ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေက ဆာဘ်တွေရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးကို အသိအမှတ် မပြုပါဘူး ။ အခွန်လည်းမဆောင်ဘူး ။ တရားတဘောင်ဖြစ်လာရင်လည်း ကိုယ်ပိုင်တရားရေးစနစ်နဲ့ ပဲ စီရင်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ပညာရေး ကျန်းမာရေး တရားစီရင်ရေး အခွန်အကောက်ကိစ္စအထိကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တာက ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ထားတဲ့ စင်ပြိုင်အစိုးရရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ပါ။ စင်ပြိုင်အစိုးရကို အဓိက ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ကတော့ Democratic League of Kosovo ပါ။ အတိုကောက် LDK လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ( ရှေ့မှာ ပြောခဲ့တဲ့ LPK က သပ်သပ်တဖွဲ့ပါ )
ဒီလိုမျိုး de facto government = စင်ပြိုင်တရားမဝင် အစိုးရအနေနဲ့ ရပ်တည်နိုင်မှုမျိုးကို KNU ရရှိခဲ့ဖူးပီး KIO အနေနဲ့ကတော့ လက်ရှိအခြေအနေ အထိ ရ ရှိဆဲဖြစ်ပါတယ်။ KIO နဲ့ KNU ရဲ့ အားသာချက်က သောင်းချီတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရှိပါတယ် ။ LDK မှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တောင် မရှိပါဘူး။ KLA တပ်ဖွဲ့ဟာ နောက်ပိုင်းမှ သီးခြားထွက်ပေါ်လာတာပါ။ LDKဟာ ၁၉၉၀ နှစ်ဆုံးပိုင်းမှာ ဟာ Kosovo ဒေသရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ကြေငြာခဲ့ကာ ၁၉၉၁ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲပြု လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဆလိုဘေးနီးယား ခရိုအေးရှား နဲ့ ဘော့စ်နီးယားတို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုလိုက်တာကို မြင်ရတဲ့ အခါ LDK အနေနဲ့ အလွန်အားကျ ခဲ့ပါတယ်။ အလွန်တရာလည်းမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှု ရဖို့လည်း အပြင်းအထန် လှုပ်ရှားပါတယ်။ မီဒီယာတိုက်ပွဲအစွမ်းကုန်နွှဲလျက် ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေ ၊ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဆန္ဒပြင်းပြပုံတွေ ၊ ပြည်သူ့ထောက်ခံဆန္ဒမဲပေးပွဲတွေကို ကမ္ဘာသိအောင် အားထုတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက် အသံထုတ်ပြောပေးပါတယ်။ ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဆန္ဒပြင်းပျမှုကိုလည်း နားလည်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရေးပါတဲ့ နိုင်ငံရေး အသိအမှတ်ပြုမှုကိုတော့ လုံးဝ မပေးပါဘူး။ အဆိုးဆုံးကတော့ ဘောစ်နီးယားပြည်တွင်းစစ်ကို အဆုံးသတ်တဲ့ Dayton စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ အချိန်ပါ။ LDK ကတော့ Dayton စာချုပ်မှာ ဘော့စ်နီယား နဲ့ ခရိုအေးရှားတို့အပြင် Kosovo ကိစ္စ ကိုပါ ထည့်သွင်းဖြေရှင်းပေးလိမ့်မယ်လို့ အမျှော်လင့်ကြီး မျှော်လင့်ထားခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၇ ကတည်းက Kosovo က စလိုက်တဲ့ ကိစ္စကြီးကို ဖြေရှင်းရာမှာ Kosovo ကိုတော့ ဘေးချန်မထားလောက်ဘူးရယ်လို့ ထင်တလုံးနဲ့ ရှိနေမိတဲ့ LDK ပါ။ နိုင်ငံတကာဘက်က အမြင်ကကျတော့ ဘော့စ်နီးယား နဲ့ ခရိုအေးရှားဟာ ဆားဗီးယား Republic ရဲ့ အပြင်ဘက် မှာတည်ရှိတဲ့ Federal Border Line တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေဖြစ်တာမို့ လွတ်လပ်ရေးကို အသိအမှတ်ပြုတာဖြစ်ပီး ဆားဗီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာပဲ ရှိတဲ့ Kosovo ကတော့ ဆားဗီးယားရဲ့ ပြည်တွင်းရေး ကိစ္စ အဖြစ်သာ အသိအမှတ်ပြုပါသတဲ့။ နောက်ပီး ဥရောပကောင်စီဟာ ဘော်လ်ကန်ကိစ္စမှာ ခြေကုန်လက်ပမ်းကျနေပီဖြစ်တာမို့ Kosovo မှာနောက်တပွဲ ဆက်မကချင်ကြတော့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် Dayton စာချုပ်မှာ Kosovo ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ပါဝင်ခွင့်တောင် မပေးခဲ့ပါဘူး။ LDK စင်ပြိုင် အစိုးရဟာ အလွန်ပဲအထိနာသွားပါတယ်။ ဂျာမနီကဆိုရင် Dayton စာချုပ်လဲပီးရော ဘော်လ်ကန်ကိစ္စတွေ ပီးပီ ။ဒါ့ကြောင့် ဂျာမနီမှာခိုလှုံနေတဲ့ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့ မီလိုဆီဗစ်နဲ့ စကားစပြောနေပါပီ။ LDK ဘာဆက်လုပ်မလဲ။ LDK အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ စွမ်းရည်ကို ဂီယာကုန်တင်ခဲ့ပီးပါပီ ။ ဒီထက် ထပ်မလုပ်တတ်တော့ပါ။ ဂီယာကျမသွားရုံ ဆက်ထိန်းထားတာပဲ လုပ်တတ်ပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ LDK ရဲ့ ဂီယာလောက်နဲ့တော့ တော်လှန်ရေးဟာ ရှေ့ဆက်မတိုးတော့ပါဘူး။ ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေ အဖို့ နောက်ထပ် တော်လှန်ရေး နည်းနာတရပ် ရှာဖွေဖို့ အချိန်ကျလာခဲ့ပီလားး
Kosovo Liberation Army ပေါ်ထွက်လာခြင်း
၁၉၉၅ Dayton စာချုပ်အပီးမှာ မီလိုဆီဗစ် ဟာ ဘောစ်နီယား နဲ့ ခရိုအေးရှားမှာ စိုက်ထားတဲ့ အင်အားတွေကို ပြန်ထုတ်ပီး Kosovo မှာ အသုံးချဖို့ ပြင်ဆင်ပါတယ်။ တငွေ့ငွေ့လောင်ကျွမ်းတဲ့ အဆင့်ကနေ အပြီးသတ်သုတ်သင်ရေးအဆင့်ဟာ ရောက်လို့လာပါပီ။ မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာ ဆာဘ်လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုက ပိုမိုတင်းကြပ်လာသလို ကျေးလက်ဒေသဘက်မှာ စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အရေအတွက်တွေ မြင့်တက်လာပါတယ်။ အလ်ဘေးနီးယန်း သေဆုံးမှုနဲ့ ထွက်ပြေးဒုက္ခသည်တွေလည်း ပိုများလာပါတယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ မှာ အလ်ဘေးနီးယန်းကျောင်းသားတွေဟာ ပေါက်ကွဲဆန္ဒပြကြပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဆာဘ်အာဏာပိုင်တွေကို ဆန့်ကျင်ခြင်းနဲ့အတူ ဒီတခါထူးဆန်းစွာ LDK ကိုပါ ရှုံ့ချပါတယ်။ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ LDK အဖြစ် သရော်ကြပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ လူငယ်ကျောင်းသားတွေဟာ ကိုယ်ယောင်ဖျောက်သွားကြပီး ဆာဘ်လက်နက်ကိုင်တွေကို တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စနစ်တကျ တိုက်ခိုက်မှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဇယ်ပုလင်းကို အဝတ်ပတ်မီးရှို့ပီး ဆာဘ်ရဲစခန်းတွေထဲကိုပစ်သွင်းတာ ၊ အရက်မူးပီး ငိုက်နေတဲ့ဆာဘ်ရဲကို ဓါးနဲ့ထိုးပြေးတာ စသဖြင့် ဟိုတပြောက် ဒီတပြောက် တကိုယ်တော်ချင်းစီလုပ်ကြတာများပါတယ်။ LDK လူကြီးပိုင်းကတော့ ဒီလိုလုပ်တာဟာ ဆာဘ်တွေရဲ့ဒေါသကိုပိုဆွပေးသလိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ် ။ မလုပ်ကြနဲ့လို့ တားမြစ်ပါတယ် ။ လူငယ်တွေဘက်ကလဲ ” ခင်ဗျားတို့လမ်းကြောင်းကြီးအလုပ်မဖြစ်လို့ ကျုပ်တို့ကတော့ ချပီ , လာမတားနဲ့ ပြန်ပက်ပါတယ် ”
ဒီလူငယ်တွေကို LDK က တားမြစ်ပေမဲ့ LPK ကတော့ အားပေးပါသတဲ့။ အထူးသဖြင့် မြို့ပြမှာ ဒီလိုဗရမ်းဗတာ လျှောက်လုပ်နေမဲ့အစား နယ်မြေကျယ်ပြန့်ပီး တောင်တန်းထူထပ်တဲ့ ကျေးလက်မှာ စနစ်တကျအုပ်စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာတော့ ဆာဘ်လက်နက်ကိုင်တွေကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြု လုပ်နေတာ ၁၉၉၄ ခုနှစ်လောက်ကတည်းကပါ။ ၁၉၉၄ ခုနှစ် မေလ မှာ ကြေငြာချက်တစောင် ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ” Drenas မြို့မှာ ဆာဘ်ရဲအရာရှိတယောက်ကို တိုက်ခိုက်တာဟာ ငါတို့လက်ချက်ပဲလို့ကြေငြာထားပါတယ် ” ။
ကြေငြာချက်ရဲ့ အောက်ခြေမှာ ရေးသားထားတာကတော့ ” Kosovo Liberation Army ” တဲ့ဗျာ။KLA ဟာ စတင်ဖွဲ့စည်းကာစက လူအင်အား ၂၀ ကျော်သာရှိခဲ့ပီး စစ်သင်တန်းလည်း ကောင်းကောင်းကန်းကန်း မတက်ဖူးကြပါဘူး။ ၁၉၉၇ ရောက်လို့မြို့ပြလူငယ်တွေ လာပူးပေါင်းတာတောင် အင်အား ၂၀၀ ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်။ LPK ဟာ KLA ရဲ့ နိုင်ငံတကာပြောရေးဆိုခွင့်အဖြစ်ခေါင်းခံတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။ ” ခေါင်းခံ ”လို့ပြောတာ အလကားမဟုတ်ပါဘူး။ KLA ကို ဆာဘ်အာဏာပိုင်တွေက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်သလို နိုင်ငံတကာကလည်း အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလက်ခံနေတဲ့
အခြေအနေမို့ပါ။ KLA ဟာ နိင်ငံရေးဦးဆောင်မှုတခုကနေ ပေါက်ဖွားလာတာမဟုတ်ပဲ မခံချင်စိတ်နဲ့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ထလုပ်လိုက်တဲ့ လူငယ်တချို့ဆီကနေ ပေါက်ဖွားလာတာပါ။ သာမန်အလ်ဘေးနီးယန်းတွေအဖို့လည်း KLA ကဆာဘ်တွေကို မစို့မပို့တိုက်ခိုက်လိုက် ၊ ကြေငြာချက်တစောင်ထုတ်လိုက် ၊ဆာဘ်တွေက ဒေါသတကြီးလက်စားချေတာခံလိုက်ရနဲ့ မို့ KLA ကို နားလည်ဖို့ခက်နေပါတယ်။ အများစုထင်ကြတာက KLA ဆိုတာ ဆာဘ်တွေက ငါတို့ကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ အကွက်ဖန်ပေးနေတဲ့ ဆာဘ်တွေရဲ့ လက်ပါးစေတွေပဲ။ ပိုဆိုးတာက LDKစင်ပြိုင်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တချို့ကပါ အဲ့လို ပြောကြတာပါ ။ တကယ်တော့ LDK ဟာ LPK လို လက်နက်ကိုင်လမ်းကြောင်းကို မထောက်ခံပေမဲ့ KLA ရဲ့အမှန်တကယ် တည်ရှိမှုကို သူတို့သိကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ အကြမ်းဖက်နည်းလမ်းသုံးသူတွေအဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ခံရမှာကြောက်လို့ KLA ကို လူထုအမြင်ဝါးအောင်လုပ်ပြကြတာပါ။ KLA ရဲ့အနေအထားကလည်း ကြေငြာချက်ထုတ်တာကလွဲလို့ ပြည်သူလူထုနဲ့ အထိအတွေ့မရှိခြင်းကလည်း ဒီလိုထင်စရာပါပဲ ။ သာမန်အလ်ဘေးနီးယန်းတွေအဖို့ကတော့ လက်နက်ကိုင်ပီးပြန်ချတယ်ဆိုတာကို ဟိုတပြောက်ဒီတပြောက်လုပ်ပီးကြေငြာချက်ထုတ်ရုံမဟုတ်ပဲ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ရဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။
KLA အပေါ်လူထု အထင်လွဲနေတာကို ချေဖျက်ပစ်မဲ့ အဖြစ်အပျက်တခု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ Adam Jashari = KLA ရဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ်လို့ပြောရမည့်သူ။ သူ့ကို ဆာဘ်တွေက အသေရ ရ အရှင်ရ ရ လိုချင်နေတာပါ။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် မတ်လမှာ Prekaz ရွာကို ဆာဘ်တပ်ဖွဲ့တွေက ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ ဆာဘ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Prekaz ရွာမှာ အခြေပြုနေတဲ့ Adem Jashari ရဲ့ တပ်ဖွဲ့ ကို ချေမှုန်းဖို့ပါ။ တကယ်တော့ Adem Jashari ဟာ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ အခြေပြုနေတာမဟုတ်ပဲ မိသားစုနဲ့ အတူရှိနေတာပါ ။ လုံခြုံရေးတပ်တချို့တော့ သူနဲ့ အတူရှိပါတယ်။ သံချပ်ကာကားတွေအပါအဝင် လက်နက်ကြီးငယ်အစုံအလင်နဲ့ ဆာဘ်စစ်ကြောင်းဟာ Prekaz ရွာကို ဦးတည်ချီတက်လာနေကြောင်း Adem Jashari ကို သူ့လက်အောက်က သတင်းပို့ပါတယ်။ KLA ရဲ့ political adviser တွေက ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ အသင့်မဖြစ်သေးတာကြောင့် ရှောင်ထွက်ဖို့ အကြံပေးကြပါတယ်။ Adem Jashari ပြန်ပြောတာက ” လုံးဝရှောင်ထွက်လို့မဖြစ်ဘူး / ရှောင်ထွက်လိုက်ရင် တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းအတွက် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ကြီးမားသွားလိမ့်မယ် ”။ KLA အပေါ်လူထု အထင်အမြင်လွဲတာပိုဆိုးသွားနိုင်တာကို သူတွက်ဆမိလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူက ခံတိုက်ဖို့ပြင်ပါတယ်။ ဆာ့ဘ်စစ်ကြောင်းဟာ Jashariနေတဲ့နေရာကို ချည်းကပ်တော့ သဲသဲမဲမဲ ပစ်ခတ်မှုနဲ့ ကြုံတွေ့ရပီး နောက်ပြန်ဆုတ်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ အဝေးကနေ လက်နက်ကြီးနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပစ်ခတ်ပါတယ်။ လက်နက်ကြီးနဲ့ အားရအောင်ပစ်ပီးမှ ဆာဘ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ Jashari မိသားစုနေတဲ့ အိမ်ကို ရှင်းပါတယ်။ မသေမရှင်ဖြစ်နေသူတွေကျန်နေသေးပေမဲ့ ဆာဘ်တွေက နေရာမှာတင် အပြတ်ရှင်းလိုက်ပါတယ်။ Adem Jashari အပါအဝင် မိသားစု၄၅ ယောက်ကျော် ကျဆုံးသွားပါတယ်။ ဆာဘ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ စစ်ရေးရည်မှန်းချက် ၁၀၀ % အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ၁၀၀% ရှုံးနိမ့်သွားပါတယ်။
Jashari မိသားစုရဲ့ သတင်းဟာ Kosovo ဒေသတခုလုံးကို ပျံ့နှံ့သွားပီး KLA ကိုထောက်ခံကြောင်း ဆန္ဒပြပွဲတွေ မြို့တော် Prishtina မှာ ဝုန်းဒိုင်းနဲ့ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ဘယ်သူ့တိုက်တွန်းမှုမှ မပါပဲ ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေဟာ လမ်းပေါ်တက်လာကြပီး ဆာဘ်တွေကို ဒီလိုပြန်ချတဲ့အတွက် KLA တပ်မှူးကြီးကို ဂုဏ်ယူကြောင်းအော်ဟစ်ကြွေးကြော်ကြပါတယ်။ ဆာဘ်တွေအနေနဲ့ ဒီ ဆန္ဒပြပွဲကို ထုံးစံအတိုင်းပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြိုခွဲပစ်လိုက်ပေမဲ့ KLA ကတော့ ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေ ရင်ထဲမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ နေရာယူသွားခဲ့ပါပီ။ လူငယ်တွေဟာ KLA နဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားလာကြပါတယ်။ Kosovo ဒေသအတွင်းက လူငယ်တွေတင်မကပဲ USကနေ KLA ထဲဝင်လာကြသူတွေတောင် ၄၀၀ လောက်ရှိလို့ သူတို့ကို သီးသန့် Battalion တခုဖွဲ့ပေးခဲ့ရပါသတဲ့။ US လိုနိုင်ငံမှာ အေးအေးသက်သာဘဝကျောင်းနိုင်ရက်နဲ့ အမိမြေအတွက်လာရောက်ပေးဆပ်တဲ့ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေရဲ့ စိတ်ထားကတော့ ချီးကျူးစရာပါ။ အုပ်စုလိုက်ဝင်ချလာတဲ့ အင်အားစုတွေကို နေရာပေးဖို့ KLA အတွက် ရေကန်အသင့်ကြာအသင့်လိုဖြစ်ထားတာကလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ Kosovo နဲ့အိမ်နီးချင်း အလ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံမှာ ကွန်မြူ နစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျသွားပီး မတည်မငြိမ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။ လစာ မှန်မှန်မရတော့တဲ့ Albanianစစ်တပ်က သူတို့ရဲ့လက်နက်တိုက်က လက်နက်တွေကို လျှော့ဈေးနဲ့ ထုတ်ရောင်းနေကြတာပါ။ KLA အတွက်တော့ ရွှေထုပ်ကြီးကောက်ရသလိုပါပဲ။ ဒါ့အပြင် Albanianတပ်က အရာရှိတချို့ဟာ KLA ကိုစနစ်တကျ သင်တန်းပေးပါတယ်။ Albania နိုင်ငံထဲမှာကို ခေါ်ပီးသင်တန်းပေးတာပါ။ အဲ့ဒီသင်တန်းက ဆင်းလာသူတွေ KLA ထဲပြန်ရောက်ချိန်နဲ့ KLA ထဲကို လူတွေအများအပြားရောက်လာချိန် တိုက်ဆိုင်သွားပါတယ်။ လက်နက် လူသူ စစ်ပညာ စုံလင်တဲ့ KLA ဟာ ရုတ်ခြည်း အင်အား ၁သောင်းကျော်အထိ အမြဲတမ်းစုဖွဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားပီး စစ်ဒေသ ၇ ခုခွဲကိုင်ရတဲ့အထိ ကျယ်ပြန့်သွားပါတယ်။ တကယ်တော့ Kosovo နဲ့ ပတ်သတ်လို့ နိုင်ငံတကာအဆင့် ထိုးဖောက်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ အတော်ကြီးကို ခရီးရောက်တယ်လို့ပြောရမှာပါ။ ၁၉၉၂-၉၃ ကတည်းက လူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာတွေမှာ နိုင်ငံတကာဥပဒေသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ term တွေနဲ့ဆာဘ်တွေကို ထုနေပါပီ။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်ကတည်းက US သမ္မတ စီနီယာဘုရ်ှကိုယ်တိုင် ဥရောပကောင်စီရဲ့ အစီရင်ခံစာကိုထောက်ပီး Kosovo မှာမီလိုဆီဗစ်လုပ်ခဲ့တာတွေကို သတိပေးစာတိုက်ရိုက်ရေးတဲ့ အနေအထားထိထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ နှစ်စဉ် UN General Assembly မှာ Kosovo နဲ့ပတ်သတ်လို့ ဆာဘ်တွေကိုဖိအားပေးတဲ့ resolution တွေထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ၁၉၉၈-၉၉ မှာဆိုရင် Security Council ကပါ Resolution ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေဟာ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တိုးတက်မှုမရှိတာနဲ့ နောက်နည်းလမ်းတခုကို ရှာပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကို ထိုးဖောက်တဲ့ LDK အဖွဲ့အနေနဲ့ KLA ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ပေမဲ့လည်း တော်လှန်ရေးရေချိန် အီလာတဲ့နဲ့အမျှ KLA ကတော့ ရှေ့တိုးထွက်လာခဲ့ပါတယ်
ဒါဟာ တော်လှန်ရေးရဲ့ natural course တခုလို့တောင်ပြောရမလိုပါပဲ။ ဆာဘ်တွေကို ခံတိုက်တဲ့ Jashari မိသားစုဟာ အဘွားကြီးကစလို့ ခလေးပေါက်စထိ လက်စတုံးအသတ်ခံရတာကို မြင်ရပါလျက် ကြောက်ရွံစိတ်မပေါ်ပဲ KLA ကိုထောက်ခံသူတွေအဖြစ် ရပ်တည်ပြရဲတဲ့ အလ်ဘေးနီးယန်းလူထုကိုလဲ ချီးကျူးရမှာပါ။
နောက်တခုက ချီးကျူးစရာက အဝေးရောက်အလ်ဘေးနီးယန်းတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ် နဲ့ ခံယူချက်ကောင်းမွန်မှုပါ။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းက ဆွဇ်ဘဏ်တခုမှာဖွင့်ထား Homeland Calling ဆိုတဲ့ account နဲ့ Kosovo မှာပိတ်မိနေတဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေအတွက် ထောက်ပံ့ကြေး စတင်စုဆောင်းခဲ့ကြတာပါ။ လက်နက်ကိုင်ဖို့လိုအပ်လာချိန်မှာလည်း အမေရ်ကန်လို နိုင်ငံကနေတောင် ပြန်လာခဲ့ပီး အမှုထမ်းကြပါတယ်။ ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေရဲ့ တဘို့တည်းမကြည်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုတော့ အင်မတန်မှ လေးစားမိကြောင်းပါဗျားးးး။ KLA အနေနဲ့ အင်အားကောင်းလာသလို ဆာဘ်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုကလည်း တိုးသည်ထက်တိုးလာပါတယ်။ ၁၉၉၈ အောက်တိုဘာ မှာ ထုတ်တဲ့ UNHCR ရဲ့ အစီရင်ခံစာအရ ၁၉၉၈ ခုနှစ်အတွင်းအောက်တိုဘာအထိ ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်း ၁၅၀၀ ကျော် သတ်ဖြတ်ခံရပီး လူ၃ သိန်းထပ်မံ ထွက်ပြေးရပါတယ်။ ဒါဟာ Kosovo ဒေသမှာ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအတွက် OSCE အဖွဲ့ဝင်ဖို့ ဖိအားဖြစ်လာစေပါတယ်။ OSCE မက လို့ ဘာဝင်ဝင် ဆာဘ်တွေကတော့ လူသတ်တာကို မရပ်ပါဘူး ။ ဘော့စ်နီးယားမှာလည်း သူတို့ ဒီလိုပဲ သတ်ခဲ့တာပဲ ။ ဘာမှ အရေးယူခြင်းမခံရဘူးလေ။ ဒီတော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေကို ဆာဘ်တွေက ဖုတ်လေသည့် ငပိရှိသည်ဟုပင်မထင် လက်ရဲ ဇက်ရဲ သတ်ပွဲတွေ ဆက်လုပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ဖိအားဆိုတာ ဆာဘ်တွေအဖို့ ထည့်တွက်စရာ မလိုတဲ့ လေအိုးတွေသာ ဖြစ်နေပါတယ်။
လမ်းဖွင့်ပေးတာလား / ဂွင်ထဲဆွဲသွင်းတာလား
၁၉၉၈ ဖေဖော်ဝါရီ မှာ US အထူးသံအဖွဲ့ဟာ မီလိုဆီဗစ်နဲ့ တွေ့ဆုံပီး Kosovo ကိစ္စ ကိုဆွေးနွေးပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲမှာ US ဘက်က လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို အလေးအနက်စိုးရိမ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပီး ဆားဘီးယား ရဲ့ အချုပ်အချာအာဏာပိုင်နက်ကိုတော့ US အနေနဲ့ လေးစားမှာဖြစ်ကြောင်း နဲ့ KLA လို ” အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ” ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကိုလည်း လက်မခံနိုင်ကြောင်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ မီလိုဆီဗစ် အဖို့ကတော့ ဒါဟာ US အစိုးရ ရဲ့ မီးစိမ်းပြမှုလို့ ယူဆပီး Kosovo မှာ ကြီးမားတဲ့ ထိုးစစ်တွေလုပ်ဖို့ ဆာဘ်လက်နက်ကိုင်တွေကို အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆာဘ်တွေအနေနဲ့ သူတို့လိုချင်တောင့်တတဲ့ အရာကို ရ ရှိခဲ့ပါပီ ။ US အစိုးရကိုယ်တိုင်က အကြမ်းဖက်သမားလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ KLA နဲ့ အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုထောက်ခံတဲ့ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေကို အပြီးသတ် သုတ်သင်ခွင့်ရခဲ့ပါပီ။ ဆာဘ်တွေ အနေနဲ့ ထိုးစစ်ကြီး ၅ ခု ဆင်နွှဲပါတယ်။ ထိုးစစ်အစပိုင်းမှာ နယ်မြေကျွမ်းကျင်တဲ့ KLA တွေက နေရာအနှံ့ ပြောက်ကျားနည်းနဲ့ ဖြန့်ခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက် ဆာဘ်တွေအနေနဲ့ အတော်အထိနာပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဆာဘ်တွေက သာမန် အရပ်သားကိုပါ သတ်ဖြတ်ပီး ရွာတွေကိုပါ မီးရှို့တဲ့ အခါ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေဘက်က ပိုပီးအထိနာကုန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြေအနေတွေက ကွာခြားနေပါပီ ။ OSCE အဖွဲ့ဟာ ဆာဘ်တွေ လုပ်သမျှ ကိုမှတ်တမ်းတင်နေရုံမက ကမ္ဘာ့ထ်ိပ်သီး မီဒီယာတွေဟာလည်း မလွတ်တမ်းသတင်းယူပီး ကမ္ဘာကို တင်ဆက်နေပါပီ ။ ဆာဘ်တွေရဲ့ မျိုးဖြုတ်စစ်ဆင်ရေးကို ရပ်တန့်ဖို့ ဖိအားဟာ ကြောက်ခမန်းလိလိပါ။ ၁၉၉၈ UNHCR အစီရင်ခံစာထွက်တော့ US အစိုးရက မီလိုဆီဗစ်ကို သတိပေးပါတယ်။ သာမန် သံခင်းတမန်ခင်း သတိပေးစကားမဟုတ်ဘဲ ကမ္ဘာသိရာဇသံပေးတာပါ။ စစ်ဆင်ရေးတွေကို ချက်ချင်းရပ်ဖို့ပါ ။ မီလိုဆီဗစ် အနေနဲ့ ခဏရပ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ အမြဲတမ်းတပ်တချို့ကိုလည်း တပ်ပြန်ဆုတ်စေပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ခဲယမ်းဖြည့်တင်းခြင်းနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြန်ဖြည့်တာတွေ လုပ်သလို ဆာဘ်ပြည်သူ့စစ်တွေရဲ့ သတ်ဖြတ်ပွဲတွေကလည်း ဆက်ရှိနေတုန်းပါ။ NATO အဖွဲ့ကလည်း ဆားဗီးယားနိုင်ငံ နဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်တာတွေ လုပ်ပြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ မီလိုဆီဗစ်ဟာ ထိုးစစ်တွေကို ပြန်လည်စတင်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ သံခင်းတမန်ခင်းဖိအားကို မီလိုဆီဗစ်ဟာ ထုံနေပါပီ ။ မြေပြင်က ဆာဘ်တပ်တွေကလည်း ” တနေ့တရွာမီးသာရှို့ထား NATO ဆိုတာ အဝေးကြီးမှာဟေ့ ” လို့လှောင်ပြောင်ပီး လက်တွေ့လည်း တကယ် မီးရှို့ လူသတ်ပွဲတွေ ဆက်လုပ်ကြပါတယ်။ သူတို့ပြောမယ်ဆိုလည်း ပြောစရာကောင်းလောက်အောင် ၁၉၉၉ ခုနှစ်ရောက်သည်အထိ နိုင်ငံတကာရဲ့ တိုက်ရိုက်စွက်ဖက်မှုက ရောက်မလာပါဘူး ။ ၁၉၉၉ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ဆာဘ်တွေဟာRecak မှာ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ပွဲတရပ် လုပ်လိုက်ပြန်ပါတယ် ။ အနီးကပ်တေ့ပစ်ခံရတဲ့ အလောင်းတွေ လည်လှီးအသတ်ခံရတဲ့ သူတွေကိုမြင်ပီး OSCE အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင် အော့နှလုံးနာသွားပါတယ်။
ဆာဘ်တွေကတော့ ဒီသတ်ဖြတ်မှုဟာ KLAတွေက လုပ်တာဖြစ်ပီး နိုင်ငံတကာမှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ဂွင်ဖန်ထားတာလို့ ဗြောင်ငြင်းပါသတဲ့ ။ သုံးထားတဲ့ ကျည်တွေ ၊ ကျည်ဖောက်ဝင်တဲ့ပုံစံတွေ ဆာဘ်တပ်တွေရဲ့ ကြေးနန်းတွေအရ တရားခံတွေဟာ ဆာဘ်တွေဆိုတာငြင်းမရအောင်ကို ခိုင်မာပါတယ်။ ထိုးစစ်စတာကနေ ဒီ အချိန်အထိ အလ်ဘေးနီးယန်း ၁၂၀၀၀ အသတ်ခံလိုက်ရပါပီ ။ ထွက်ပြေးသူ အရေအတွက် ၉ သိန်းကျော်သွားပီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဥရောပနိုင်ငံတွေဟာ ကြီးမားတဲ့ refugee crisis ကို ရင်ဆိုင်ရပါတယ် ။ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ တခုခု လုပ်ကို လုပ်ရတော့မှာပါ ။ ဆာဘ်တွေရဲ့ထိုးစစ် ၁ နှစ်မြောက်ချိန် ၁၉၉၉ ဖေဖော်ဝါရီလ ပဲရစ်မြို့မှာ R2P ဝင်ဖို့ လူသိရှင်ကြားအစည်းအဝေး စထိုင်ပါတယ် ။ ကန့်ကွက်တာတွေ အချိန်ဆွဲတာတွေ ညှိတာတွေ ရှိပေမဲ့ တလအကြာ ၁၉၉၉ မတ်လ မှာ NATO က ဗုံးစကြဲပါတော့တယ်။ ၇၈ ရက်တိုင်တိုင် ဗုံးကြဲအပီးမှာတော့ Kosovo ဟာ ဂျင်နိုဆိုဒ်ငရဲဒဏ်ကနေ လွတ်မြောက်သွားပါတော့တယ်။ ၁၉၉၉ မေလမှာ မီလိုဆီဗစ်ကို ICC မှာတရားဝင်စွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။
ယူဂိုဆလားဗီးယား ပြိုကွဲခြင်း ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာ အင်မတန်မှ ရှုပ်ထွေးပီး အကွက်များတဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကြီးပါ။ ဆာဘ်တွေရဲ့ ဘက်ကျန်တဲ့ ဘောစ်နီးယန်း ခရိုအတ် ဆလိုဗေးနီယန်း အလ်ဘေးနီးယန်း တွေရဲ့ဘက် ၊ US က စီနီယာဘုရ်ှရဲ့အမြင် ၊ ကလင်တန်ရဲ့အမြင် ၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့အမြင် ၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာသက်ရောက်မှု ၊ မီဒီယာတွေကို အသုံးချပုံ ၊ မီဒီယာတွေက ဖြစ်စဉ်ကိုလွှမ်းမိုးမှု
ဥရောပ နိုင်ငံတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက် ၊ ဆိုဗီယက်ပြိုကွဲပီး ဖရိုဖရဲဖြစ်နေတဲ့ ရုရှားရဲ့ ရပ်တည်ချက်၊
တရုတ်ရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ၊ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ ရပ်တည်ချက် နဲ့ လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်း။ Kosovo မှာဆိုရင်ကို KLA နဲ့ LDK ကြား နည်းဗျူ ဟာ ခြားနားချက် စသဖြင့် ကဏ္ဍ အတော်စုံပါတယ်။ ဖြစ်ပျက်သမျှ ကိစ္စတွေမှာ နိုင်ငံတကာဥပဒေရဲ့ သက်ရောက်မှု ၊ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေမှာလည်း
နယ်နိမိတ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် စသဖြင့် စုံလင်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို ဆောင်းပါးတစ်ခုထဲမှာရေးဖို့ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ စာဖတ်တဲ့ လူလဲ ပျင်းသွားမှာပါ။ ဥပမာ – ယူဂိုဆလားဘီးယား ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကို ဆာဘ်တွေကချုပ်ကိုင်ထားတယ်လို့ တကြောင်းထဲရေးမယ့်အစား အငယ်တန်းအရာရှိတွေမှာ ဘယ်လူမျိုးက ဘယ်လောက်% အလတ်စား နဲ့ အထက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လောက် ၊ အဲ့ထဲကမှ ကွန်မြူ နစ်ပါတီမှာနေရာပေးခံရသူတွေက ဘယ်လောက် ၊ ပါတီဖျက်သိမ်းချိန်မှာ ဆာဘ်စစ်ဘက်ထိပ်တန်းတွေရဲ့ မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်ဖြစ်သွားပုံ ၊ ဒီလူတွေက မီလိုဆီဗစ်ရဲ့ လူမျိုးရေးလမ်းကြောင်းကို ခြေစုံပစ်ဝင်လာပုံ ၊ ဒဲ့ပြောရ ရင် မီလိုဆီဗစ် အာဏာရရေးအတွက် ပခုံးထမ်းတင်ပေးကြပုံတွေအထိ ရေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာဖတ်တဲ့သူအတွက် အင်မတန်မှပျင်းစရာကောင်းပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးမှာ အချစ်အကြမ်းအလွမ်းလည်း အကုန်စုံပါတယ်။
ဥပမာ – စစ်မဖြစ်မီကဘော့စ်နီးယန်း မွစ်ဆလင်နဲ့ ခရစ်ယာန်ဆာဘ်နဲ့ ညားတာတွေ ၊ ဘော့စ်နီးယန်းတွေရဲ့ ဒေသအပေါ်ခင်မင်စွဲထားတာတွေ ၊ စမ်းချောင်းတွေ သစ်တောအုပ်တွေဘေးမှာ ပျော်ပွဲစားတွေထွက်ကြ ချစ်ရည်လူးခဲ့ကြတာတွေ ၊ ဆာဘ်လူမျိုးကြီးဝါဒီတွေရဲ့ သွေးနှောသတ်မှတ်မှု ၊ ဆာဘ်တွေရဲ့ မုဒိန်းစခန်းတွေမှာ နာကျည်းစရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပီး မူရင်းဒေသကို ပြန်မသွားချင်တော့လောက်အောင်ရင်နင့်ခံစားရတာတွေ ။ ကျနော်ရေးတာ ဖြစ်စဉ်တွေကို ထိတွေ့မိရုံပဲရှိပါသေးတယ် ။ kosovo လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက နိုင်ငံတကာစွက်ဖက်မှုပါ ။ internationalization of internal case လို့ရေးကြပါတယ် ။ ” ပြည်တွင်းရေး မစွက်ဖက်နဲ့ ” ဆိုတဲ့ သဘောတရားနဲ့ ” လူ့ကျင့်ဝတ်အရ ဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းရမယ် ” ဆိုတဲ့ သဘောတရား ၂ ခုရဲ့ အားပြိုင်ပွဲကို မရေးရသေးပါဘူး ။ နိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုအဆင့်ဆင့်ကိုတော့ အချိန်ရ ရင် ရေးဦးမှာပါ။
ဆာဘ်တွေ ဝါဒဖြန့်တဲ့ ” ပြည်ထောင်စုကြီးမပြိုကွဲရအောင် ဆာဘ်တွေက ထိန်းနေတာကို ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေက အခွင့်အရေးတွေ ဇွတ်တိုးတောင်းလို့ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပီး လွန်တာကျွံတာတွေ ဖြစ်ကုန်တာ ” ဆိုတဲ့ လမ်းဘေးစကားကို လုံးဝလက်မခံပါဘူး နိုင်ငံရေးမှာ တိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုဟာ ဒေါသအလျောက်လုပ်မိတဲ့ လူသေမှု မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါကိုရှင်းရှင်းမြင်ထားဖို့လိုပါတယ် ။ နောက်ပီး ဗမာစစ်ဘက်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆာဘ်တွေကို ညှာတာတဲ့ အမြင် အင်မတန်ရှိပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကြောင့် ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲတတ်ကြောင်းလည်း ယူဂိုဆလားဗီးယားဖြစ်စဉ်နဲ့ဝါဒဖြန့်လေ့ရှိပါတယ် ။ သူတို့ အမြဲတမ်းချန်လှပ်ထားလေ့ရှိတာက ” ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပထမဆုံး ဖောက်ဖျက်ပစ်တာက မီလိုဆီဗစ် ဦးဆောင်တဲ့ ဆာဘ်တွေ ” ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ သူတို့အမြဲပြောလေ့ရှိတာက ဘော့စ်နီးယန်းမွစ်ဆလင်မ်တွေ ကိုဆိုဗားမွစ်ဆလင်မ်တွေကြောင့် R2P ဝင်ပီး တိုင်းပြည်ပြိုကွဲတယ်ဆိုတာပါ။ သတိအတန်တန်ပေးတဲ့ကြားက နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကို အကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်တဲ့ မီလိုဆီဗစ်ကြောင့် R2P ဝင်လာတယ်ဆိုတာကို သူတို့ လျစ်လျူ ရှု့ပါတယ်။ ” ဖက်ဒရယ်မပေးပဲ လူမျိုးအားလုံးကို ဖိနှိပ်ထားရမယ် ။ အထူးသဖြင့်မွစ်ဆလင်မ်တွေကို ဖိနှိပ်ထားရမယ် ” ဆိုတာ ဗမာစစ်ဗိုလ်တွေအဖို့ ဝါဒဖြန့်မှုသပ်သပ်သာ မကတော့ပဲ စစ်ကျောင်းတွေမှာ ယူဂိုဆလားဘီးယားဖြစ်စဉ်နဲ့ယှဉ်ပီး Thesis လုပ်တဲ့ထိ ဖြစ်နေတာပါ။ နိုင်ငံတကာ အခင်းအကျင်းတရပ်ကို ဘက်တခုတည်းနဲ့ ရေးလို့မရပါဘူး ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သူတော်စင်လူမျိုးဆိုတာလဲ မရှိပါဘူး။ ခရိုအတ်တွေ ဘောစ်နီးယန်းတွေ ကိုဆိုဗားအလ်ဘေးနီးယန်းတွေဘက်ကလည်း လွန်တာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ဆိုတဲ့ စည်းကိုကျော်ပီး လွန်ရုံမက ကျွံထွက်သွားတာကတော့ ဆာဘ်တွေပါပဲ။
ဒီစည်းကို မည်သည့် အကြောင်းပြချက်နဲ့မှ ကျော်မရပါ ။
နိုင်ငံရေးအရ မပြေလည်လို့ စစ်တိုက်တာကို ကမ္ဘာက လက်ခံပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ် ကိုတော့ ကမ္ဘာက လက်မခံပါဘူး။
” ဂျင်နိုဆိုဒ်ဆိုတာ ခွင့်လွှတ်လို့ရတဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး ”။
Posted by: rightsforburma | on May 16, 2018
ဤဆောင်းပါးသည် FEB 26, 2013 က mmsy တွင် ဦးဌေးလွင်ဦး ရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။
လူတွေကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်၊ ဓါးနဲ့ခုတ်သတ်၊ လှံနဲ့ထိုးသတ်၊ လည်ပင်းညှစ်သတ်- မှ သတ်တယ်လို့ မပြောနိုင် ပါ။ လူသားတွေရဲ့ အစားအသောက်ထဲမှာ ရောဂါဘယဖြစ်စေမယ့် ဓါတ်တွေကို ထည့်သွင်းကျွေးမွေးခြင်း၊ စား သောက်စေခြင်းဖြင့် တစ်ဖြေးဖြေး သေသွားစေမယ့်နဲ့ နည်းနဲ့ သတ်ခြင်းဟာလည်း လူသတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ ဈေးဆိုင်ဖွင့်ရင်- လယ်ယာထုတ်ကုန်နဲ့ ကျမ္မာရေှးဌာနက နှစ်စဉ်လာရောက် စစ်ဆေး ပါတယ်။ အဲ့ဒီဌာန စစ်ဆေးလို့ စစ်ချက် မအောင်ရင် ဆိုင်ကို ပိတ်ရပါ တယ်။ ဒီမှာ အဆင့် သုံးဆင့်ရှိနေတယ်-၊ ရောင်းကုန်အားလုံးကို စစ်ဆေးလို့ ရောင်းကုန်တစ်ခုခုက စစ်ဆေး ရေး မအောင်ရင် ပထမအကြိမ် Ticket ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ ပစ္စည်းကို ဆက်မရောင်းရတော့တဲ့ အပြင် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၆၀၀ ပေးရပါတယ်။ ဒဏ်ငွေ ဆောင်ပြီးရင် ပြန်လာစစ်ဆေးတယ်- အဲ့ဒီ ပစ္စည်းကိုတွေ့ရင်၊ သို့မဟုတ် နောက်ထပ် စစ်ချက်မအောင်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ထပ်တွေ့ရင် နောက်ထပ် Ticket ရပြန်ပါတယ်။ ဒုတိယ အကြိမ် ဒေါ်လာ ၆၀၀ ပေးရတဲ့ အပြင် နောက်ဆုံး သတိပေးခြင်းကို ခံရပါတယ်။ တတိယ အကြိမ် ဆက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ကျမ္မာရေးဌာနက ဆိုင်ရောင်း ခွင့် လိုင်စင်ကို သိမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒါတင်မက- ဆိုင်အတွင်း ရေ၀င်ရေထွက်၊ ကြွက်၊ ပိုးဟပ်- အားလုံးကို စစ်ပါသေးတယ်။ တစ်ခုခု ညိရင် ဆိုင် ပိတ်ရတဲ့ အဖြစ်ပါ။ Ticket မထိရင်တော့ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာ လာစစ်ပြီး၊ Ticket ထိရင်တော့ အလျှဉ်းသင့် သလို (သူတို့ စိတ်ချတဲ့အထိ) လာစစ်ပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်လည်း ဆိုင်လေး တစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်။ ဆိုင်ဆိုင်းဘုတ်မှာ Halal လို့ ရေးထားပါတယ်။ ဆိုင် စဖွင့်တဲ့ နှစ်- ပထမဆုံး စစ်ဆေးရေး လာတော့၊ ကျွန်တော်လည်း အတွေ့အကြုံ မရှိခဲ့ပါ။ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ ငွေလေးနဲ့ ဆိုင်လေး ဖွင့်ရတော့ ငါ့ဆိုင် အပိတ်ခံရရင် ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုလေး ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ နယူး ယောက်ပြည်နယ် အထက်ပိုင်း စစ်ဆေးရေး တာဝန်ခံ Cherry Card ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးက- မင်းဆိုင်က တစ်ကယ်ပဲ Halal ဆိုင် လားလို့ မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်က “ဟုတ်ကဲ့”လို့ ပြောတော့-၊ ဒါဆို ကြက်သား၊ အမဲသား ဖေါက်သည်ယူတဲ့ လိပ်စာကို ပေးပါလို့တောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကြက်သား၊ အမဲသားထည့်တဲ့ ပါကင်အိပ်က လိပ်စာကို ပဲ ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူက အိုကေ- ငါတို့က Halal နဲ့ Kocha (Kocha ဆိုတာ ဂျူးလူမျိုးများ စားသုံးတံဆိပ်ပါ) ကို စိတ်ချတယ်-၊ အဲ့ဒီ ဖေါက်သည်ဆိုင်တွေကပဲ ယူရောင်းပါ။ အခြားနေရာတွေက ယူမရောင်းပါနဲ့လို့ ပြောပြီး၊ နောက်ထပ်ကုန်ခြောက်တန်းကို စစ်ဆေးပါတယ်။- ဆိုင်က ပစ္စည်းစုံတော့ ကုန်ခြောက်တန်းရဲ့ စားသောက်ကုန် စဉ်ပေါ်က ဆားငံသီး ဘူးလေးတွေကို သူ့မျက်လုံး ရောက်သွားပါတယ်။
ဆားငံသီးဘူးကို သူအသေချာကြည့်ပြီး-၊ ဒီဆားငံသီးမှာ အရောင်ဆိုးဆေးပါတယ်-လို့ စကားစပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ ကုန်ထုပ်ရာဌာနကို ကြည့်ပြန်တယ်- Product of China ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအခါ သူက ဒီပစ္စည်း ဘယ်က ယူသလဲလို့ မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဖေါက်သည်ယူတဲ့ ကုပ္မဏီတွေဆီက Invoice ကို ပေး လိုက်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းကို သိမ်းလိုက်ပါ၊ မရောင်းပါနဲ့- လို့ တားမြစ်ခြင်းကို ခံရပါတယ်။ နောက်ထပ်ပစ္စည်း တစ် ခု ကို မျက်လုံးရောက်သွားပြန်တယ်- ကျွန်တော်ကတော့ ရင်တွေပူနေပါပြီ။ အဲ့ဒီ ပစ္စည်းလည်း color ပါတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ ကလေးစားစရာ ဂျယ်လီ (ပီပို့)ထုတ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ အသေချာကြည့်ပြီး Product of Malaysia လို့ တွေ့ရပြန်တယ်။ သူ ပစ္စည်းကို ပြန်ချလိုက်ပြီး-၊ ဒါတော့ ငါတို့ နည်းနည်း စိတ်ချတယ်လို့ ပြောပါ တယ်။
ကျွန်တော်လည်း မနေနိုင်တော့ပါ။ သူ့ကို ရင်းနှီးအောင် မျက်နှာပြပြီး- နည်းနည်းမေးခွင့်ပြုပါ- ခွင့်တောင်းက မေးလိုက်မိပါတယ်။ ဒီမလေးရှား ပစ္စည်းလည်း အရောင်ပါတာပဲလေ- ဆိုတော့၊ သူက ပြုံးပြီး၊ ငါတို့က ဓါတုစစ် ပြီးသားပါ။ ငါ ဒီအလုပ်ကို လုပ်တာ နှစ် ၂၀ ရှိနေပြီ-၊ လူတွေက ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် သေစာကို ၀ယ်စားရတာ ကိုပဲ ငါတို့က တားမြစ်တာပါတဲ့။
သူ့စကားကို ကျွန်တော် အကုန် သဘောမပေါက်နိုင်လို့ -နည်းနည်းရှင်းပြပါ ဆက်မေးမိတော့၊ လူတွေရဲ့ နေ့စဉ် စားသုံးကုန်ထဲမှာ လူတွေကို သေစေမယ့် ပစ္စည်းတွေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ကျမ္မာရေးဌာနက အဲ့ဒီ ပစ္စည်းတွေကို Terrorist (အကြမ်းဖက်)ထက် ကြောက်ပါတယ်၊ အကြမ်းဖက်က လူကို တစ်ခါတည်း သတ်ပစ်တာပဲ ရှိတယ်၊ သေမယ့်သူကို ဒုက္ခမပေးခဲ့ဘူး၊ သေမယ့်သူက သေရခြင်းကို ပိုက်ဆံပေးမ၀ယ်ရဘူး။ စားသောက်ကုန်နဲ့ လူ့ အသုံးအဆောင်တွေမှာ ရောဂါဖြစ်စေမယ့် ဓါတ်တွေပါနေရင်- အဲ့ဒါကမှ လူတွေကို ဒုက္ခပေးတာ အစစ်ဖြစ် တယ်။ စားသုံးသူဟာ သူ့ပိုက်ဆံနဲ့သူ အဆိပ်ကိုဝယ်စားနေရတာ ဖြစ်တယ်။- ဒါကို လူထုက သိဘို့လိုသလို၊ ဈေးရောင်းသူများကလည်း သိဘို့ လိုပါတယ်-လို့ ရှင်းပြပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်က ဒါဆို ကျွန်တော် ဆိုင်ဖွင့်တာ အခုမှ အသစ်ပါ၊ ဘယ်ပစ္စည်းမျိုးကို ရောင်းသင့်ပါသလဲ- ဆက်မေး တော့-၊ သူက Kocha, Halal နဲ့ အော်ဂင်းနစ် (သဘာဝအတိုင်း ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေး မထည့်ဘဲ စိုက်ပျိုးတဲ့ သီးနှံ)တို့က နံပါတ် တစ် ဖြစ်ပြီး- ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာတော့ တရုတ်ပစ္စည်းကို ကြည့်ပြီးမှ ရောင်းစေ ချင်တယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။
ဒါနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို ကျွန်တော့ ခေါင်း ရောက်သွားမိတယ်။ ငြုတ်သီးမှုန့်အတု၊ နနွင်းမှုန့်အတု၊ စားသုံးဆီ အတု (တရုတ်နိုင်ငံက စားသောက်ဆိုင်ကြီးများမှာ သုံးပြီး ဆီအဟောင်းများကို အရောင်ပြန်ချွတ်ထားတဲ့ ဆီများ)-၊ လူတွေရဲ့ စားသုံးကုန်ပစ္စည်းများ အများစုက ပေါချောင်ကောင်း အတုများနဲ့သာ ကြီးစိုးနေတော့တယ်။ ဒီကြားတဲ့ Halal ပါလို့ အာမခံချက် ပြုထားတဲ့ ၇၈၆ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တပ် ကုန်ဆိုင်များကလည်း ဈေးမ၀ယ်ဘို့ လှုံ့ဆော်သူတွေကများလာပြန်တော့–၊ သြော်-၊ မြန်မာနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံသားများကို မသေသေအောင် အနု နည်းနဲ့ သတ်နေကြပါလားလို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတော့တယ်။
လူထုအပေါ်မှာ သြဇာရှိပါတယ်လို့ လူထုရဲ့ ယုံကြည်နေသူများကိုယ်တိုင်က လူထုကို သေတွင်းထဲ ပို့နေပါ ပကောလား-၊ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သေကြောင်းကြံနေသလား-၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ပညာမဲ့လွန်းလို့ လူတွေကို သေ ခိုင်းနေသလား ဆိုတာတော့ လူထုအပေါင်း ဆင်ခြင်စေလိုပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးသည် March 4, 2013 က mmsy တွင် ဦးဌေးလွင်ဦး ရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။
ရခိုင်နယ်မှာ ရိုဟင်ဂျာ မရှိဘူး ဆိုပြီး ပြောဆိုနေမှု အားလုံးဟာ မျက်ကန်းမျိုးချစ် ခွဲထွက်ရေးဝါဒီ အနောက် သား မျိုးနွယ် လူယုတ်မာ တစ်စုရဲ့ ပြောဆိုချက်သာ ဖြစ်တယ်။ ဒီကိစ္စရပ်မှာ ရခိုင်ပြည် အတွင်းအပြင်နေ ရခိုင် လူမျိုးအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ခြင်း လုံးဝ လုံးဝ မရှိပါ။ ရခိုင်ဒေသနေ သာမန် ရခိုင်လူမျိုးဟာ မိမိရဲ့ စားဝတ်နေရေး ကိုသာ နေ့စဉ်အမျှလုံးပန်း ရှာဖွေ စားသောက်နေရပြီး နိုင်ငံရေး၊ ခွဲထွက်ရေး၊ လူမျိုးရေး ကိစ္စများကိုလည်း စိတ် ၀င်စားခြင်း မရှိပါ။
သင်္ကန်းဝတ် တစ်ချို့က ခွဲထွက်ရေးနဲ့ အမျိုးသားရေးကို လှုံ့ဆော်နေပေမယ့်-၊ ထိုကိစ္စမှာ မိရိုးဖလာ သာမန်ရိုးရိုး ရဟန်းသံဃာများနဲ့လည်း ပတ်သက်ခြင်း မရှိပါ။ သာမန်ရိုးရိုး ရဟန်းသံဃာများ အနေနဲ့ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်က ပဲ အတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ မွတ်ဆလင်များ အပေါ်မှာ သမိုင်းတစ်လျှောက် ရန်လိုခြင်း၊ ရန်ရှာခြင်း၊ မုန်းတီးခြင်းများ မရှိ ခဲ့တဲ့ အပြင်-၊ ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ ပြောစရာရှိတာပြော၊ ဆုံးမစရာရှိတာ ဆုံးမ၊ ကျွေးစရာရှိတာကျွေး၊ ခိုင်းစရာရှိတာခိုင်း ရင်းနှီးပတ်သက် ကျွမ်းဝင်ခဲ့သည်သာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်မှာ မွတ်ဆလင်မရှိ၊ ရိုဟင်ဂျာ မရှိဆိုတဲ့ စကားကို ရခိုင်နေလူအများစုကြီးက ဘယ်သောအခါမှ မပြောခဲ့ပါ။ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ အမည်နာမကို မနီးစပ်သူများက မကြားဘူးခဲ့တာပဲ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့ကို သွားမေးကြည့်ရင် မရှိဘူးမပြောခဲ့ဘဲ၊ အသိဘူးပဲ ပြောခဲ့တာများပါတယ်။ မွတ်ဆလင် မရှိဘူးလား မေးရင်တော့–၊ အရူးကတောင် ရှိ-တယ် ပြောပါမယ်။ အရူးထက် ပိုဆိုးတဲ့ အမိုက်တွေကသာ မိုက်ငြင်းငြင်းနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောင်တစ်ချိန် သမိုင်းတရားခံဟာလည်း အဲ့ဒီ လူမိုက်တွေပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရခိုင် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးနဲ့ လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါ။
အခုလည်း ရိုဟင်ဂျာ မရှိဘူး ဆိုတဲ့ သမိုင်းအဖြေထုတ်ဘို့-၊ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့- ၂၀၁၃ ခု မတ်လ ၉ ရက်နေ့မှာ Forum တစ်ရပ်ကျင်းပဘို့ ခွဲထွက်ရေးဝါဒီ တစ်စု စိုင်းပြင်းနေပါတယ်။ အစဉ်အလာနဲ့ တည်ခဲ့တဲ့ နယ်မြေတစ်ခုရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ဖြေရှင်းဘို့ Forum တစ်ရပ် ကျင်းပတာမှာ-၊ ရခိုင်နယ်ရှိ လူမျိုးအားလုံးထဲက ပညာရှင်များကို ဖိတ်ကြားခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ရခိုင်လူမျိုးဆိုတဲ့ အထဲကလည်း တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်း ဒေသစုံက ပညာရှင်များကို ခေါ်ယူခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ နိုင်ငံတစ်ကာ ပညာရှင်များ ဆိုတာမှာလည်း အငြင်းပွားနေတဲ့ နှစ်ဦး နှစ်ဘက်က ပညာရှင်များ၊ ဂုဏ်သရေရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ခေါ်ယူခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ခွဲထွက်ရေးဝါဒီ မျက်ကန်းတစ်ချို့နဲ့ သူတို့ကို မြှောက်ပင့်ပေးနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား တစ်ချို့ကိုသာ ခေါ်ယူပြီး တစ်ဘက်သတ် စီစဉ်ပါတော့တယ်။
တစ်ဘက်သတ် ခိုးပြီးပြုလုပ်၊ ပြီးရင် တစ်ဘက်သတ်ကြေငြာချက်ထုတ်၊ လုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်များက အမှန်တရားကို ချစ်သူ၊ သတ္တိရှင်တို့ရဲ့ အလုပ်မဟုတ်ဘဲ–၊ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မျက်နှာပျက်ရမယ့် သူရဲဘောကြောင်သူ၊ အမှား တရားကို ကျူးလွန်သူတို့ရဲ့ ပွဲသာ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနေပါတယ်။ တစ်ကယ်တမ်း မျက်နှာပျက်စရာ ရှိရင် ရခိုင်လူမျိုးအားလုံး မျက်နှာပျက်ရမယ့် လုပ်ရပ်လည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
ကိုယ့်ဘက်က မှန်နေရင်၊ မှန်ကန်ကြောင်းကို ရဲရဲတင်းတင်း သက်သေပြနိုင်ရင်- ဘာကိုမှ ကြောက်နေစရာ မလိုပါ၊ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်က ပညာရှင်တွေကို ပင့်ဖိတ်ပြီး လူကြီးလူကောင်းပီပီ သက်သေထုတ်ပြလိုက်ယုံမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာမဲ့ လူယုတ်မာတွေ လုပ်သလို လုပ်နေစရာ မလိုပါ။ အခုလို တစ်ဘက်သတ် ပြုလုပ်နေခြင်း ဆိုတာကိုယ်က မိမိဘက်က မှားယွင်းကြောက်လန့်နေကြောင်းကို ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ၀န်ခံ လိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှန်ရင် မှတ်ကျောက်အတင်ခံရဲရပါမယ်။ အခုတော့ ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက် ဖြစ် ရပြီး မဆီမဆိုင်တဲ့ အပြစ်မဲ့ ရခိုင်ပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး မျက်နှာပျက်ရတော့မယ့် အလုပ် ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီကိစ္စမှာ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်လူမျိုးအားလုံးနဲ့ မသက်ဆိုင်ကြောင်းကိုပဲ ကျွန်တော့အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့မိတ်ဆွေများကို ပြောလိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်က အစ္စလာမ်သာသနာဝင် ဖြစ်နေလို့ ခင်ဗျားနဲ့ မဆိုင်ဘူး ဆိုပြီး ကျွန် တော့ကို ရခိုင်လူမျိုးထဲက ဖယ်ထားခွင့်မရှိပါ။ ကျွန်တော့ဘက်က ရပ်တည်နေတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးရဟန်းသံဃာများ၊ ပြည်သူများလည်း မြောက်များစွာ ရှိနေပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးအားလုံးက ကျွန်တော့ကို မထောက်ခံရင်တောင် သာမန်ရိုးရိုး လုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့ အများစုသော ရခိုင်လူမျိုးများက ကျွန်တော့ကို ထောက်ခံပြီးသား ဖြစ် နေတယ် ဆိုတာလောက်တော့–၊ မျက်ကန်းများ သိစေလိုပါတယ်။ ခွဲထွက်ရေးဝါဒီ မျက်ကန်းများ ကြားမှာ ကြားညပ်နေရတဲ့ ရဟန်းတော် တစ်ချို့ကိုယ်တိုင်က ကျွန်တော့ကို လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ် ထောက်ခံပြီးသားပါ။ အချိန်တစ်ခုမှာ အမှန်တရားဟာ ဘွားကနဲ ပေါ်လာမှာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုပဲ-၊ မျက်ကန်းများ သိထားစေလိုပါ တယ်။
ရိုးသားတဲ့ ပြည်သူများကို အမျိုးသားရေးမှိုင်းတိုက် ခွဲထွက်ရေး စိတ်သွင်းမယ့် အဖြစ်မျိုးကိုတော့ ပြည်သူကို မသွပ်သွင်းဘို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ အာဏာမက် လူတစ်စုကြောင့် အပြစ်မယ့် ပြည်သူများ အသက်သွေးမြေကျ ရမယ့် အဖြစ်မျိုးကိုလည်း မဖြစ်စေလိုပါ။ ရိုဟင်ဂျာများကို မုန်းတီးဘို့ “ဓါးစာခံလုပ် လှုံ့ဆော်ရင်း” အမျိုးသားရေး စိတ်တွေဝင်လာအောင် သွပ်သွင်း- အမျိုးသားရေးတွေ အဟုန်မြင့်လာရင် – ဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းခေတ်က ငါတို့ ရခိုင်တွေကို မျိုးပြုတ်သတ်ခဲ့တဲ့ အောက်သား (ဗမာ)တွေဆီက ခွဲပြီး အဖ နိုင်ငံ ပြန်လည်ထူထောင်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုကို ရခိုင်ပြည်သူများလည်း ရိပ်မိလာနေပြီ ဆိုတာလောက်တော့-၊ အာဏာရူးမျက်ကန်းများ သိစေ လိုပါတယ်။
“တစ်ဘက်သတ် -ကစားရည်လုခြင်း” “နှစ်ခမ်းတစ်ခုတည်းနဲ့ အစာစားခြင်း” တို့ဟာ ဒုက္ခိတတွေရဲ့ အလုပ်မျှသာ ဖြစ်တယ်။ ပညာဗဟုသုတ ဒုက္ခိတတွေထဲမှာ ရခိုင်လူမျိုး စစ်စစ်များ မပါဝင်ပါ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၉ ရက်နေ့ မှာ ပြုလုပ်မယ့် ရခိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာ Bangkok Forum အား ရခိုင်လူမျိုးအားလုံးမှ အသိအမှတ်မပြု သကဲ့သို့ ထို Forum မှ ထွက်ပေါ်လာမယ့် အဖြေ၊ ထုတ်ပြန်ချက်များသည်လည်း ရခိုင်လူမျိုးအားလုံးနှင့် လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါ။
(တောင်ကုတ်မြို့မှ ဆရာတော် ဦးပညာဝံသမှ ဖုံးဆက် မေတ္တာရပ်ခံသောကြောင့် ဤစာတမ်းအား ရေးသား ထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တစ်ခါတွင် ဤစာတမ်းအတွက် ဆရာတော်မှ တာဝန်ယူနိုင်သည်ဟုလည်း ၀န်ခံထားပါသည်။)
၂၀ ရာစုရဲ့ Genius ကြီး၊ ရူပဗေဒသီအိုရီတွေနဲ့ ခေတ်ကို ပြောင်းစေသူကြီး၊ ဒါဆို Genius တိုင်းဟာ နာမည်ကြီးသလားပေါ့။
အထူးသဖြင့် လူသားသမိုင်းကို အိုင်စတိုင်းလိုပဲ ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တဲ့ Genius တိုင်းဟာ နာမည်ကြီးသလားပေါ့။
Genius တိုင်းဟာ နာမည်မကြီးဘူး
ဒါပေမဲ့ ဆင်ပိန်ကျွဲလောက် သဘောနဲ့ သာမန်လူထက်တော့ နာမည်ကြီးတယ် နေရာပေးခံရတယ်ပေါ့။
လူသားသမိုင်းကို အိုင်စတိုင်းလို ပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီး အိုင်စတိုင်းထက်တောင် အခက်အခဲတွေကို ကြံ့ကြံ့ ခံကျော်လွှားပြီး လူသူသိပ်မသိရတဲ့ Genius တွေရှိသဗျ၊
ကျနော် အဲ့လိုလူတယောက်အကြောင်းရေးကြည့်မယ်။ အဲ့ဒီလူဟာ နိုဘဲလ် ဆု ပေးဖို့ နာမည်စာရင်းထဲမှာ ၉ ကြိမ် ပါခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ၁ ကြိမ်မှ မရခဲ့ဘူး။ သူသေဆုံးတော့ သူ့ ဈာပန မှာ လူ ၇ ယောက်ပဲ ရှိခဲ့တယ်။
ကဲ သူ ဘယ်သူလဲ?
နောက်ခံမြင်ကွင်း တခုကနေ စ ရအောင်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးစ ဥရောပ တိုက်မှာ နာဇီဂျာမန် တွေကို စစ်အတွင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြစ်ပေး အရေးယူဖို့ နျူ ရင်ဘတ် ခုံရုံးကို မဟာမိတ်တွေက ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်။
နာဇီတွေ ကျူးလွန်တဲ့ ပြစ်မှုတွေဟာ များပြားပြီး ကြီးမားလွန်းတော့ လူသမိုင်းမှာ မကြုံ စဖူးလို ဖြစ်နေတယ်။
ခုံရုံး အနေနဲ့လည်း သူတို့ လုပ်ငန်းအတွက် ဥပဒေ ပညာရှင်တွေ အများအပြားကို ခေါ်ယူခန့်ထားရတယ်။
အဲ့ ဥပဒေပညာရှင်တွေထဲက တယောက်ဟာ ခုံရုံးအတွက် အလုပ်လုပ်သလောက် ခုံရုံးနဲ့ အတိုက်အခံ အဖြစ်ဆုံး ဖြစ်နေတယ်။
သူက “ခုံရုံးဟာ နာဇီတွေကို တရားစီရင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ ဥပဒေ ကို စွဲကိုင် မကျင့်သုံးနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ များပြားကြီးမားတဲ့ နာဇီတွေရဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို စီရင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ ဥပဒေ မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်” စသဖြင့် ခုံရုံးဟာ စွမ်းဆောင်ရည် ချို့တဲ့ပုံမျိုး ပြောနေတယ်။
သူက ခုံရုံးအနေနဲ့ နာဇီတွေကို စစ်ရာဇဝတ်မှု နဲ့ စွဲချက်တင်နေတာဟာ မလုံလောက်ဘူး ။နာဇီတွေဟာ စစ်ရာဇဝတ်မှုမကသော ထို့ထက်ကြီးမားတဲ့ ပုံစံနဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို ကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ၊ နာဇီတွေရဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို သီးသန့်အမည်နဲ့
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေ နဲ့ ဥပဒေ ပြဌာန်းပြီး အရေးယူရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့မှသာ နာဇီတွေကဲ့သို့ နောက်ထပ်ကျူးလွန်မှုမျိုး ကို တားဆီးနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း တတွင်တွင် အော်နေတော့တယ်။
သူဟာ ဥရောပမြေမှာ ဒီစကားတွေကို အော်တာ အခုဟာက ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီတုန်းက ပထမ ကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ အော်ခဲ့တာပါ ။ သူထောက်ပြတဲ့ ကိစ္စက ဂျာမနီတော့ မဟုတ်ဘူး။ တူရကီ ကိစ္စပါ။
ပထမ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း တူရကီပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဦးဆောင်ပြီး အာမေနီးယန်း လူမျိုးတွေအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့မှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ အော်ခဲ့တာပါ။
OK သူဟာ အာမေနီးယန်း တယောက်လား?
သူဟာ ပိုလန်ဖွား ဂျူးလူမျိုးတယောက်ပါ။
သူ့နာမည်က Raphael Lemkin
ပိုလန်ပြည်ရဲ့ တောရွာလေး တရွာမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၊ သူ့အမေကိုယ်တိုင်က သူ့ကို စာသင်ပေးခဲ့တယ်။
သူဟာ ဘာသာစကား ၉ မျိုးကို ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်ပြီး နောက်ထပ် ၃ မျိုးလောက်ကို ဖတ်နိုင်တယ်။ ဥပဒေ ဘွဲ့ရလည်းဟုတ်တယ်။
တရက် သူ့ဘဝ အပြောင်းအလဲ စတယ်၊ သတင်းစာ တစောင်ကနေသတင်းတပုဒ်ပါလာပါတယ်။
သတင်းက ပထမ ကမ္ဘာစစ်ပြီးစ ဂျာမနီမှာဖြစ်တာပါ။
စစ်အတွင်းတုန်းက တူရကီ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူကို အာမေနီးယန်း လူငယ်တယောက်က သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်လိုက်တဲ့ သတင်းပါ။
အာမေနီးယန်း လူငယ်ကို တရားစီရင်ဖို့ ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။
Raphael Lemkin က ဒီသတင်းကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဒီတရားစီရင်မှုကို မလွတ်တမ်း စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ အာမေနီးယန်း လူငယ်ဟာ ကိုယ်တိုင်လျှောက်လှဲချက်ပေးပါတယ်။
သူဟာ လူသတ်မှုကို ဝန်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာ့ကြောင့် သတ်ရလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို ရှည်လျားစွာ ပေးပါတယ်။
တူရကီ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဟာ ပထမ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း အာမေနီးယန်း လူမျိုး ၈ သိန်းကျော်ကို သတ်ဖြတ်ရာမှာ အဓိက အမိန့်ပေးခဲ့သူ မို့ပါတဲ့၊
အာမေးနီးယန်း လူငယ်ရဲ့လျှောက်လှဲချက်ဟာ ကြောက်စရာ တုန်လှုပ်စရာ သနားစရာ ပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ အမှန်အကန် အချက်အလက်တွေပါ။
အာမေးနီးယန်း အမျိုးသမီးတွေကို တူရကီ လုံထိန်းတွေက အစုလိုက်အပြုံလိုက် မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တာ ၊ ကလေးတွေကို စစ်ဖိနပ်နဲ့ နင်းချေသတ်ဖြတ်တာ၊
လမ်းပေါ်မှာ အငတ်ဘေးနဲ့ အာမေနီးယန်းတွေ အုပ်စုလိုက် သေကုန်တာ စသဖြင့် စသဖြင့် အာမေနီးယန်း လူငယ်ဟာ ဖြီးဖြန်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး၊
သူပြောတဲ့ အချက်တွေဟာ ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့၊ စစ်အတွင်း တူရကီက အမေရိကန် သံအမတ်ရဲ့ ပြောကြားချက်၊ သတင်းပေးပို့ချက် ဓါတ်ပုံတွေ စသဖြင့် အထောက်အထား အခိုင်အမာ တွေပါဝင်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ တရားရုံးရဲ့ စီရင်ချက် ရောက်လာပါတယ်။ အာမေနီးယန်း လူငယ်ဟာအပြစ်ရှိတယ် သေဒဏ်ပေါ့ဗျာ၊
လူ၈သိန်းကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ တူရကီ ပြည်ထဲရေး ဝန်ဟောင်းကတော့ အပြစ်ရှိတယ်လို့ စီရင် ချမှတ်ပြီး သေဒဏ်အပေးမခံခဲ့ရပါဘူး။
တူရကီပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့သူ့ အပေါင်းအပါရာဇဝတ်ကောင်တွေဟာ ဘာတရားစီရင်မှုမှ မခံရဘဲ အပြင်မှာ အေးအေးဆေးဆေး နေထိုင်ခွင့်ရကြပါတယ်။
Raphael Lemkin အတွက် မေးခွန်းတွေ တသီကြီးထွက်လာပါတယ်။
လူတယောက်ကို သတ်တဲ့ အာမေနီးယန်းလူငယ်ကို သေဒဏ်စီရင်နိုင်ခွင့်ရှိပြီး
လူ၈သိန်းကိုသတ်ခဲ့တဲ့ တူရကီ အာဏာပိုင်တွေကတော့ လွတ်နေတာ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကတော့ အဓိကပါ
လူ ၁ ယောက်ကိုသတ်တာအတွက် သေဒဏ်
လူ ၈သိန်းကို သတ်တာအတွက် တရားစီရင်မှု နဲ့ ပြစ်ဒဏ်မရှိ
Raphael Lemkin ဟာ သူရဲ့ဆရာ ဥပဒေ Prof . ဆီသွားပြီး ဒီမေးခွန်းတွေ မေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဆရာပြန်ဖြေတဲ့ အဖြေကတော့
တူရကီပြည်ထဲရေးဝန်ဟာ” သူ့ခြံထဲမှာ မွေးထားတဲ့သိုးတွေကို ရိုက်ရိုက် သတ်သတ် ကြိုက်တာ လုပ်ခွင့်ရှိတာမို့” ဥပဒေအရ ဘာမှ အရေးယူခွင့်မရှိပါတဲ့။ ဆိုလိုချင်တာက တူရကီနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အချာအာဏာပိုင်နက်ထဲမှာ နေတဲ့ အာမေးနီးယန်း လူမျိုးတွေကို
တူရကီပြည်ထဲရေးဝန်ဟာ ကြိုက်တာလုပ်ခွင့်ရှိတယ် အဲ့ဒါကို အရေးယူနိုင်တဲ့ ဥပဒေ မရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ အချုပ်အချာအာဏာပိုင်တဲ့နိုင်ငံတခုက အာဏာပိုင်အစိုးရဟာ သူ့ပိုင်နက်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ လူသားတွေကို ကြိုက်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒီအတွက် ဘာ ရာဇဝတ်မှုမှမမြောက်တဲ့သဘောသက်ရောက်နေပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စကို အရေးယူနိုင်မဲ့ ဥပဒေ ပြဌာန်းချက် မရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားပါ။
Raphael Lemkin အနေနဲ့ ဟာခနဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ အာမေးနီးယန်းတွေဟာ သိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ လူသားမျိုးနွယ်တွေပါ။ လူသားမျိုးနွယ်ဝင် ၈သိန်းကို သတ်ဖြတ်တဲ့အပေါ် အရေးယူနိုင်တဲ့ ဥပဒေ မရှိဘူးဆိုတာဟာ ” ဘုရား၊ဘုရား လူတွေဟာ တိရစ္ဆန်ထက်တောင်နိမ့်ကျနေပါရောလား။ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ jungle law အရ အားကြီးသူက စားစတမ်း / ဒါပေမဲ့ တခါစားဖို့ တကြိမ်ပဲ သတ်တယ်။ လူတွေက အချင်းချင်း ၈ သိန်း ၊လူတွေရဲ့ ကျင့်သုံးမှု ဟာ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ jungle law ထက်နိမ့်ကျနေပီလား ၊ ဒါဟာ မဖြစ်သင့် / ဒါအတွက် ငါတိုက်ပွဲဝင်မယ် ” စသဖြင့် Raphael Lemkin ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်။
ဒီနောက်မှာတော့ Raphael Lemkin ဟာ ဥရောပတိုက်မှာကျင်းပတဲ့ ဥပဒေ ကွန်ဖရင့် တွေမှာ သူ့ရဲ့ presentation တွေနဲ့ ထိုးဖောက်ပါတော့တယ်။
Raphael Lemkin ရဲ့ ဒီထိုးဖောက်မှုဟာ သူ့ရဲ့ပထမ အကြိမ် တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲမှာ Raphael Lemkinဟာ ခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးပါတယ်။
အင်းးးးး တကယ်တော့ Raphael Lemkin ရဲ့ အရှုံးလို့ပြောရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူးဗျ။ ဒါဟာ မနုသလူသားထုရဲ့ အရှုံးဗျ
ဒီအရှုံးရဲ့ ဒဏ်ကို လူသားထုဟာ သွေးတွေ အလောင်းတွေ အရိုးတောင်လိုပုံတဲ့ ပေးဆပ်မှုတွေနဲ့ ပေးဆပ်ရတော့တာပဲဗျာ။
kyawhlao oo ရေးထားတာကို m-media မှတဆင့်ကူးယူသည်
Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin (အပိုင်း-၂)
OK ! ဒီပထမ အကြိမ်တိုက်ပွဲမှာ Raphael Lemkin ဘာတွေထိုးဖောက်ခဲ့သလဲ
ဘာလို့ရှုံးခဲ့သလဲ ဆိုတာတွေကို နားလည်ဖို့၊ အဲ့ဒီခေတ်က နိုင်ငံရေးနဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးနောက်ခံကို ကြည့်ကြည့်ကြစို့ရဲ့၊
Raphael Lemkin ရဲ့ ပထမအကြိမ်တိုက်ပွဲဟာ ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးကာလမှာပါ။ ဒီကာလရဲ့ နိုင်ငံတကာစင်မြင့်ကတော့ နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးပါ။
Raphael Lemkin ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဆိုးရွားလှတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို ကျူးလွန်သူတွေဟာ (national level)နိုင်ငံတော်အဆင့် အာဏာကို စွဲကိုင်ပြီး ကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ် ပြီးတော့ ဒီအာဏာနဲ့ပဲ သူတို့ကို အရေးယူမရအောင် ပြန်ကာထားကြပြန်တယ်။
ဒါဆို ဒီလူတွေကို အရေးယူဖို့ အာဏာဟာ နိုင်ငံတခုချင်းစီရဲ့ national level ထက်ပိုမြင့်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဆင့်ရှိတဲ့ တနည်း international level အဆင့်ရှိသော အဖွဲ့ကနေ ထွက်ပေါ်လာရမယ်။
Raphael Lemkin မျှော်လင့်တဲ့ international level ဆိုတာကတော့ အဲ့ဒီ့ နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်းကြီး ဆိုတာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးဟာ Raphael Lemkin မျှော်လင့်သလို အာဏာ ပြောပလောက်အောင် မရှိတဲ့ စက္ကူ ကျား ဖြစ်နေတာပါ။ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်သာ ဦးတည်ချက်ထား အလုပ်လုပ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
-စစ်နိုင်သော်လည်းချွတ်ခြုံကျနေတဲ့ ဗြိတိန် ပြင်သစ် အီတလီ
-စစ်ရှုံးပြီး ဖရိုဖရဲဖြစ်နေတဲ့ ဂျာမနီ တူရကီ စတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ ဥရောပဟာ ယိုင်နဲ့နဲ့ အခြေအနေနဲ့ရှိနေတာပါ။
စစ်လည်းနိုင် စီးပွားလည်းတောင့်တဲ့ အမေရိကန်ကတော့ သမုဒ္ဒရာ ၂ ခုကြားမှာ အေးဆေးပဲ နေတော့မယ်ဆိုပြီး ဥရောပနိုင်ငံရေးနဲ့ မပတ်သတ်ပဲနေတဲ့ကာလပါ။ စစ်ရှုံးနိုင်ငံတွေကို စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရတဲ့ စစ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ စစ်ရှုံး ဂျာမနီ နဲ့ တူရကီဆီက အဆီ အသားမျိုချဖို့ပဲ စီမံခန့်ခွဲကြပါတယ်။ စစ်အတွင်းမှာ ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်လိုရာဇဝတ်မှုတွေ မတရားမှုတွေကျူးလွန်သလဲ ဆိုတာတွေကို ဘသူကမှ စိတ်မဝင်စားကြပါဘူး။
ဗြိတိန်ကတော့ တူရကီက အာမေနီးယန်း ကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းကြည့်ပေမဲ့ အခြေအနေ မဟန်ပုံရတော့ ဆက်မလုပ်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ အာမေးနီးယန်း ၈သိန်းကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စကြီးဟာ ရုပ်ဆိုးပန်းဆိုး နဲ့ ဥရောပဥပဒေလောကကို လှောင်ပြောင်နေပါတယ်။ လူ ၈သိန်းကို သွေးအေးအေးနဲ့ သတ်ဖို့ အားပေး စီမံ လုပ်ဆောင် ခဲ့ကြတဲ့ တူရကီပြည်ထဲရေး ဌာနက အာဏာပိုင်တွေဟာလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ရှင်သန်အသက်မွေးပြီး အေးဆေးနေထိုင်နေကြပါတယ်
အဲ့ဒီခေတ်ကာလရဲ့ နိုင်ငံရေးသမား အများစုကလည်း စစ်ပွဲအတွင်း လူသန်းချီသေခဲ့တာကွ၊ ၈ သိန်းလောက် ထည့်ပြောမနေပါနဲ့ဆိုတာမျိုးပါ။
စစ်ပွဲအပြီး စစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေက မောက်မာတဲ့စိတ်ရှိသလောက် စစ်ရှုံးနိုင်ငံတွေကလဲ နာကျည်းစိတ်နဲ့ အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်စိတ်တွေနဲ့ အတွင်းကြိတ်လောင်ကျွမ်းနေကြတာပါ။
နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးဆိုတာလဲ စစ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေက စစ်ရှုံးနိုင်ငံတွေအပေါ် နိုင်ငံချင်းအလိုက် အမြတ်ထုတ်ဖို့ ဖြစ်နေတာကလွဲရင် တနိုင်ငံချင်းစီရဲ့ ပြည်တွင်းအရေးအရာကို ကိုယ်ကျိုးစီးပွားမရှိရင် စိတ်မဝင်စားတဲ့အတွက်
နိုင်ငံတခုချင်းစီမှာ ရှိတဲ့ လူနည်းစုလူမျိုးနွယ်တွေရဲ့ နစ်နာမှုတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ၊ အဲ့ဒီနစ်နာမှုတွေ အတွက် နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးက ဥပဒေ စာချုပ် တစုံတရာနဲ့ ကုစားပေးဖို့ ဆိုတာက မဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေပါ။
ဒီလိုနောက်ခံတွေကြားမှာ Raphael Lemkin ဟာ တိုက်ပွဲဝင်ရပါတော့တယ်။ Raphael Lemkin ဟာ ဥပဒေ သမားတယောက်က်ပီပီ၊ တူရကီတွေက အာမေးနီးယန်းတွေကို ကျူးလွန်တဲ့ ကိစ္စမျိုးအတွက် ကိုင်တွယ်ဖို့ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ တရပ် ပြဌာန်းရေး တိုက်ပွဲဝင်ပါတယ်။
ဥပမာ – ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပင်လယ်ဓါးပြမှုဟာ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုပါ။ ဆိုလိုချင်တာက အစိုးရတရပ်ကဖြစ်စေ တစုံတယောက်ကဖြစ်စေ ပင်လယ်ဓါးပြမှုလုပ်ရင် ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေက ပေါင်းပြီး ကျူးလွန်တဲ့ သူကို ဝိုင်းပြီး အရေးယူခွင့်ရှိပါတယ်။ ကျူးလွန်တဲ့ နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အချာအာဏာ ကို ထည့်တွက်စရာ မလိုပါဘူး။
Raphael Lemkin ထောက်ပြတာက ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောမှာပါတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေထက် လူ့အသက်တွေက တန်ဖိုးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လိုအပ်တဲ့ ဥပဒေ ပြဌာန်းပေးပါလို့ သူက တောင်းဆိုပါတယ်။ Raphael Lemkin ရဲ့ တင်ပြချက်တွေဟာ ချေပခံရတယ် ငြင်းဆိုခံရတယ် အလှောင်ခံရတယ် လျစ်လျူ ရှုခံရပါတယ်။ နောက်ပြီး Raphael Lemkin ရဲ့တင်ပြချက်တွေကို လူတွေက မယုံနိုင်သလိုလဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ အထောက်အထား အစုံအလင်နဲ့ ပြသတာတောင် လူတွေအဲ့လောက်အများကြီး အသက်ခံရတယ်ဆိုတာ ချဲ့ကားလွန်းတာပါကွာ ဆိုတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပြန်လိမ်တဲ့ psycho effect ကလဲရှိနေပါသေးတယ်။
တချို့ကတော့ စစ်အတွင်းပဲကွာ ဒီလောက်တော့ သေမပေါ့ ဆိုတဲ့ပေါ့ပျက်ပျက် သဘောမျိုးနဲ့ တုန့်ပြန်ကြပါတယ်။ ဒီတုန့်ပြန်ချက်ကို Raphael Lemkin က အာမေးနီးယန်းသတ်ဖြတ်မှုဟာ စစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေ စစ်နဲ့လုံးဝပတ်သတ်စရာမရှိတဲ့ဒေသတွေမှာ စစ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ကလေးတွေ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ အထောက်အထားတွေနဲ့ ပြန်ချေပပါတယ်။
နောက်ထပ်ပြသနာတခုက အသုံးအနှုန်း terminology ပြသနာပါ။ ဟုတ်ပီ လူသားတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ လူသား အများကြီးသေသွားတယ် သိန်းချီတယ်၊ စစ်ပွဲနဲ့လဲတိုက်ရိုက်မပတ်သတ်ဘူး၊ ကဲ အဲ့ဒါကို မင်းဘယ်လို ခေါ်မလဲ။
homicide – လူသတ်မှု
အများကြီးသတ်တာကွာ – massacre
ဖြစ်ခဲ့တာတွေက လူသတ်မှု အမျိုးအစားချည့် မဟုတ်ဘူး
ဒါကလဲ လူလား ပစ္စည်းလား
နောက်ထပ်အများကြီး terminology တွေ ရှိပါသေးတယ်။
ခက်တာက အဖြစ်အပျက် တခုလုံးကို ပုံဖော်နိုင်ခြင်းမရှိတာပါ။
အော်တိုမန်=တူရကီပြည်ထဲရေးက အာမေးနီးယန်းတွေ အပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့တာက သတ်ဖြတ်ခြင်းတခုတည်း မကပါဘူး ၊ အိမ်တွေကနေ နှင်ထုတ်တာ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို သိမ်းဆည်းပစ်တာ၊ အမျိုးသမီးတွေကို မုဒိန်းကျင့်တာ၊ ငတ်သေအောင်ထားတာ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ပစ်တာ၊ စသဖြင့် စသဖြင့် အစုံအစုံ ကျူးလွန်ကြတာပါ။
ကျူးလွန်ရခြင်းရဲ့ intention=ရည်ရွယ်ချက် ကရော ဘာလဲ ၊ အာမေးနီးယန်း လူမျိုးတွေကို ပျောက်ကွယ် သွားစေချင်တာပါ။ လူသားမျိုးနွယ်စု တရပ်ကို ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကနေ ပျောက်ကွယ်သွားစေချင်တာ ပါ။
ဒါဆို Crimes against Humanity= မနုသလူသားဖြစ်တည်မှုကို(အလုံးစုံဖြစ်စေ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်စေ ဖျောက်ဖျက် ဖျက်ဆီး လိုသောရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် )ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှု (အစုအထွေး)များ
မဆိုးဘူးပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ဒီ terminology က ရှည်တယ်၊ကျစ်လစ်မှုမရှိသလိုဖြစ်နေတယ်၊ အပြင်လူတယောက် နားလည်အောင် တိုတိုတုတ်တုတ် နဲ့ ထင်းခနဲ ရှင်းခနဲတော့ ဖြစ်မနေဘူး၊
ကဲ terminology တွေ ခနခေါက်ထားပြီး Raphael Lemkin ရဲ့ တိုက်ပွဲဘာဖြစ်သွားလဲ ဆက်ကြည့်ကြစို့ရဲ့၊
Raphael Lemkin ဟာ အလျှောက်ကောင်းလို့ အထောင်းခံရပါတော့တယ်။ Raphael Lemkin ဟာ တူရကီ အာမေနီးယန်း ကိစ္စကို ဥပမာ အပေးကောင်းလွန်းလို့ တူရကီရာဇဝတ်ကောင်တွေကို နေထိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ ဂျာမနီ အစိုးရက မျက်မုန်းကျိုးလာပါတယ်။ ဂျာမနီ အစိုးရက ပိုလန်အစိုးရကို Raphael Lemkin နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖိအားပေးပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပိုလန်အစိုးရရှေ့နေလေး Raphael Lemkin ဟာ အလုပ်ပြုတ်ပါတော့တယ်။
တရားစီရင်ရေး ကနေ ဥပဒေပြုရေးနယ်ပယ်၊ ဥပဒေပြုရေးကနေ သံခင်းတမန်ခင်း နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထိ ထိုးဖောက်ပြောပေမဲ့ သူ့ပြောကြားချက် စာတမ်းတင်သွင်းတာတွေဟာ နိုင်ငံတခုချင်းစီရဲ့ အမျိုးသားရေး အတ္တအားနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် ကျောက်တောင်ကို ကြက်ဥနဲ့ပေါက်သလောက်ပဲ အရာထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Raphale Lemkin ဟာ လက်မလျှော့ပါဘူး။ Crimes against humanity နဲ့ ပတ်သတ်လို့ လေ့လာဆဲ ရေးသားဆဲ presentation တွေ လုပ်မြဲပါပဲ။ လက်ခံတာ မခံတာတွေ သူ စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ပိုလန်နဲ့အိမ်နီးချင်း ဆိုဗိယက် အစိုးရ ရဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုတွေကိုလဲ အနီးကပ်လေ့လာနေခဲ့ပါတယ်။
kyawhlao oo ရေးတာကို m-media မှ copy ပြန်ယူတင်ပါသည်
Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin ( အပိုင်း-၃ )
ဒီလိုနဲ့ အချိန်ဟာ ဂျာမနီမှာ ဟစ်တလာ အာဏာရလာချိန် ရောက်လာပါတော့တယ်။ Raphael Lemkin ဟာ ဟစ်တလာရဲ့ မိုင်ကမ့် စာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး အနာဂတ်မှာ ဟစ်တလာဘာတွေ လုပ်လာလိမ့်မလဲ ဆိုတာကို ထိတ်လန့်တကြီးနဲ့ ကြို မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတခါ target ကတော့ အာမေးနီးယန်းတွေ မဟုတ်ဘူး။ Raphael Lemkin အပါအဝင် ဂျူးလူမျိုးတွေ ပါလားဆိုတာကိုလဲ သူ ကြိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။
ကြိုမြင်ခဲ့လို့လဲ Raphael Lemkin ဟာ ဂျာမနီက ပိုလန်ကို ကျူးကျော်တဲ့အခါ ပိုလန်ကနေ ခွာပြီး ကြားနေနိုင်ငံတခုမှာ ခိုလှုံခွင့်အတွက် ကြိုးပမ်းပါတယ်။ Raphael Lemkin ရဲ့ ဦးတည်ရာဟာ အမေရိကန် ပါပဲ / Raphael Lemkin ဟာ အမေရိကန်ကို တိုက်ရိုက်မသွားခင် ဆွီဒင်မှာ အရင် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံပါတယ်။
ပိုလန်ကနေ ဆွီဒင်ကို အသွား ဆိုဗိယက် အသိမ်းပိုက်ခံ နယ်မြေတွေကို ဖြတ်သွားရင်း ကြုံလာတဲ့ ဂျူးတိုင်းကို Raphael Lemkin က သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူကမှ သူ့စကားကို နားမထောင်ကြပါဘူး ၊ စစ်ဖြစ်တာပဲ ဒုက္ခတော့ ရောက်မှာပေါ့ကွာ။ မင်းလို အစိုးရိမ်လွန်ပြီး အဝေးကြီးကိုထွက်ပြေးစရာ မလိုပါဘူး ဆိုတဲ့ တုန့်ပြန်မှုနဲ့ပဲ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး Raphael Lemkin ရဲ့ မိဘ ညီအကို အရင်းတွေကတောင် Raphael စကားကို နားမထောင်ကြပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ Raphael Lemkin ဟာ ဆွီဒင်မှာ ခိုလှုံ့ခွင့် တောင်းခံပြီး စောင့်နေရပါတယ်၊ ဒီစောင့်နေစဉ်ကာလ မှာ Raphael Lemkin ဟာ အလွန်အရေးပါတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ကို ပြု စု နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်ကတော့ နာဇီဂျာမန်တွေဟာ သူတို့သိမ်းပိုက်ရတဲ့ နယ်မြေတွေမှာ ဂျူးအပါအဝင် လူနည်းစုတွေကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ ဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲ့ဒီ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ဥပဒေ တွေကို ပေါင်းချုပ်လုပ်ပြီး ရေးထားတာပါ၊ နာဇီဥပဒေ reference စာအုပ်ပေါ့ဗျာ
Raphael Lemkin ဟာ ဆွီဒင်မှာ ခိုလှုံခွင့်ရ ပြီးတော့ ဆွီဒင်ကတဆင့် အမေရိကန် ကို ခရီးဆက်ပါတော့တယ်
Raphael Lemkin ဟာ US မြေပေါ်ကိုရောက်တော့ သူ့ရဲ့တိုက်ပွဲကို ဆက်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ပုံစံပြောင်းလိုက်ပါတယ်၊
အမေရိကန်တွေအနေနဲ့တော့ Raphael Lemkin လို ဘာသာစကား ၁၀မျိူးလောက်တတ်ပြီး ဥပဒေမှာ လန်ထွက်အောင်တော်တဲ့ သူတယောက်ကို လက်လွတ်ဘယ်ခံလိမ့်မလဲ၊ အစိုးရဌာန တခုမှာ အကြံပေးအနေနဲ့ နေရာကောင်းပေးပြီးခန့်ထားလိုက်တာပေါ့။
ဒီတော့ အကြံပေးကြီး Raphale Lemkin ဟာ ဥရောပတိုက်က နာဇီတွေရဲ့ ခြေလှမ်းကို အမေရိကန် တွေ သိလာအောင် သတိထားမိလာအောင် action တစုံတရာယူအောင် ပြောဆိုခွင့်ရသလိုရှိလာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်တွေဟာ လူလည်တွေပါ။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်အကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲ Raphael Lemkin ဆီက အကြံဥာဏ်တွေ လိုချင်ကြတာဖြစ်ပြီး Raphael Lemkin ပြောတာတွေထဲက စစ်ထုတ်ယူပြီးမှ အလုပ်လုပ်ကြတာပါ
Raphael Lemkin ကတော့ အမေရိကန် အရာရှိ တယောက်တွေ့တိုင်း တယောက်မှ အလွတ်မခံပဲ ပြောပါတယ်။
နားပူဆာတိုက်လွန်းတော့လဲ အမေရိကန်တွေက Raphael Lemkin ကို အမေရိကန် ဒုသမ္မတ နဲ့ တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံ စကားပြောခွင့်ပေးပြီး၊ အမေရိကန် သမ္မတကြီး ရုစဗဲ့ဆီကို တိုက်ရိုက် စာတစောင်ရေးခွင့်ပေးပါတယ်။
အချိန်အတော်နှောင်းမှ Rapheal Lemkinဟာ ရုစဗဲ့ဆီက ပြန်စာတစောင် လက်ခံရရှိပါတယ်။ ” Dr.Raphael Lemkin ပြောတာတွေကို မှတ်သားထားကြောင်း သို့သော် လောလောဆယ်ဘာမှ လုပ်စရာမရှိကြောင်းပါ”တဲ့
Raphael Lemkin စိတ်ဓါတ်ကျ သွားပါတယ်။
US အစိုးရဘက်က ”လောလောဆယ် ဘာမှလုပ်စရာမလိုကြောင်း” ပေမဲ့ နာဇီဂျာမန်တွေကတော့ လောလောဆယ် လုပ်စရာရှိတာတွေကို ဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ် လုပ်ဆောင်နေပါပြီ၊
သိန်းချီတဲ့ ဂျူးတွေကို ကန့်သတ်ရပ်ကွက်တွေမှာ ချုပ်ထားပြီး အစာရေစာ ကို limit နဲ့ ပေးသယ်တာမျိုး၊ ဂျူးဆိုင်တွေ ဖျက်သိမ်း ၊ဂျူးတွေကို တံဆိပ်ကပ် စတာတွေကနေ သန်စွမ်းတဲ့ဂျူးတွေကို စစ်လက်နက်စက်ရုံတွေမှာ အင်အားသုံးခိုင်းစေ၊ ခိုင်းမရတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ ရောဂါသည်တွေကို ကိုယ့်ဖာသာကျင်းတူးခိုင်းပြီး လက်မရွံတပ်တွေနဲ့ ပစ်သတ် စသဖြင့် သတင်းတချို့ဟာ ဝှေ့ပြီးတက်လာပါတယ်။
နာဇီတွေအနေနဲ့ ဒီအလုပ်တွေကို လျှို့ဝှက်ပြီး ဘယ်လောက်လုပ်လုပ် စွန့်စားပြီး ဂျူးဟန်ဆောင်ပြီး စခန်းထဲကို အသေခံဝင်ပြီး၊ ကင်မရာ အသေးလေးတွေနဲ့ သတင်းပို့တဲ့ လူစွမ်းကောင်းအချို့ကြောင့် ဒီသတင်းတွေ ထွက်လာတာပါ။ (နာဇီတွေလုပ်ရပ်ရဲ့ အစအဆုံးရုပ်လုံးကတော့ စစ်ကြီးပြီးမှ ပေါ်လာတာပါ)
Raphael Lemkin ဟာ အပူမီးကြွလာပါတယ်။ သူကပူသလောက် အမေရိကန်တွေကတော့ အေးဆေးပါ။ ကြားနေရေးဝါဒီ အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေကို Raphael Lemkin ထိုးမဖောက်နိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ Raphael Lemkin ဟာ သူထိုးဖောက်နိုင်မဲ့ သူတွေဘက်ကို လှည့်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီလူတွေကတော့ အမေရိကန် ပြည်သူတွေပါပဲ၊ Raphael Lemkin ဟာ အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ လူထုဟောပြောပွဲတွေ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ သူ့ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပါတယ်။
နိုင်ငံရေးသမားတွေက ပြောရခက်သလောက် ပြည်သူတွေနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက Raphael Lemkin ကို လက်ခံကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ပြသနာ တခုတော့ရှိပါတယ်။ ပြသနာကလဲ အသစ်မဟုတ်ပါဘူး၊ အဟောင်းပါ၊ Terminology ပြသနာပါ။
သာမန်လူထုနားလည်လွယ်အောင်၊ အဓိပ္ပါယ်လည်းထိမိအောင်၊ တိုတိုတုတ်တုတ်ဖြစ်ပြီး၊ နားထောင်ရသူ ရင်ထဲ နင့်ခနဲ ဖြစ်စေတဲ့ Terminology မျိုးဖြစ်ရမှာပါ။
Raphael Lemkin ဟာ ဘာသာစကား ၁၀မျိုးကျော်လောက်ကျွမ်းကျင်သူပါ။ ဒီအချက်ဟာ သူ့ကို အများကြီးအထောက်အပံ့ပေးပါတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ သူဟာ အသုံးအနှုန်း တခုကို စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
မူလ အင်္ဂလိပ်စာမှာ မရှိသေးတဲ့ အသုံးအနှုန်းတခုပါ။ ဂရိ နဲ့ လက်တင် words ၂ ခုကို ပေါင်းစပ်ပြီး သူထွင်လိုက်တဲ့ terminology က Raphael Lemkin ရဲ့ သမိုင်း ကိုသာမက လူသားတွေရဲ့ သမိုင်း ကို အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲသွားစေပါတော့တယ်။
အိုင်းစတိုင်းရဲ့ E=mc2(ထပ်ကိန်းတင်မရလို့နားလည်ပေးပါ) လိုပဲ လူ့သမိုင်းကို အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားစေပါတော့တယ်။
Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin ( အပိုင်း- ၄ )
လူသားဆိုတာ Homo sapiens၊ လူသားရဲ့ Genus နဲ့ species ပေါ့ဗျာ၊
နောက်ပြီးကျနော်တို့ သိတဲ့ bacteriocidal , fungicidal အဲ့စာလုံးတွေမှာ ပါတဲ့ cide ဆိုတာ သတ်တာပေါ့ဗျာ။
Dr.Raphael Lemkin က Genus ဆိုတဲ့စာလုံးနဲ့ Cidal ကို ပေါင်းပြီး Terminology အသစ်တခု ထွင်လိုက်တယ်ဗျ။
” Genocide တဲ့ဗျာ ”
စတင်ကြားရတဲ့ လူတယောက်ဟာ ဒီ စာလုံးကြောင့် စိတ်နှလုံးကို ဆွဲညှစ်လိုက်သလို ခံစားရတယ် လို့ပြောတယ်။
– genocide ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ၁၉၄၄ ခုနှစ်မှာ Raphael Lemkin က စတင်တီထွင် သုံးစွဲခဲ့တယ် / သုံးစွဲစွဲချင်း လူတွေဟာ လက်ခံပြီး ဆက်လက်သုံးစွဲကြတယ်
– အဘိဓါန်ပြုစုရေး တာဝန်ယူထားတဲ့ တက္ကသိုလ် အသီးသီးကလဲ ဒီစကားလုံးကို english word တခုအဖြစ်လက်ခံပြီး အဘိဓါန်တွေမှာ ထည့်သွင်းပေးခဲ့ကြတယ်။
– ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အပြီး ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ နျူ ရင်ဘတ် စစ်ခုံရုံးရဲ့ စီရင်ချက် အချို့ မှာ ဒီစကားလုံးကို သာမန်အင်္ဂလိပ် စကားလုံး တလုံးအနေနဲ့ သုံးစွဲခဲ့တယ်။
– ၁၉၄၈ ဒီဇင်ဘာ ၉ မှာ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံက Genocide နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဆင့်သဘောတူ စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီး Genocide ဟာ ဥပဒေအရ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်တဲ့ စကားလုံးတလုံးဖြစ်လာခဲ့တယ်
(ဒီအဆင့်တိုင်း အဆင့်တိုင်းမှာ ရှိတဲ့ Dr.Raphael Lemkin ရဲ့ အားထုတ်မှုတွေကြောင့် သူ့ကို Genius လို့ ကျနော်က ယူဆတာပါ)
Genocide ကို မြန်မာလို ဘာသာပြန်ကြတာအတွေ့များတာကတော့ ” လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု ” ပါ။ တိုက်ရိုက် လုံးကောက် အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ဘာသာပြန်ထားတဲ့သဘောပါ။ မှားလားဆိုတော့ မမှားပါဘူး၊
genocide ဆိုတဲ့ စာလုံးကတော့ သူ့တလုံးတည်းကနေတင်ကို ပေးတဲ့အဓိပ္ပါယ်က genocide လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ အဲ့ဒါရဲ့နောက်မှာ genocide အကျူးလွန်ခံရတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အထိရောက်ဆုံးနည်းနဲ့ ကာကွယ်ပေးဖို့နဲ့ genocide ကျူးလွန်သူကို အရေးယူအပြစ်ပေးဖို့ ကခွဲမရအောင် တွဲပါပြီးသားပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ genocide ကို စတင်တီထွင်သုံးစွဲတဲ့ Dr.Raphael Lemkin ကိုယ်တိုင်က အဲ့ဒီ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲ့လိုအရေးယူဖို့ကိုလဲ ကုလသမဂ္ဂမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ရှိပြီးသားမို့ပါ /
ဟ ဒါဆို လယ်တွေသိမ်းနေတာ genocide ပေါ့။ မဟုတ်သေးဘူးဗျ / genocideဆိုတာ အဲ့လို action တွေအပြင် intention တခုပါမှ
ဘာ intention လဲဆိုတော့ ” မနုသလူသား အဖွဲ့အစည်းတရပ်(အမျိုးအနွယ်စု တစု)ကို အလုံးစုံဖြစ်စေ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်စေ ဖျက်ဆီးဖျောက်ဖျက်လို သော ” ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ဗျာ။
ပစ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ လူမျိုးစု ကို နှိမ်ပေါက်နဲ့ မလိုလားတဲ့ နာမည်နဲ့ တံဆိပ်ကပ်တာ၊ ဥပမာ သူတို့ရဲ့မူလနာမည်ကို မခေါ်ဘဲ ဖားပြုပ်ကောင်တွေ၊ ပိုးဟပ်တွေ၊ ဝက်တပိုင်းကောင်တွေ၊ ငမဲကောင်တွေ ၊ ဘီလူးလိုရုပ်ဆိုးကောင်တွေ အစ ရှိသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။
( ဗမာပြည်မှာဆိုရင်တော့ mုလား ; ခိုးဝင် ; သွေးနှော စသဖြင့်ခေါ်ဝေါ်တာတွေပေါ့ဗျာ )
ဒီလိုနှိမ်ပေါက်နဲ့ ခေါ်ဖို့ကို လမ်းဘေး လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ အာပေါင်အာရင်းနဲ့ လှုံ့ဆော်နေရာကနေ နိုင်ငံတော်အဆင့်ပိုင် ရေဒီယို ရုပ်မြင်သံကြားကနေ လှုံ့ဆော်တာ ခေါ်ဝေါ်တာထိ ပါဝင်ပါတယ်။
လူ့သဘာဝ အရ လူတယောက်အသက်ခံရတာကို ဘယ်သူမှ အကြောင်းမဲ့ ဝမ်းသာမနေပါဘူး ။ ဝမ်းမနည်းဘူးဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံး တုန်လှုပ်မိမှာပါ။ ”ဟာ ဥပဒေ စိုးမိုးရေးက အတော်ပျက်နေပါလား ငါတို့တောင်လုံခြုံပါ့မလား”ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးက တော့ တချက်တော့ ဝင်လာမိမှာပါ။
အဲ့လိုလူ့သဘာဝနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ” ဟာ အဲ့ ဝက်တပိုင်းကောင်တွေ အသတ်ခံရတာ ဝမ်းသာတယ် ချသာချ ” ဟေးဟားနဲ့ လူအုပ်စုဖွဲ့ပြီး ထောက်ခံမှုတွေရှိလာရင် / နိုင်ငံတွင်းမှာ ရှိတဲ့ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ အစိုးရက လွန်ကျူးနေတာကို မြင်ပါလျက်နဲ့ နှုတ်ဆိတ်နေတာ သို့မဟုတ် ဗြောင်ဖြစ်စေကြိတ်ပုန်းဖြစ်စေ အားပေးထောက်ခံတာ။
Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin ( အပိုင်း- ၅ )
မည်းမှောင်နေတာကတော့ ကိုဆိုဗိုဒေသ ရဲ့တောအုပ်တွေဖြစ်ပြီး တလက်လက်နဲ့ တောက်ပနေတာတွေကတော့ တောအုပ်ထဲမှာ ဖိုထားတဲ့ မီးဖိုလေးတွေပါ။ ဘယ်သူတွေက မီးဖိုထားလဲဆိုတော့ ဆာဘ်ပုလိပ်တွေနဲ့ ပြည်သူ့စစ်တွေက လိုက်သတ်နေလို့ ထွက်ပြေးပုန်းအောင်းနေရတဲ့ ကိုဆိုဗို အလ်ဘေးနီးယန်း တွေက ဖိုထားတာပါ။ CIA အရာရှိအနေနဲ့ ဒီလို ဓါတ်ပုံများစွာကို ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေအတွင်းမှာ ခဏခဏ မြင်ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းကတော့ ဆားဗီးယား နိုင်ငံရဲ့ ကပ်ရပ် အိမ်နီးချင်း ဘော့စ်နီးယား နိုင်ငံအတွင်းမှာပါ။ အဲ့ဒီတုန်းက မီးဖိုလေးတွေ ဖိုခဲ့ရသူတွေကတော့ ဘော့စ်နီးယန်း လူမျိုးတွေပါ။
သူ့ရဲ့ အကြံအစည်တွေဟာ ဘော့စ်နီးယားမှာ မအောင်မမြင်နဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောလို့ရပေမဲ့ ဆာဘ်လူမျိုး မဟုတ်သူ ၃သိန်းနီးပါးလောက်ကိုတော့ မျိုးဖြုတ်ပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မီလိုဆီဗစ်အနေနဲ့ ဆာဘ်လက်နက်ကိုင်တွေအားလုံး ဘောစ်နီးယားနိုင်ငံအတွင်း ( ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နယ်မြေတွေ ) ကနေ ထွက်ခွာ ဖို့ အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ NATO အဖွဲ့နဲ့ သဘောတူခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူသိန်းချီသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ မီလိုဆီဗစ် အနေနဲ့ တရားစွဲခံရခြင်း အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြင်း တစုံတရာ မရှိပဲ ဆားဗီးယား နိုင်ငံတော်ရဲ့သမ္မတ အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မီလိုဆီဗစ် ရဲ့ မဟာဆားဗီးယား အိပ်မက်ဟာ ဆက်လက်မက်လို့ကောင်းဆဲပါပဲ
ဒီတခါ သူ့အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်မဲ့နေရာကတော့ ဆားဗီးယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းက ကိုဆိုဗို ဒေသလေးပါပဲ။ ဒီဒေသ မှာ ၁၂ရာစုကတည်းက အခြေချနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ အလ်ဘေးနီးယန်း လူမျိုး တွေနဲ့ ဆာဘ်လူမျိုးတွေဟာ ရန်စောင်နေခဲ့ကြတာပါ ၊ ဘော့စ်နီးယားတုန်းက NATO အဖွဲ့ကို အလျော့ပေးခဲ့ရတဲ့အတွက် မဟာဆားဘီးယားခေါင်းဆောင်မီလိုဆီဗစ် အဖို့ ကျဆင်းခဲ့ရတဲ့ သိက္ခာတွေကို ပြန်ဆည်ဖို့ ကိုဆိုဗို ဟာ နေရာကောင်းပါပဲ၊
KLA အဖွဲ့ကို အမေရိကန် အစိုးရအနေနဲ့ အကြမ်းဖက် စာရင်းသွင်းထားပေမဲ့ CIA ကို KLA နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခိုင်းထားပါတယ်။ တခြား ဥရောပ ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့တွေကတော့ KLA ကို လေ့ကျင့်ပေးတာ ဆက်သွယ်ရေးစနစ် တည်ဆောက်ပေးတာတွေ လုပ်နေပါပြီ။ ကိုဆိုဗို အလ်ဘေးနီးယန်း ကိုယ်စားလှယ်က မီလိုဆီဗစ် နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဆာ့ဘ်တွေအနေနဲ့ ညှာတာဖို့ ချင့်ချိန်ဖို့ မပြောတော့ပဲ ”ဆက်မိုက်ရင်တော့ ဆားဗီးယားနိုင်ငံ ချိနဲ့သွားဖို့သာပြင်ထား ”လို့ သတိပေးစကားပြောတဲ့ အနေအထား ရောက်နေပါပြီ။
ကျနော်ကတော့ Dr.Raphael Lemkin အကြောင်းပဲဆက်ရေးပါတော့မယ်။
Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin ( အပိုင်း- ၆ )
ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေနဲ့ ဝေးကွာတဲ့ နေရာမှာ ရှိတဲ့ သံဆူးကြိုးကာစခန်းတွေ ကနေ ထွက်ပေါ်လာနေတာပါ။ ဒီစခန်းတွေထဲကို ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သိန်းချီတဲ့ ယောက်ျား မိန်းမ ဂေး ကလေး လူငယ် လူလတ် လူကြီး အဘိုးအဘွား အစုံအလင်ဟာ အရိုးပေါ်အရေတင် ပိန်ခြုံးလျက် မသေရုံတမယ် ရှိနေကြပြီး အဲ့လိုပိန်ချုံး နေတဲ့ အရွယ်စုံ လူသေအလောင်းတွေဟာလည်း ပုံအောလျက် တချို့လဲ တဝက်တပျက်လောင်ကျွမ်းထားတဲ့ အလောင်းတွေ တချို့လည်းပြာကျအောင် မီးရှို့ထားတာတွေ၊ မိုးထိအောင် မြင့်မတက် ထိုးထောင်နေတဲ့ မီးရှို့ စက်ရုံခေါင်းတိုင်တွေ၊ အစုလိုက် အပြုံလိုက် လူသေ မြုပ်ထားတဲ့ ကျင်းကြီးတွေ၊ အရှင်လတ်လတ် ( မေ့ဆေး ထုံဆေး မပါဘဲ ) ဦးနှောက် ရင်ဘတ် ဗိုက် ခွဲစိတ်ခံထားရပြီး မသေမရှင် ဖြစ်နေသူတွေ၊ သေနေသူတွေ၊ မြင်ရ ရုံနဲ့ ရူးသွားနိုင်စေတဲ့ နာဇီဂျာမန်တွေရဲ့ သေမင်းတမန်စခန်းတွေပါ။
shock ရတဲ့သူကရနဲ့ ဖြစ်နေကြပါတယ်။
Raphael Lemkin အတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက သူရဲ့ မိဘ အပါအဝင် ဆွေမျိုးအရင်းအချာ ၄၉ ယေက်ပါ နာဇီတွေရဲ့ လက်ချက်နဲ့ အသက်ပျောက်ခဲ့ရှာတာပါ။
ဒါတွေကို Raphael Lemkin ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ
သူတို့ကတော့ နာဇီတွေကို punishment ပေးဖို့ ရည်ရွယ်တာပါ။ revenge မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီအတွက် နျူ ရင်ဘတ် စစ်ခုံရုံးကို ဖွဲ့ပါတယ်။ Dr.Raphael Lemkin ဟာ ဒီခုံရုံးမှာ ဥပဒေအကြံပေးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရပါတယ်။
ကျား နဲ့ ဆင် လယ်ပြင်မှာ တွေ့ပီလား?
Raphael Lemkin လိုချင်တာက နာဇီတွေရဲ့ ပြစ်ချက်တွေကို genocide နဲ့ စွဲချက်တင်ပြီး အပြစ်ပေး နောက်နောင်လဲ နာဇီတွေလို ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက် စံပြစီရင်ချက် ဖြစ်စေဖို့ပါ။
လက်ရှိစွဲချက်တွေအရ နာဇီတွေဟာ စစ်ပြုပြီး သူများနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်လို့ ; စစ်ကာလ အတွင်းရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်လို့သာ စွဲချက်တင်ခံနေရတဲ့သဘောပါ။
Raphael Lemkin ဆိုလိုချင်တဲ့ genocide နဲ့ စွဲချက်ဆိုတာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မစခင်ကတည်းက နာဇီတွေဟာ ဂျူးလူမျိုးတွေကို ( သွေးနှော သွေးမသန့် ) ဒုတိယတန်းစား နိုင်ငံသားအဖြစ်နှိမ့်ချ ခွဲခြားတံဆိပ်ကပ် စသဖြင့် (ရှေ့မှာကျနော်ရေးခဲ့တဲ့) warning signs တွေကစပြီးတော့ စွဲချက်တင်စေချင်တာပါ။ ဒီအတွက် Raphael Lemkin ဟာ ရုံးတော်မှာ ရှေ့နေတွေကို နားပူဆာတိုက်ဆုံး ခုံရုံးကို မထောက်မညာ ဝေဖန်နေတဲ့ အကြံပေးဖြစ်လို့နေပါတယ်။
ခုံရုံးက ရှေ့နေတချို့ ကဆို Raphael Lemkin ကို ” ခင်ဗျားက နာဇီတွေကိုသေဒဏ်ပေးဖို့ အဓိက မထားဘဲ ၊ genocide နဲ့စွဲချက်တင်ဖို့ပဲ အဓိကထားနေသလား” လို့ ပြန်မေးတဲ့အထိပါပဲ
ဒီလို အငေါ်တူးတာတွေရှိပေမဲ့လည်း အမှုတချို့မှာ genocide ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို descriptive purpose အနေနဲ့ စတင်သုံးစွဲပါတယ်။ Raphael Lemkin လိုချင်တဲ့ Legal term တခုအနေနဲ့ သုံးစွဲတာတော့မရှိပါဘူး။
ကျူးလွန်တဲ့ အမှုတွေက တပုံတခေါင်းကြီး ။ စီရင်ချက်တခုချဖို့ အချိန်စွဲစစ်ရင်း နာဇီတွေကို အသက်ရှည်ခွင့်ပေးနေသလိုလဲ ဖြစ်လို့လဲမရ။ ဒီကြားထဲ Raphael Lemkin ဆိုတဲ့လူက genocide နဲ့စွဲချက်တင်ဖို့ လာပြောနေ / ဒါဆို ဘယ်မလဲ genocide နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရေးထားတဲ့ Law !
Law ! Law ! genocide နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Law !
ဒီ law က ခုချိန်ထိ Raphael Lemkin ဆိုတဲ့လူတယောက်က ရေးထားတာပဲ ရှိသေးတာ ၊ ဘယ်အချုပ်အချာအာဏာပိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကမှ မပြဌာန်းရသေးဘူး။ ဒီ Law ကိုပြဌာန်းဖို့က နိုင်ငံတကာ level အာဏာနဲ့ပြဌာန်းမှ တကယ်အလုပ်လုပ်လို့ရမှာ။
ဒါဆို Dr.Raphael Lemkin အဖို့ နျူ ရင်ဘတ်ခုံရုံးကခွာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး နိုင်ငံတကာ level အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ United Nations -ကုလသမဂ္ဂသို့ချီတက်ပါလေတော့တယ်။
Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin ( အပိုင်း- ၇ )
၁၉၄၆ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ Raphael Lemkin ဟာ သွေးတိုးကြောင့် ဆေးရုံတက်ရပါတယ်။ ဆေးရုံတက်တက်ချင်းရက်မှာပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မှာ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ ကျင်းပတော့မယ့်အကြောင်း စကြားရပါတယ်။ Raphael Lemkin ဟာ ချက်ချင်းပဲ ဥရောပကနေ အမေရိကန် နယူးယောက်ကို ပြန်ချီတက်ပါတော့တယ်။
သူလိုချင်တဲ့ နိုင်ငံတကာ level ရဲ့ အမြင့်ဆုံးညီလာခံမှာ genocide law နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ထိုးဖောက်ခွင့်ကို သူလက်လွှတ်ခံလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။
ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ညီလာခံ ခန်းမဆောင်မှာ သံတမန်တွေ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရေရေလည်လည် ဦးနှောက်စားမည့် ချက်ကျလက်ကျ ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ ချောင်ပိတ်မယ့် လူတယောက်ကို မမြင်ချင်မှ အဆုံး တွေ့နေရတော့တာပါပဲ။ တွန့်ကျေနေတဲ့ ကုတ်အင်္ကျီ၊ ခေါက်ပွနေတဲ့ ဘောင်းဘီ၊ ဆေးရောင်တွေ အဖတ်လိုက် အဖတ်လိုက်ကွာကျနေလို့ ဖြူ တကွက် မဲတကွက် ဖြစ်နေတဲ့ ရှူးဖိနပ် / စာရွက်စာတမ်းတွေ မှတ်စုတွေ မှတ်တမ်းတွေကို လက်ကိုင်အိတ်ထဲမှာ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ထည့်ထားပြီး ညီလာခံ ခန်းမဆောင် စားပွဲရုံ နေရာတကာပတ်သွားနေတဲ့ Raphael Lemkin ဟာ ဘယ်သံတမန်ကို တွေ့လိုက်မလဲ တွေ့လိုက်တာနဲ့ လက်စွဲပြီး genocide နဲ့ ပတ်သက် လို့ ဥပဒေပြဌာန်းဖို့လိုကြောင်း စာရွက်စာတမ်းတွေ ဥပဒေအထောက်အထားတွေ တရွက်ပြီးတရွက် အိတ်ထဲက ဆွဲထုတ်ပြီး သူရှင်းပြပါတော့တယ် သံတမန်ဖတ်ဖို့လဲ လိုအပ်တဲ့ စာတမ်းတွေ ညွှန်ပါဦးမယ်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်လွန်းပြီး ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ ဖြစ်ရတာလဲ အကြိမ်ကြိမ် / ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ ဆိုတာ တင်စားပြောတာမဟုတ်ဘူး။ တကယ်ကို မစားမသောက် မမောမပမ်း ပြောရင်းနဲ့ ဘိုင်းခနဲ ပစ်လဲသွားတာလဲ အကြိမ်ကြိမ် ပါ။
သံတမန် ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဆိုတာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ပေးအပ်လိုက်တဲ့ ရည်မှန်းချက်က ရှိပြီးသားပါ။ ညီလာခံတက်ရတဲ့အပြင် ဘေးပန်းဆွေးနွေးပွဲတွေကလဲ အများအပြားပါ ဒီလို ညီလာခံမျိုးမှာ အချိန်ဆိုတာ အလွန်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ရှားပါးလှတဲ့ အချိန်တွေကို လာလာဖဲ့ထုတ်နေတဲ့ Raphael Lemkin ဟာ ကိုယ်စားလှယ်တော်များအတွက် အနှောက့်အယှက်ကြီးဖြစ်လို့နေပါတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံမှလည်းကိုယ်စားပြုတာမဟုတ်၊ ဘယ်အဖွဲ့စည်းကမှလဲ စေလွှတ်တာမဟုတ်၊ သူ့ဖာသာ တယောက်တည်းလာပြီး တကိုယ်တော်ကျဲနေတဲ့ Raphael Lemkin ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံရဲ့ အမြင့်ဆုံး UN General Assembly မှာ ဘသူကများအရေးစိုက်ပါ့မလဲ။ ဘယ်သူကများသူ့စကားတွေကို လက်ခံပြီး genocide နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ law ပြဌာန်းပေးပါ့မလဲ။
Raphael Lemkin ရဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးကုလသမဂ္ဂ မှာတကိုယ်တော်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ ယခုဒုတိယအကြိမ်တိုက်ပွဲဟာ ပထမ ကမ္ဘာစစ်အပြီး နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးမှာတိုက်ခဲ့တဲ့ ပထမအကြိမ်တိုက်ပွဲလိုပဲ အရေးနိမ့်သွားလေမလား ?
Raphael Lemkin ရဲ့ ကမ္ဘာ့မင်းပရိသတ် အလယ်မှာ အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်မှုဟာ အချည်းနှီး မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီးခံစားထားရတဲ့ ကမ္ဘာ့ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများဟာ Raphael Lemkin ရဲ့ ဇွတ်တရွတ်နိုင်တာတချို့ကို ငြိုငြင်ကြပေမယ့် သူ့ရဲ့စကားတွေဟာ သွေးထွက်အောင်မက အလောင်းသန်းနဲ့ချီ တောင်လိုပုံပြီး မှန်တယ်လို့သက်သေရှိခဲ့ပြီကိုးး။
ဒီတော့ Raphael Lemkin ပေးတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို သူတို့ဖတ်ကြပါတယ် ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Raphael Lemkin ဆိုတဲ့ ငွေမရှိ အာဏာမရှိ အသိုင်းအဝိုင်းမရှိ နောက်ခံဘာမှ မရှိတဲ့ တကိုယ်တော်ရှေ့နေရဲ့ Genocideနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဥပဒေပြဌာန်းဖို့ကိစ္စ ဟာ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ စင်မြင့်ပေါ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။
၁၉၄၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ မှာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အထွေထွေညီလာခံက Genocide ဟာ တားဆီးရမဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုရယ်လို့ resolution ထွက်လာပါတယ်။ UN General Assembly ရဲ့ formal statement တခုနဲ့ Genocide Law ဟာ နိုင်ငံရေးပါဝါ သန္ဓေစတည်လာပါတယ်။ Assembly လဲပြီးရော Raphael Lemkin ဟာ မောလွန်းပမ်းလွန်းလို့ အိပ်ချလိုက်တာ ၂ ရက်တိုင်တိုင်ကြာပါသတဲ့။
ဒါဆို Raphael Lemkin ရဲ့တိုက်ပွဲဟာ အောင်သွားပြီလား၊ ခြေတလှမ်းရှေ့တိုးသွားတယ်လို့တော့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဆက်လျှောက်စရာတွေ အများကြီးကျန်နေပါသေးတယ်။ resolution ဟာ law မဟုတ်သေးပါဘူး။ law အဆင့်ထိရောက်အောင် ဥပဒေကြမ်းအရင်ရေးပြီး နောက်တကြိမ် General Assembly မှာ အတည်ပြုရမှာပါ။
Genocide နဲ့ပတ်သတ်လို့ ဥပဒေကြမ်းရေးဖို့ UN က ကော်မတီ တရပ်ဖွဲ့ပါတယ်။ ဒီကော်မတီက ဥပဒေကြမ်းရေးတဲ့နေရာမှာ Raphael Lemkin အနေနဲ့ သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ criteria တွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ကြိုးပမ်းရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့က resolution ကိုရေးရာမှ Raphael Lemkin ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ကူညီခွင့်ကို UN အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်က ခွင့်ပြုလို့ ဒီ resolution နဲ့ဆက်စပ်ပြီး law ရေးတဲ့ကိစ္စမှာ Raphael Lemkin ဟာ သိပ်ဖိစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ အမှုစကားနဲ့ပြောရ ရင် လမ်းကြောင်းပွင့်သွားပီမို့ သိပ်မခက်ခဲလှတော့ဘူးပေါ့။
ဥပဒေကြမ်းကို ဥပဒေရေးဆွဲရေးကော်တီက အတည်ပြုတင်သွင်း တင်သွင်းလာတဲ့ ဥပဒေကြမ်းကို General Assembly က မဲ ၃ပုံ၂ပုံနဲ့ ထောက်ခံရင် Genocide ဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ law တခုဖြစ်လာတော့မှာပါ
Raphael Lemkin အနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ ထောက်ခံမဲရဖို့ သွားလိုက်ရတဲ့ ခရီးတွေ လွန်းပျံမတတ် ရေးလိုက်ရတဲ့စာတွေ ရုံးခန်းအပြည့် ၊ ဒီအချိန်မှာ သူဟာ အလုပ်မရှိတော့ပါဘူး။ ငတ်တလှည့်ပြတ်တလှည့်နဲ့ ဒီအလုပ်ကို လုပ်နေရှာတာပါ။
ဒီလိုနဲ့ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ နောက်တကြိမ် General Assembly ရောက်လို့လာပါပြီ။ Raphael Lemkin ဟာ ညီလာခံအပြင်မှာ ”ငါ genocide အကြောင်း ဇွတ်လိုက်မပြောဖြစ်အောင် သတိနဲ့ထိန်းမယ် / မဲပေးတာကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ စောင့်မယ်”စသဖြင့် အောင်စာရင်းကြည့်ခါနီးကျောင်းသားလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ General Assembly မှာ မဲခွဲပါတယ်။ Raphael Lemkin ဟာ အောင်ပါတယ် ဂုဏ်ထူးမက ရာပြည့်နဲ့အောင်ပါတယ်။
General Assembly က genocide နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ convention ကို ကန့်ကွက်သူမရှိ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
နာမည်ကတော့ The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide တဲ့ဗျာ။
၁၉၄၈ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှာ အတည်ပြုခဲ့တာပါ။
အင်းးးး တကယ်တော့ ဒါဟာ Raphael Lemkin ရဲ့အောင်ပွဲသက်သက်မဟုတ်ဘူးဗျ။
Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin ( အပိုင်း- ၈ )
အမေရိကန် နိုင်ငံကို ခြေဗလာ လက်ဗလာနဲ့ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံလာတဲ့သူ ; နိုင်ငံရေးနောက်ခံအသိုင်းအဝိုင်းနောက်ခံတစိုးတစိမှမရှိတဲ့သူ ; ဥစ္စာဓနဆိုလို့ မူးလို့ရှူ စရာမရှိတဲ့ သူDr.Raphael Lemkin ဟာ ကမ္ဘာ့အပြည်ပြည်အထောင်ထောင်သော သံတမန်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာ General Assembly မှာ သူ့ရည်မှန်းချက်ကို ထုဆစ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါဆို Raphael Lemkinအနေနဲ့ ဂုဏ်ယူသင့်ပီ လက်မထောင်သင့်ပြီ၊ ဝံ့ကြွားသင့်ပီမဟုတ်လား။ ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးအတွက် Dr. Raphael Lemkinဟာ ရင်ကော့နေပါပီလား?
General Assembly ခန်းမဆောင်ရဲ့ ဂျောင်ကျကျတနေရာမှာ Raphael Lemkin ဟာ ရှိုက်ကြီးတငင်ငင် ငိုကြွေးလို့နေပါတော့တယ်။ အောင်မြင်မှုရဲ့ဗိသုကာရှင်ကို သတင်းထောက်တွေက တွေ့ဆုံဖို့ ချဉ်းကပ်လာရာမှာတော့ Raphael Lemkin ဟာ တယောက်တည်းနေပါရစေလို့ တောင်းဆိုရှာပါတယ်။ အားရပါးရ ငိုနေရှာတဲ့ Raphael Lemkin ဟာ ဝမ်းသာလွန်းလို့ ငိုတာလဲပါသလို၊ သန်းချီသတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ လူတွေရဲ့ အလောင်းတွေ အရိုးတွေ အလဟသ မဖြစ်တော့ဘူး အကျိုးရလဒ်တခုတော့ ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ အသိတခုနဲ့ ငိုနေတာပါ / ရောပြွမ်းနေတဲ့ ခံစားချက်တွေဟာ မျက်ရည်အနေနဲ့ စီးဆင်းလာတာပါ ဒီနောက်မှာတော့ Raphael Lemkin ဟာ ပင်ပန်းမှုကြောင့် ပုံလဲကျသွားခဲ့ပြီး ဆေးရုံ ၂ ပတ်လောက်တက်ယူလိုက်ရပါတယ်။
ဆေးရုံက အဆင်းမှာ Raphael Lemkin ဟာ သူ့တိုက်ပွဲကိုဆက်ပြန်ပါတယ်။
Genocide ဟာ ခုမှ ဥပဒေကြောင်းအရ ခြေလှမ်းတလှမ်းကို စတင် လှမ်းခွင့်ရလိုက်တဲ့သဘောပါ မိုင် ၁၀၀၀ ခရီးရဲ့ ပထမ ခြေလှမ်းပေါ့ဗျာ။
UN က genocide နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ convention ကို ပြဌာန်းခဲ့ပါပြီ။ဒီလိုပြဌာန်းပြီးတဲ့နောက်မှာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာ genocide ကို တားဆီးဖို့နဲ့ ကျူးလွန်သူကို အပြစ်ပေးဖို့ တနိုင်ငံချင်းစီ ဥပဒေတွေ ထပ်မံပြဌာန်းပြီး လိုက်နာရမှာပါ။ မူအားဖြင့်တော့ အားလုံးစုံညီပြီး သဘောတူညီချက်တခုရမှတော့ တနိုင်ငံချင်းစီအလိုက် ပြဌာန်းဖို့က အလိုလို ဖြစ်လာရမဲ့ ကိစ္စပါ။
နိုင်ငံတခုချင်းစီမှာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားဆိုတာရှိတယ်။ မတူညီတဲ့ သမိုင်းဖြတ်သန်းမှုတွေရှိတယ်။ ဒီ့ထက်အရေးကြီးတဲ့ ပြဌာန်းစရာ ဥပဒေတွေက အပုံကြီး။ ဒါ့အပြင် အရေးအကြီးဆုံးက အမေရိကန်က တဖက် ဆိုဗိယက်ကတဖက် နဲ့ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးအားပြိုင်စ ပြုနေစဉ်မှာ ဒီလို ဘောင်ကျယ်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အချာအာဏာကို ပြန်ထိစေနိုင်တဲ့ ဥပဒေမျိုးပြဌာန်းဖို့က ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေးပါ။
ဒါပေမဲ့ Raphael Lemkin ကတော့ မျှော်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတခုကို အတော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရင့်ကျက်ခိုင်မာလေသော ကမ္ဘာစစ်ကြီးနှစ်ခုလုံးကို အနိုင်တိုက်ပြီး စစ်ရေး စီးပွားရေး နိုင်ငံရေးမှာ super power ဖြစ်လာသော အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကိုပါ။ အမေရိကန်သာ genocide တားဆီးရေးနဲ့ အပြစ်ပေးရေး law ကိုပြဌာန်းခဲ့ရင် အတော်ကြီးကို effective ဖြစ်လာမှာပါ။
သို့သော်လည်း အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမားတွေ လွှတ်တော်အမတ်တွေကတော့ ဒီဥပဒေကိုသာ ပြဌာန်းလိုက်ရင် နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အချာအာဏာကို တောင် ပြန်ခွေအောင်လုပ်လိုက်နိုင်တယ်။ စစ်အေးအားပြိုင်ပွဲမှာ ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုယ်ကြိုးချည်တာမျိုး မလုပ်နိုင်ပေါင်။ အမေရိကန်ပြည်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ လူဖြူ လူမဲ ပြသနာ နဲ့ ဒီ law နဲ့သာချိတ်မိရင် ပြသနာတွေ အကြီးကြီးတက်ကုန်မယ် စသဖြင့် ကန့်ကွက်ပြောဆိုကြပါတယ်။
တချို့ အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ”ဟာကွာ ဘယ်ကရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံထားတဲ့ သူတယောက်ပြောတိုင်း ငါတို့က ဥပဒေပြဌာန်းပေးကြေးလား”ဆိုပြီးကစ်ပါတယ်။
Raphael Lemkin အတွက် အထိုးနှက်ခံရဆုံး အပိုင်းကတော့ အိုက်စင်ဟောင်ဝါ သမ္မတ ဖြစ်လာတဲ့အခါပါပဲ / အိုက် ဟာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တုန်းက ဥရောပမှာရှိတဲ့ မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုရဲ့ နံပါတ်၁ စစ်ခေါင်းဆောင်ပါ။ နာဇီတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုလဲ ကောင်းကောင်းသိတဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့ အိုက်က genocide law ကို အပြတ်ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒါဆို Raphael Lemkin စိတ်ဓါတ်ကျပီလား။
Raphael Lemkin ဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကိုသာမက အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကိုလဲ စာရေးသားဆက်သွယ်ပြီး ဥပဒေပြဌာန်းဖို့ တ်ုက်တွန်းနေပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်း ဟောပြောပွဲတွေ စာရေးသားဆက်သွယ်မှုတွေ အဆက်မပြတ် လုပ်နေဆဲ စည်းရုံးနေဆဲ တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲပါ။
Raphael Lemkin တိုက်ပွဲဝင်ပုံက ကြမ်းပါတယ်။ ဥပမာ အမေရိကန်လွှတ်တော် အမတ်တယောက်ဆီ စာရေးတဲ့ပုံက
ဦး. . . . . .
. . . . . . .ပြည်နယ် အမတ်မင်း
ဒီလိုပူပြင်းတဲ့လမှာ အလုပ်သဘောနဲ့ စာရေးရတာ အားနာပါတယ် . ဒါပေမဲ့ အောဇ်ဝစ် အကျဉ်းစခန်းက မီးရှို့ခန်းတွေက ဒီထက်ပိုပူမှာ ခင်ဗျားလဲ အသိပါ ။ ဒီတော့ genocide တားဆီးရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့ . . . .
Raphael Lemkin ဟာ ဒီအလုပ်တွေကို အားတုန်း အချိန်ပိုတုန်း လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ထိပ်သီးတွေ အဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နေရတာ အချိန်ပြည့်ပါ။
ဒါပေမဲ့ Raphael Lemkin ရဲ့ ဝင်ငွေက No ပါ။
အဖွဲ့အစည်းတချို့က မဖြစ်ညစ်ကျယ် ထောက်ပံ့တာလေးနဲ့ မသေရုံတမယ်စားပြီးလုပ်နေတာပါ။ သူရေးတဲ့ စာအုပ်တချို့ကို ပုံနှိပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းပေမဲ့ လေးလံလှတဲ့ ဥပဒေ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ genocide သမိုင်းအသေးစိတ်တွေမို့ ထုတ်ဝေသူတွေက ရောင်းမစွံနိုင်ဘူးလို့ ငြင်းကြပါတယ်။
Raphael Lemkin ဟာ အပေါင်းအသင်းလဲ သိပ်မရှိလှပါဘူး။ လူမှုရေးသဘောလည်းနားမလည်ဘဲ Genocide အပေါ်မှာပဲ အာရုံနှစ်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတာပါ။ လူတွေ့တိုင်းလဲ ဒါပဲပြောနေတဲ့ စက်ရုပ်လိုပါပဲ
ဥပတိ ခန့်ခန့် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကောင်းမွန်တဲ့ ဥပဒေပညာရှင် Dr.Raphael Lemkin သာ ကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုရင် မဆွတ်ခင်ကတည်းက ညွတ်ချင်နေတဲ့ မိန်းမတွေလဲ ရှိပါတယ်။
Raphael Lemkin ဟာ ဒါတွေကို အာရုံမထားနိုင်လောက်အောင် အလုပ်ထဲပဲ နစ်နေတဲ့သူပါ။
ဒီလိုနဲ့ ၁၉၅၉ခု သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin ( အပိုင်း- ၉ )
၁၉၅၉ ခု ,သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်မှာ Dr.Raphael Lemkin ဟာ သူအလုပ်လုပ်နေကျ ရုံးခန်းလေးထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ တွန့်ကျေနေတဲ့ သူ့ကုတ်အင်္ကျီကနေ ထိုးထိုးထောင်ထွက်နေတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ; တခန်းလုံးပြည့် ပွစာကျဲနေတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက ပေးစာပြန်စာတွေ ၊ ဥပဒေစာအုပ်တွေနဲ့ Raphael Lemkin ဟာ ထုံးစံအတိုင်း အလုပ်အရမ်းရှုပ်နေတဲ့ပုံစံပါပဲ။
သို့သော် ပုံစံကပုံစံပါ ၊ပကတိကတော့ Raphael Lemkin ရဲ့ ဝိညဉ်ဟာ သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကို စွန့်ခွာသွားခဲ့ရှာပါပြီ။
ဟုတ်ကဲ့ Dr.Raphael Lemkin ဟာ ကွယ်လွန်သေဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။
၁၉၅၉ သြဂုတ်လ ၂၈ မှာပါ
မနုသလူသားမျိုးနွယ်အတွက် ကိုယ်ကျိုးမဖက် ဇွဲနပဲနဲ့ အလုပ်လုပ်ခဲ့သောDr.Raphael Lemkinကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။
ယေးလ်ဥပဒေတက္ကသိုလ်မှာ ကထိက အဆင့်ရှိသူ ဥပဒေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ Dr. အဆင့်ရှိသူ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံရဲ့ အမြင့်ဆုံးကိုတက်ပြီး တကိုယ်တော်ကျဲ နိုင်ပွဲထူခဲ့သူ ; သူ သေဆုံးသွားတော့ ပိုင်ဆိုင်မှု ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ၊
ခြူး တပြားတောင် မရှိပါဘူး။
တင်စားပြောတာ မဟုတ်ပါ တကယ်ပဲ ပိုက်ဆံတပြားမှကို မရှိတာပါ။
ဒီလောက်ထိ လူသားထုအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပေးဆပ်ခဲ့ သူအတွက် မနုသလူသားထုကြီးတရပ်လုံး ကြိမ်အုံးပူမီးကြွ၍ Dr.Raphael Lemkin အတွက် ဝမ်းနည်းကြပြီး ဈာပနကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ
Raphael ရဲ့ ဈာပန ဟာ လိုက်ပို့သူတောင် ၇ ယောက်ပဲ ရှိခဲ့ရှာပါတယ်။
Raphael Lemkinရဲ့အလုပ်လုပ်ရင်းသေဆုံးသွားတဲ့အနေအထားကလဲ ” မင်းတို့လူသားတွေ genocideရာဇဝတ်မှုကိုတားဆီးဖို့ လုပ်စရာတွေ အများကြီးလိုနေသေးတယ်နော ” လို့ပြောနေသလိုပါပဲလား။
ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူကများ နားထောင်လေမလဲ
Raphael Lemkin ထွန်းညှိသွားတဲ့ ဥပဒေမီးရှူးတိုင်ဟာလဲ ၊မငြိမ်းပေမဲ့ အလင်းလျော့ခဲ့လေပီလားတော့မသိ၊ ၁၉၄၈ UN မှာ Genocide တားဆီးရေး convention ကြီးရှိလျက်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ genocide တွေ ဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
လူသန်း ၅၀ အသက်ပျောက်ခဲ့ရပြီး၊ နောက်ထပ် လူသန်း ၅၀ ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ genocide ဖြစ်စဉ်ပေါင်း ၄၀ ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါဆို Raphael Lemkin လုပ်သမျှ သဲထဲရေသွန်ပေါ့
ကျနော် ရေးထားတဲ့ kosovo ဖြစ်စဉ်ကိုသာ ပြန်ဖတ်ကြည့်လေ။
ဒါဆို Raphael Lemkin ထွန်းညှိခဲ့တဲ့ ဥပဒေမီးရှုးတန်ဆောင်ကို ဆက်လက်ထွန်းညှိသူတွေ ရှိတယ်ပေါ့
Raphael Lemkin နောက်ပိုင်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သူတွေထဲမှာ ၊အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေ CIA လူတချို့ တောင် ပါခဲ့ကြတယ်ဗျ။
၁၉၈၆ ခုနှစ်မှာတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ genocide တားဆီးရေးနဲ့ ကျူးလွန်သူကိုအရေးယူဖို့ ဥပဒေပြဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၁၉၄၈ ခုနှစ် UN General Assembly မှာ Raphael Lemkin ကိုယ်တိုင်မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ genocide ကာကွယ်တားဆီးရေးနဲ့ ကျူးလွန်သူကို အပြစ်ပေးရေး ဥပဒေဟာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်အလွန်မှာ ဗလ ထွက်ခါစ လူပျိုပေါက်လေးလို သန်စွမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ အားကောင်းစ ဗလ နဲ့ ရာဇဝတ်ကောင် မီလိုဆီဗစ် နဲ့ အပေါင်းအပါတွေကို အလဲလဲအကွဲကွဲဖြစ်အောင် ထိုးနှက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အချုပ်အချာအာဏာဆိုတဲ့ ဒိုင်းနဲ့ ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားလဲ အဲ့ဒီ ဒိုင်းကိုပါ ကွဲထွက်သွားအောင် လက်သံပြောင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀ ရာစု အစပိုင်း မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အာမေနီးယန်းတွေကို တူရကီပြည်ထဲရေးက genocide လုပ်တုန်းက လူသားထုဟာ ဒီဖြစ်စဉ်ကို ဘယ်လိုနာမည်တပ်ရကောင်းမှန်းတောင် မသိကြပါဘူး။ ၂၀ ရာစု အဆုံးသတ်ခါနီး ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာတော့ လူသားထုဟာ genocide ဖြစ်စဉ်တရပ်ကို စတင်ဖြစ်ပွားစဉ်မှာပဲ ကြိုတင်သိရှိနိုင်ခဲ့ပြီး ကြီးထွားမလာအောင် တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၁ ရာစုမှာတော့ Genocide Watch လို အဖွဲ့အစည်းတွေ ;
International Criminal Court လို နိုင်ငံတခုချင်းစီရဲ့ အချုပ်အချာအာဏာ ထက်ပိုပြင်းတဲ့ တရားစီရင်ရေးအာဏာကိုစွဲကိုင်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ တရားရုံးတော်တွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါပြီ။
ဒါဟာ Dr.Raphael Lemkin ရဲ့ ဥာဏ်ပညာ အားထုတ်မှု၊ ဇွဲထက်သန်မှု နဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့်မှုတို့ ကြောင့်ပါပဲ
Dr. ရဲ့ ဒီကြိုးပမ်းမှုအတွက် ကောင်းသောအစားရပါစေသတည်း
Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin ( နိဂုံး )
ကျနော် documentary တွေ အတော်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒီထဲကမှ စိတ်ကိုနစ်နစ်နဲနဲ ထိခိုက်စေတဲ့ documentary တခုရှိတယ်။ BBC က ရိုက်ကူးထားတဲ့ Auswitch, The Nazi’s Final Solution to the Jewish Problem ဆိုတာပါ။ Auswitch အကျဉ်းစခန်းအကြောင်း အဓိက ရိုက်ကူးထားပြီး နာဇီတွေရဲ့ ကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင် ဂျူးတွေ အပေါ် နှိမ့်ချ ဆက်ဆံမှုတွေကနေစပြီး နောက်ဆုံးစစ်ကြီးပြီးတဲ့ အထိ ရိုက်ကူးထားတာပါ။
documentary တခုလုံးဟာ စိတ်သက်သာစရာ တစက်မှ မရှိပါဘူး၊ ရင်ဆို့စရာ ဝမ်းနည်းစရာ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာတွေနဲ့ချည်းပြည့်နေတာပါ။ မကြည့်တော့ဘူးကွာ လို့ ထပိတ်မိတာလည်း ခဏခဏပါ
အသတ်ဖြတ်ခံရခါနီး ဂျူးအမျိုးသမီးတွေကို ကလေးတွေနဲ့ခွဲခွာတဲ့ မြင်ကွင်း ဒီကလေးတွေကို လည်း နာဇီဆရာဝန်တွေက လူသားစမ်းသပ်ကောင်အဖြစ် အသုံးချဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အကြောင်းတေ ပါလာတော့ ကျနော် မျက်ရည်တောင်ကျမိပါတယ်။
ဒီ post တွေကို ရေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တခုတည်းပါ။
Dr.Raphael Lemkin ဆိုတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ လူသားထုအပေါ် ပြု ခဲ့တဲ့ ကျေး ဇူးကို ပြန်လည်အောက်မေ့ရာမှာ အုပ်တချပ်သဲတပွင့် ဖြစ်စေဖို့ရာပါ။
လူ့သမိုင်းစကတည်းက စစ်နဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေ မကင်းခဲ့ကြပါဘူး။ အားကြီးသူက အားနဲသူကို အနိုင်ကျင့်စမြဲပါ။ ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်ကနေ လူသားမျိုးနွယ်တွေ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာ နည်းလှမှာ မဟုတ်ပါဘူး
”အဲ့လူမျိုးတွေပျောက်သွားတော့ကော ဘာဖြစ်လဲကွ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားနေရ ပြီးတာပဲ မဟုတ်လား။ ငါတို့လူမျိုး ဘာမှ မဖြစ်ရင် ပြီးတာပဲ ဟေ့ ”လို့ အတ္တအခြေခံ အသိခေါက်ခက်နဲ့ ပြန်ပက်သူလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။
နည်းနည်းလောက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင် ဟစ်တလာ သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဂျူးကလေးတွေထဲမှာ အိုင်စတိုင်းလို genius ဘယ်နှစ်ယောက်ပါသွားမလဲ။ အဲ့ကလေးတွေထဲမှာ အိုင်းစတိုင်း မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ သီအိုရီတွေကို ရှင်းထုတ်မဲ့ ကလေးတယောက်လောက် မပါနိုင်ဘူးလား? တကယ်လို့ပါသွားခဲ့ရင် လူ့သိပ္ပံပညာတိုးတက်မှုဟာ နှစ် ဘယ်လောက် နောက်ဆုတ်သွားပြီလဲ? အိုင်းစတိုင်းစခဲ့တဲ့ ရူပဗေဒသီအိုရီအချို့ဆို ခုထိ ဘယ်သူမှ
ဟစ်တလာ သတ်ခဲ့တဲ့ဂျစ်ပစီ ကလေးတွေထဲမှာ အနုပညာ ဂီတ ထွန်းပေါက်မဲ့ ကလေး ဘယ်နှစ်ယောက်ပါသွားမလဲ။ ပါသွားခဲ့ရင် လူ့ယဉ်ကျေးမှုဟာ နှစ်ဘယ်လောက် နောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့သလဲ။ ဘယ်သူမှ တွက်ချက်မရတော့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ မျိုးဖြုတ်ခံရတဲ့ red indian တွေ မာယာလူမျိုးတွေထဲမှာကော လူသားတိုးတက်မှုကို ရှေ့တိုးစေမဲ့ ကလေး ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ပါသွားပြီလဲ။ ဒါဆို နှစ်ပေါင်းထောင်ချီ အတွင်း သတ်ဖြတ်လာခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲတွေ genocide ဖြစ်စဉ်တွေဟာ မနုသလူသားတိုးတက်ရေးကို ဘယ်လောက်ထိ နောက်ပြန်ဆွဲစေခဲ့ပြီလဲ။
လူ့သမိုင်းသာနှစ်ထောင်ရှိလာခဲ့တယ်။ ဒီလိုသတ်ဖြတ်မှုတွေ ဖျက်ဆီးမှုတွေကို တားရကောင်းမှန်း အရေးယူရကောင်းမှန်း မသိခဲ့ကြဘူး။
အဲ့လို မသိရုံမက ဒီလို သတ်ဖြတ်မှု ရိုင်းစိုင်းမှု ယုတ်မာမှုတွေဟာ ”နိုင်ငံတော်အတွက်” ”အချုပ်အချာအာဏာအတွက်” လုပ်တာမို့ လိုအပ်လို့လုပ်တာ ဘာမှ တွန့်ဆုတ်နေစရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေအထိ ခံယူကြတယ်
မျက်မွေးတထောက်စာသာ ရှိတဲ့ တမျိုးသားရေးအတ္တအတွက် မျက်စိတဆုံးစာမကသော လူသားမျိုးနွယ် တခုလုံးရဲ့အနာဂတ်ကို ဖျက်ဆီးကြတယ်။
ဒီလို တမျိုးသားကောင်းစားရေး ဝါဒတွေ အရှိန်ကောင်းနေဆဲမှာ Dr.Raphael Lemkin ဟာ လူသားမျိုးနွယ်အားလုံး အတွက် ကိုယ်ကျိုးမဖက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူပါ။
သူ့ကျေးဇူးကို ကျနော်တို့အောက်မေ့ရပါမယ်။ အလေးထားရပါမယ်။ ဒါမှသာ ကျနော်တို့ဟာ လူပီသရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။
Dr.Raphael Lemkin နှင့် အချစ်ရေး
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”
နာဇီရန်ကလွတ်ဖို့ ပိုလန်ကထွက်ပြေးခါနီး သူ့အမေက Dr.Raphael Lemkin ကို မှာတယ်
” စာတွေရေးတာလည်း အရေးကြီးတာပေါ့ / ဒါပေမဲ့ နှလုံးသားကိုရှင်သန်အောင်ထားဖို့ကလည်း အရေးကြီးတယ်နော် ” တဲ့
ဆိုလိုချင်တာက အလုပ်ချည့်ပဲဖိမလုပ်နဲ့ ရည်းစားလေးဘာလေးထားပေါ့ဗျာ / Dr.Raphael Lemkin ကတော့ ရည်းစားကိစ္စတိတိပပ ပြန်မဖြေနိုင်ပဲ ထွက်ပြေးဖို့ပဲအားသန်နေခဲ့တာလေ
US ကိုရောက်တော့လည်း ရည်းစားထားဖို့ အားမထုတ်ပဲ genocide ကိစ္စပဲအားထုတ်တာလေ
ဥပဓိရုပ်ခန့်ခန့် နဲ့ တက္ကသိုလ်က ကထိက Dr.တျောက်အတွက်
မိန်းခလေး မရှားပေမဲ့ Dr.အတွက်ကတော့ နီးလျက်နဲ့ဝေးပါပဲ
မဆွတ်ခင်က ညွတ်နေတဲ့ အသီးတွေကို လက်တချက် မလှမ်းခဲ့သူပါ
အဲ. . . .
Dr.Raphael Lemkin တယောက် ကောင်မလေးတျောက်နဲ့
၁၉၄၈ Genocide Convention ကို UN General Assembly မှာပြဌာန်းအပီး Dr.ဟာ ပျော်လွန်းလို့ ပျော်ပွဲစားရုံတခုကို သွားခဲ့ပါသတဲ့
အဲ့ဒီမှာ ဂျစ်ပစီလူမျိုးကောင်မလေးတျောက်နဲ့ အဆင်ပြေသလိုဖြစ်ပီး Dr.နဲ့ ဂျစ်ပစီမလေး စကားလက်ဆုံကျပါရောတဲ့
သာမန်ဆိုရင်တော့ တော်ကီတွေပွား အဆင်တွေဆက်ပြေပီး
ဒါပေမဲ့ Dr.Raphael Lemkin က ဂျစ်ပစီမလေးနဲ့ နှစ်ယောက်တည်းစကားဝိုင်းမှာ ဂျစ်ပစီလူမျိုးတွေ ခေတ်အဆက်ဆက် ဂျင်နိုဆိုဒ်လုပ်ခံရပုံတွေကို ပြောပါရောတဲ့
ဟိုက ပျော်ပွဲစားရုံက ကောင်မလေးလေဗျာ
ဒါတွေ ဘယ်စိတ်ဝင်စားမလဲ / ဒီတော့ ရှောင်ထွက်သွားရောပေါ့
ဒီလိုနဲ့ ဘာဆို ဘာမှ မဘာလိုက်ရဘူးတဲ့
Dr.Raphael Lemkin ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေက အိမ်ထောင်ပြု ဖို့တိုက်တွန်းကြပေမဲ့ Dr. က ” ကျနော်အိမ်ထောင်သားမွေးလုပ်ဖို့ အချိန်မရှိပါဘူးဗျာ ” လို့ပဲ တုံ့ပြန်ခဲ့သတဲ့
တကယ်လည်း အလုပ်ထဲနစ်ပီး အချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့ Dr. ဟာ သေတဲ့အထိလူပျို ကြီးဘဝနဲ့ ပဲ သက်တမ်းကုန်သွားခဲ့ရှာတယ်။
Posted by: rightsforburma | on August 25, 2015
လွှတ်တော်နိုင်ငံရေး ဖြစ်ထွန်းလာရင်- ကိုယ်စားပြု အမတ်ဆိုတာ လိုလာမှာပါပဲ-
လူထုဟာ အမတ်ကို ရွေးချယ်တတ်ဘို့ လိုပါတယ်။
ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ စကားကို –
(၁) လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြောမယ့်သူ-(၂) ပြောရဲသူ (၃) တိုတုတ်ရှင်းလင်းစွာ ပြောတတ်သူ (၄) မိမိ မဲဆန္ဒရှင်များရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ဖြစ်လိုစိတ်ကို သိနိုင်အားရှိသူ (၅) သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို နှံ့စပ်ပြီး ဥပဒေဘောင်တွင်းမှာ ယုတ္တိကျကျထောက်ပြတတ်သူ (၆) အချိန်အခါ အလျှောက် တွေဝေနေခြင်း မရှိသူ- (၇) ကပ်ဖားယပ်ဖားမဟုတ် ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သူ (၈) လူထုအတွက် ကိုယ်စားပြု အမတ် တစ်ကယ်လုပ်ချင်သူ- တို့ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
မရွေးချယ် အပ်- မဲမပေးအပ်သော သူများမှာ-
(၁) အမတ်လုပ်ချင်လွန်းလို့ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် အမတ်ဖြစ်ပြီးရော ကတိအလွယ်ပေးတတ်သူ (၂) ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် စကားပြောတတ်သူ (၃) မဲဆန္ဒရှင်များက ဖေါ်ပြောမှ သိတတ်သူ (ကိုယ်ပိုင်အမျှော်အမြင်နည်းသူ) (၄) အပေါ်ဖားအောက်ပိ စိတ်ရှိသူ- စတဲ့ လူတွေကို ရှောင်ရပါမယ်။
ပါတီတစ်ခုအတွင်းမှ အမတ်လောင်း ဖြစ်သော်- ပါတီရဲ့ မူနဲ့ အဲ့ဒီပါတီရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပါတီမှ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသူထဲမှ အများစုရဲ့ သဘောထားကို လေ့လာရပါမယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ အမတ်လောင်းတစ်ဦးဟာ အလွန်တော်နေပေမယ့်- သူ့ပါတီရဲ့ မူ ကြောင့် လူထုအတွက် ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်တာများလည်း ရှိပါတယ်။ (ပါတီရဲ့ မူကို ကျော်ဖြတ်နိုင်သူကတော့ တစ်ကယ့် သူရဲကောင်းပါ- အဲ့လို လူမျိုးကို ပါတီ မကြည့်ဘဲ မဲပေးသင့်ပါတယ်။ အမတ်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။)
ဒေသ တစ်ခုချင်းက မဲဆန္ဒရှင်များ အနေနဲ့- မိမိရဲ့ ဆန္ဒကို တစ်ကယ့် အခက်အခဲ အချိန်မှာ ဘယ်အမတ်တွေက ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်စားပြု ပြောဆို လုပ်ဆောင်ပေးမလဲ ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ- လွန်ခဲ့တဲ့ အမတ်များကို ကြည့်ပါ။ ဥပမာ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်က အမတ်က မင်္ဂလာဒုံလူထုအတွက် ကိုယ်စားပြုပြီး ဘာတွေ လုပ်ပေးခဲ့သလဲ၊ ဘာတွေများ လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြောပေးခဲ့သလဲ။ အလားတူ တာမွေမြို့နယ်၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်-၊ စသည်ဖြင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်၊ ဒေသ အမတ်တွေ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်ဒေသ ကိုယ်လူထုတစ်ရပ်၊ ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်း အတွက် ဘာမှ အသုံးမကျတဲ့ အမတ်များကို (ပါတီကြောင့် ဆိုတဲ့ အစွဲကြောင့်) ဆက်လက် မဲ မပေးသင့်ပါ။ အော် သူဆိုရင်တော့ ငါတို့အတွက် တစ်ခုခုတော့ ပြောဆို လုပ်ကိုင်ပေးမှာပဲ ဆိုတဲ့ အမတ်လောင်းများ ပေါ်လာရင် အဲ့ဒီ အမတ်ကို လေ့လာပါ။ တစ်ကယ် သတ္တိရှိရဲ့လား၊ တစ်ကယ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိရဲ့လား-၊ တစ်ကယ် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ရဲ့လား- (လူဆိုတာ ၁၀၀% စိတ်တိုင်းကျ မဟုတ်နိုင်ပေမယ့် ရာနှုန်းအများ အားသားချက် ရှိရင်) အဲ့ဒီ အမတ်လောင်းများကို မိမိမြို့နယ် မိမိဒေသ အတွက် လက်လွတ်ဆုံးရှုံး မခံသင့်ပါ။
မဲဆန္ဒရှင်များ လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပါစေ။